ပလတ်စတစ်ပန်း – Grab Love Story
သူဂရုတစိုက် တယုတယ ပြုစုခဲ့တာ…
ပလတ်စတစ် ပန်းလေး ဖြစ်နေတော့…..
လောင်း… လောင်း… လောင်းလိုက်ပါ ရွှဲအောင်လောင်းလိုက်ပါ… ပက် ပက် ပက်လိုက်ပါ ညီမလေးတွေလဲပါ….
သီချင်းသံများနှင့်အတူ လူတွေသည်လဲ စည်းချက်ညီ လိုက်ပါစီးမျောနေကြသည်။ ကိုကို တစ်ယောက် မဏ္ဍပ် ပေါ်မှ ပျော်မြူးနေကြသော လူတွေကို ကြည့်ကာ စိတ်တွင်းမှာ အလိုလို ပျော်လာသည်။
ဒီမဏ္ဍပ်ပေါ်မှာ သူ့တစ်ယောက်တည်း လက်ထဲမှာ ဘီယာခွက်ကိုင်ကာ ထိုင်နေရင်း လမ်းမပေါ်မှ ပျော်နေသော လူများကို ကြည့်နေခြင်းဖြစ်သည်… ထိုအချိန်တွင် စစ်စိမ်းရောင် ဝီလီဂျစ်လေးတစ်စင်း
မဏ္ဍပ် နံဘေးကပ်ရပ်လျက် ကားပေါ်မှ ရေစိုအဝတ်များနှင့် ကိုယ်ပိုင်အလှများကို အားရပါးရ ဖွင့်လှစ်ထားသော မိန်းကလေးများ ဆင်းလာကြသည်။ ကိုကိုလဲ တပ်ထားသော နေကာမျက်မှန်အောက်မှပင်
အလှအပများကို ရှုစားနေစဉ် ….
“ဟဲ့ ဟဲ့ နှင်းသက် နင်ရရဲ့လား”
ကားပေါ်မှ အဆင်း ကောင်မလေးတစ်ယောက် ဟန်ချက်ပျက်ကာ ချော်လဲတော့သည်။ ကိုကိုတစ်ယောက် မဏ္ဍပ်ပေါ်မှ ပြေးဆင်းကာ ကောင်မလေးကို တွဲပေးလိုက်သည်..
“ဟင်…. ရတယ် ကျေးဇူးပဲ”
“မူးနေတယ်နဲ့တူတယ်နော်.. လာ ဒီနားမှာ ခဏလာထိုင်လိုက်ပါလား…”
“ဟုတ် … ဒါနဲ့ တို့နာမည် ဘယ်လိုသိလဲ..”
“သူငယ်ချင်းတွေ ခေါ်တာ ကြားလိုက်တယ်လေ.. ကိုယ့်နာမည်က ကိုကိုပါ”
“အဟဲ မိုက်တယ်နော် နာမည်က… ခစ်ခစ် ကိုကို ဆိုတော့လဲ ကိုကိုပေါ့လေ”
အင်း…. ဒီကောင်မလေး မူးပီး အာသွက်လျှာသွက်ဖြစ်နေတာ ဖြစ်မယ် … တော်ရုံဆိုလျှင် ကိုကို့နာမည်က မိန်းကလေးတွေ သိပ်မခေါ်ချင်ကြသော နာမည်ဖြစ်သည်..
သို့ပေမယ့် ဒီကောင်မလေးက တော့ သာသာယာယာပဲ ကိုကို ပဲခေါ်မယ်တဲ့.. ကောင်မလေးကို တွဲကာ မဏ္ဍပ်နောက်မှ ထိုင်ခုံလေးတွင် နေရာချပေးကာ ကိုကိုလဲ ဘေးနားမှာ ဝင်ထိုင်မိသည်…
ကောင်မလေးရဲ့ သူငယ်ချင်းများကတော့ မဏ္ဍပ်ပေါ်ရောက်ကာ ကဲနေကြပြီဖြစ်မယ်… ဒီကောင်မလေးတစ်ယောက်သာ ဘယ်လောက်တောင် သောက်ပီး ဘယ်လိုမူးလာသည်တော့မသိ မျက်စိတောင် မဖွင့်နိုင်တော့
သင်္ကြန်ရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်အရ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ကူညီဖေးမခြင်းက အပြစ်မဟုတ်လို့ ကိုကိုသည် ခေါင်းငိုက်စိုက်ကျနေသော ကောင်မလေးရဲ့ ခေါင်းကို တည့်မတ်ပေးကာ
သူ့ပုခုံးတစ်ဖက်ကို အခကြေးငွေ မယူပဲ ငှားလိုက်သည်။ ကိုကို သူ့ပုခုံးကိုမှီကာ အိပ်နေသော ကောင်မလေးကို ကြည့်မိသည်… မျက်နှာလေးက ရေစက်လေးတွေ သီးလျက် ဝင်းပနေသည်….
မျက်နှာဖောင်းဖောင်းလေးမှာ…. အယ်ကိုဟောလ်အရှိန်.. နေအပူရှိန်ကြောင့် နီမြန်းမြန်းလေး ဖြစ်နေသည်က တစ်မျိုးချစ်စရာကောင်းနေသည်။ ပုခုံးကျော်ကျော်လေးသာရှိသော ဆံပင်စင်းစင်းလေးတွေကို
နေကာမျက်မှန်နှင့် ပင့်သိမ်းထားသော မျက်နှာလေးက ရှင်းနေပြန်သည်။.. အသားအရေက ဖြူသည်မဟုတ် ၀ါညက်ညက်လေး…. မယ်ဗမာ ကိုယ်လုံးလို ကိုယ်လုံးဖွံ့ဖွံ့လေးကို အင်္ကျီကျပ်ကျပ်.. ဘောင်းဘီ ကျပ်ကျပ်ထဲ
အတင်းဖွက်ထားသော်လည်း ပေါ်လွင်လွန်းပြန်သည်။ ဟော… သူမချမ်းနေသည်လား မသိ…. ကိုယ်လုံးလေး တုန်လာသလိုပါလား… ကိုကို ထိုင်ခုံဘေးနားမှာရှိတဲ့ သူ့တဘက် အနီရောင်ကိုယူကာ
ကောင်မလေး ကိုယ်ပေါ်လွှမ်းခြုံပေးပီး ခပ်တင်းတင်းလေး ဖက်ထားမိသည်…. အင်း နိုးလာရင်တော့ ဘာပြောမလဲမသိ…
ကိုကိုတစ်ယောက် ကောင်မလေးကို ဖက်ထားရင်းပင်… မျက်စိမူးနောက်မတတ် ကဲနေကြသော လမ်းမပေါ်နှင့် မဏ္ဍပ်ပေါ်မှ လူများကို ကြည့်နေချိန်…
“ဟင် … ဟုတ်…. သြော် … ကိုကို ဟုတ်လားမသိဘူး နာမည်က “
“ဟုတ်ပါတယ် ကိုကိုပါ… “
“အဟဲ နည်းနည်းမူးသွားတယ် အိပ်ပျော်သွားတယ်နဲ့တူတယ်”
“ရပါတယ် နှင်းသက် ဗိုက်မဆာဘူးလား တစ်ခုခုသွားစားရအောင်လေ ကိုယ်ဗိုက်ဆာနေပြီ..”
“အင်း…. ဒါဆို သွားစားမယ် နှင်းသက်လဲ နည်းနည်းဆာတယ် နှင်းသက်ကျွေးမယ်လေ…”
ဒီလိုနှင့် ကိုကိုနှင့် နှင်းသက်တို့နှစ်ယောက် အနီးအနားမှ ဆိုင်သေးသေးလေးတွင် ဝင်ထိုင်ကာ အစားအသောက်များမှာယူပြီး စကားပြောကာ နောက်ရက်များ တွေ့ကြရန်
ဖုန်းနံပါတ် လဲကာ မဏ္ဍပ်သို့ပြန်ခဲ့ကြသည်။ မဏ္ဍပ်သို့ရောက်သော် နှင်းသက် သူငယ်ချင်းများက ပြန်တော့မည် ဆိုကာ နှင်းသက်ကို ခေါ်ပြီး ပြန်သွားကြသည်။
ကိုကိုသည် ကားပေါ်တက်ခါနီး သူ့ကို မျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်ပြကာ လျှာထုတ်ပြောင်ပြသွားခဲ့သော ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ရင်ဘတ်ထဲခေါ်ထည့်ရင်း အိမ်ပြန်လမ်းပေါ်မှာ
ကိုကို အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ည ၈ နာရီကျော်နေပြီ… သူငယ်ချင်းများက မပြန်သေးပဲ ကားပေါ်မှ လက်ကျန်များဖြတ်ရင်း မြို့ထဲ ကားလျှောက်မောင်းနေကြသောကြောင့် နောက်ကျလေပြီ…
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ တော်တော်တောင်ချမ်းနေပြီ… တော်သေးတယ် သင်္ကြန်ရေက လူနဲ့တည့်ကာ တော်ရုံမဖျားတတ်လို့ … ကမန်းကတမ်း ရေချိုးခန်းဝင် ရေလောင်းချိုးပီး အမူးလဲနည်းနည်းပြေသွားကာ
ဗိုက်ဆာသလိုလို ဖြစ်လာလို့ ထမင်းစားခန်းထဲ ရှိတာ လှန်လောရှာဖွေ စားသောက်ကာ အခန်းထဲ ဝင်ခဲ့တော့သည်…
အာမီရမ် အာမီရမ် အေ့ …အေ့ ….. ဝီချကီ ဝီချကီ .. အေ့. …… အေ့ ….. ထန်းရည်နဲ့ ဘီယာလဲ ရဒယ် … လဲသွားရင်ထူပေးမလား ….
ဖုန်းသံမြည်လာလို့ ကြည့်လိုက်တော့ မသိသော နံပါတ်တစ်ခု… (ဟိဟိ ဖုန်းမြည်သံက အချစ်တက္ကသိုလ်က Ringtone ကို ကိုယ့်ဘာသာ အသံသွင်းကာ လုပ်ထားတာ ၀ါကာ ၀ါကာ သီချင်းသံစဉ်)
ဘယ်သူလဲ မသိဘူး နာရီကြည့်တော့ ကိုးနာရီကျော်နေပြီ…
လေလှိုင်းထဲမှ ဖြတ်သန်းစီးဆင်းလာသော သာယာနာပျော်ဖွယ် အသံလေး… အိုး…….. ဒီအသံလေးကို မှတ်မိတာပေါ့ နေ့လည်က ကောင်မလေး နှင်းသက်….
“ဟယ် နှင်းသက်မှန်း ဘယ်လိုသိလဲ…”
“အံမယ် ပိုပြီ နေ့လည်က ဖုန်းနံပါတ် ပေးထားတာ မှတ်မိလို့မဟုတ်လား”
“မဟုတ်ပါဘူး နှင်းသက်ရယ် နံပါတ်က တစ်ခေါက်ပဲ ကြည့်ပီး.. ပိုက်ဆံအိတ်ထဲ ထည့်လိုက်တာပါ ပြန်တောင် မကြည့်ရသေးဘူး”
“ဟွန့်…. ဒါဆို ကိုကိုက နှင်းသက်ဆီ ဖုန်းမဆက်ဘူးပေါ့ ဟုတ်လား တော်ပြီ သွား……. မဆက်တော့ဘူး”
“အာ……… မဟုတ်ပါဘူး ခုလေးတင်ရေမိုးချိုး ထမင်းစားပီးလို့ အခန်းထဲရောက်တာပါ စောနက ထမင်းစားရင်းနဲ့တောင် နှင်းသက်ကို သတိရနေတာ ဟဲဟဲ
ထမင်းစားပီးမှ ဖုန်းဆက်မလို့ နှင်းသက်က ဦးသွားတာ”
“တကယ်ပါ နှင်းသက်ရယ် နှင်းသက်ပြန်သွားပြီကတည်းက နှင်းသက်ပုံရိပ်လေးက ကိုယ့်ဆီမှာ တစ်ပါတည်း ပါလာပီးသားပါ..”
“ဟိတ် လူကြီး ဟိုး…………စတော့ နှင်းသက် ပျင်းလို့ ဖုန်းဆက်တာ.. တစ်ခြားဟာပြောရအောင်…… နော်… နှင်းသက် စိတ်ညစ်စရာလေးတွေ ရှိလို့
“နှင်းသက် အသည်းကွဲနေတယ် ကိုကိုရယ်……”
ထိုညက နှင်းသက်နဲ့ ကိုကို စကားပြောတာ တော်တော်ကြာသွားသည်… နှင်းသက်က အသည်းကွဲနေတယ်တဲ့ ထို့ကြောင့် ဘီယာနှင့် ၀ိုင် သောက်ကာ မူးလာတာတဲ့ သူ့ကောင်လေးနှင့်သူ အဆင်မပြေဖြစ်လာတဲ့
အကြောင်းများကို ကိုကို့ကို လာပြောပြနေသည်…. နှင်းသက်က ခု ဒုတိယနှစ်တက်နေတဲ့ကောင်မလေး ၁၈ နှစ်ပြည့်ပီးခါစ ရင်ခုန်သံတွေ အရှိန်ရခါစမို့ထင်ပါရဲ့…. ကိုကိုက ၂၀ စွန်းခါစ ရင်ခုန်သံကို ထိန်းနိုင်ပြီလို့
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထင်ချိန်… နှင်းသက်ပြောတာက ကိုကိုက ချောတယ်တဲ့ … ကိုကိုကအရပ်မမြင့်ပါ… ငါးပေ ၆ လက်မ ခန့်သာ ရှိပါသည်… သို့သော် အရပ်နှင့် လိုက်ဖက်ညီသော ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်.. စိုပြေသော
အသားအရည်နှင့် တွေ့သည့်သူတိုင်း အဖြောင့်ဆွဲထားလားဟုမေးကြရအောင် ဖြောင့်စင်းနေသော ဆံပင် စင်းစင်းတို့က ကိုကို့ကို မိန်းကလေးတို့ စိတ်ဝင်စားအောင် ကူညီပေးနေကြသည်လေ..
ထိုညက နှင်းသက်က သူ့ကောင်လေးက သူ့အပေါ်အနိုင်ကျင့်ကြောင်း ပြောလိုက်တိုင်း ကိုကိုခမျာ ကိုယ့်ညီမအရင်း အနိုင်ကျင့်ခံရသလိုပင် ဆတ်ဆတ်ခါ နာကျင်ခဲ့သည်… နှင်းသက်ကို အားပေးစကားပြောရင်း
နှင်းသက်ဆီမှာ ငိုရှိုက်သံစွက်သည့် စကားလုံးများကြားရတိုင်း နှင်းသက်ဆိုသော ကောင်မလေး ကိုကို့ရင်ထဲ တစ်ဖြည်းဖြည်းချည်းနင်းဝင်ရောက်လာပြီကို ကိုကိုသိခဲ့သည်….
ကိုကိုနှင့် နှင်းသက် ညဘက်ရောက်တိုင်း ရင်ခုန်သံချင်း ဖလှယ်ခဲ့ကြသည်.. လေလှိုင်းလေးမှ တစ်ဆင့်ပင် နှင်းသက်နဲ့ ရင်းနှီးခဲ့ကြသည်…
အပြင်မှာတွေ့ဖို့ပြောတိုင်းနှင်းသက် ရှောင်ဖယ်နေသည်… အပြင်မထွက်ချင်ဟု အကြောင်းပြက ငြင်းခဲ့သည်… ညတိုင်းဖုန်းပြောရင်း နှင်းသက်ရဲ့ ဒဏ်ရာကို ကိုကိုကုစားပေးခဲ့သည်မှာ ခုဆို တစ်လပင် ကျော်လာပြီ…
“ဟယ်လို နှင်းသက် “
“ကိုကို နက်ဖြန် နှင်းသက် မွေးနေ့ ဘုရားသွားမယ် လိုက်ပို့မလား…”
“မနက် ၆ နာရီလောက်သွားမယ်လေ ကိုကို နဝဒေးလမ်းသိတယ်ဟုတ် အဲ့ဒီရှေ့မှာစောင့်နော် နှင်းသက်လာခဲ့မယ်…”
“အိုကေ နက်ဖြန် ၆ နာရီနော်”
“မနက်နော် ကိုကို ညနဲ့ မှားနေဦးမယ် “
“အေးပါ ကိုယ်သိပါတယ် နှင်းသက်ရဲ့”
ကိုကိုတစ်ယောက် နှိုးစက်ပေးထားသော နာရီကို ပြန်ပိတ်ပြီး အိပ်လိုက်မိပြီ….
နိုးလာတော့ နာရီကြည့်လိုက်မိသည်က ၆ နာရီထိုးရန် နာရီဝက်သာလိုတော့သည်… အိပ်ယာမှ ဝုန်းဒိုင်းကြဲထပြီး ရေမိုးချိုးအဝတ်အစားလဲကာ ကမန်းကတန်းပင် ကားယူကာ အိမ်မှ ထွက်လာခဲ့သည်…
လမ်းရောက်မှ နှင်းသက်အတွက် ဝယ်ထားသော မွေးနေ့လက်ဆောင်မေ့ခဲ့ပြီ….. ဟာ………. ကွိုင်ပဲ မတတ်နိုင်…
နဝဒေးလမ်းထိပ်တွင် ကားရပ်လိုက်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကြည့်လိုက်တော့…. တွေ့ပါပြီ… (အချိန်မီလေးပဲ)
ကိုကို့ ရင်ထဲက နတ်သမီးလေး… အဖြူရောင်တွင် အစိမ်းရောင် ပန်းချည်များထိုးကာ…
တရုတ်သိုင်းကားထဲမှ န၈ါးမယ် လို လှပနေသော လှုပ်လီလှုပ်လဲ့ လျှောက်လာတဲ့ ကောင်မလေးက ကိုကို အရမ်းချစ်မိနေတဲ့ နှင်းသက်တဲ့လားကွယ်…..
“လာ နှင်းသက် ” ပြောပြောဆိုဆို ကားရှေ့ခန်းတံခါးဖွင့်ပေးလိုက်သည်… အသာအယာပင် အိစက်စက် ကိုယ်လေးကို ကားကူရှင်ပေါ် ပစ်ထိုင်လိုက်သည်။
ဘုရားပေါ်တွင် နှင်းသက်ကို ဘာစကားမှ မပြောသေးပဲ ပန်းနှင့် ဆွမ်းတော်ပွဲ ကိုင်ကာ နံဘေးမှ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပင် လိုက်လာမိသည်…
စနေနံထောင့်တွင် ဘုရားမီးပူဇော် ဆွမ်းတော်ပွဲကပ် ပန်း ကို ကိုကိုကပ်ပေးလိုက်ကာ… ပုံပုံကလေးထိုင်ကာ ဝတ်ပြုနေသော နှင်းသက်ကို နံဘေးမှာ ထိုင်စောင့်ရင်း
ထွက်ပြူစနေရောင်အောက်မှ လှပတဲ့ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးလှုပ်စိလှုပ်စိနဲ့ ဘုရားဝတ်ပြုနေတာ မျက်တောင်ပင် မခတ်နိုင် ငေးကြည့်နေမိသည်…. (ငရဲကြီးတော့မှာပဲ)
အတန်ကြာ ဘုရားဝတ်ပြုပြီးသည်နောက်…. နှင်းသက် လှုပ်ရှားလာမှ ကိုကိုလဲ ကမန်းကတန်း အကြည့်လွှဲလိုက်သည်…
ဘုရားဝတ်ပြုအပြီး ရင်ပြင်တော်ပေါ်တွင် လမ်းလျှောက်ရင်း နှင်းသက်ကို ကြည့်ကာ ကိုကို ရင်ထဲမှ စကားလုံးက အပြင်သို့ အမှတ်မထင်လွှတ်ခနဲ့
တိုးတိုးလေးမှ တိုးတိုးလေး….. သို့သော် နှင်းသက်ကြားသွားသည် ထင့် မျက်နှာလေး ပြုံးယောင်ယောင်လေးနှင့် ကိုကို့ကို ကြည့်ကာ ပြန်လှည့်သွားသည်
“ကိုကို ပြန်ကြရအောင် နှင်းသက်ည ကျရင် ဖုန်းဆက်လိုက်မယ် “
“ဟင် ပြန်တော့မလို့လား ချက်ချင်းကြီး”
“အင်း အိမ်မှာ မေမေနဲ့ဖေဖေ့ကို ကန်တော့ရဦးမယ်လေ…”
“ ထောင် … ထောင် …. ထောင် ထောင့် …. ထောင် …….. ထောင် ….. ထောင် …. ထောင်ထောင့် …. ထောင် …. ကြပ်ကြီး ( တပ်ကြပ်ကြီး ) အုန်းကျွန်း ရေးလဲ အောင်မြင် …..
ကြပ်ကြီး ပီဒီအက်ဖ် လုပ်လဲ အောင်မြင် …. ကြပ်ကြီး ဖိုရမ်စုံအောင် ရောက်ခဲ့သည် …. ကျောင်းမှာပဲ ပျော်သည် …… ပြန်ပီ ……. ”
ဖုန်း Ring Tone ချိန်းလိုက်တာ တစ်ပတ်လောက်ရှိပြီ… အရင် Ring Tone က သူငယ်ချင်းတွေ ကြိုက်လို့ ယူထားလိုက်တော့ တီးလုံးတွေ တူနေလို့ ရွှေစင်ရတနာရွှေဆိုင် တီးလုံးအလိုက်ဖြင့်
အသစ်ပြန်ဖန်တီးပီး လုပ်ထားတာ ဖြစ်သည်… (ဟိဟိ) ;D ;D
နှင်းသက်ဆီမှဖြစ်ပါစေ… နှင်းသက်ခေါ်တာ ဖြစ်ပါစေ….ဟာ နှင်းသက်ဆီမှ မဟုတ်ပဲ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီက ဖြစ်နေသည်… ဘာညာသာရကာ ခဏပဲပြောပီး ဗိုက်နာလို့
တွိုင်းလက်ဝင်ချင်သည် ပြောပြီးစကားဖြတ်ကာ ဖုန်းချလိုက်သည်.. နှင်းသက်ခေါ်လို့ ဖုန်းမအားဖြစ်နေရင် နောက်မခေါ်တော့ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော့ အိပ်ယာပေါ်လှဲကာ ဖုန်းကိုကလိနေရင်း…
ဖုန်းစကရင်တွင် ပေါ်လာတာ ငြိမ်းအေးလွန်းတဲ့ မျက်နှာလေး မနက်က နှင်းသက် ဘုရားဝတ်ပြုနေချိန်တွင် နေရောင်လေးနှင့်အရမ်းလှလွန်းသောကြောင့် ဓါတ်ပုံရိုက်ယူထားမိတာ….
“အင်းပါ ယုံပါတယ် ကိုကို ဒီနေ့ နှင်းသက် ကိုကို့ကို ကျေးဇူးတင်တယ်နော် ”
“အဟင်း တကယ်ပါ နှင်းသက်ရဲ့ စိတ်ကို ပျော်အောင်လဲနှစ်သိမ့်ပေးတယ် စိတ်ဒဏ်ရာကိုလဲ မေ့နိုင်အောင် ကူညီပေးခဲ့တယ်
ကိုကိုက တကယ့်ကို နှင်းသက်စိတ်ထဲမှာ အားကိုးရာအစ်ကိုတစ်ယောက်ရခဲ့သလိုပါပဲ”
“နှင်းသက်ပြောတာ မပြီးသေးဘူးနော် ကိုကို ….. ကိုကို မနက်က နှင်းသက်ကို ကြည့်ပီး ဘာပြောလိုက်တာလဲ”
“ဟဲဟဲ ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူးနှင်းသက်ရဲ့”
“ကိုကို ယောကျာ်းမဟုတ်ဘူးလား ဘာပြောလိုက်လဲဆိုတာ ပြန်မပြောရဲဘူးလား”
“မဟုတ်ပါဘူး နှင်းသက်ရယ် နှင်းသက်စိတ်ဆိုးသွားမှာ စိုးလို့ပါ”
“မနက် က နှင်းသက် ဘုရားရှိခိုးရင်း ငါးပါးသီလလုံအောင်ထိန်းမယ်လို့ သစ္စာပြုထားတယ် ဒီနေ့ လူတွေကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်
“အင်း………နှင်းသက်………… နှင်းသက်ကို ကိုယ်အရမ်းချစ်တယ် နှင်းသက်ရယ်….”
“ကိုကို ခုချိန်ကနေစပြီး နှင်းသက် ကိုကို့ရဲ့ နာမည် ကို နှစ်လုံးကနေ တစ်လုံးတည်းပဲ ကိုလို့ခေါ်တော့မယ်နော်”
“တကယ် …. တကယ်လား နှင်းသက် နှင်းသက် ကိုယ့်ကိုချစ်တယ်ပေါ့နော်”
“ပြောရဦးမှာလား ကို ရယ်…..”
“ကိုယ် အရမ်းကြားချင်တယ် နှင်းသက်ရယ် ကိုယ့်ကို ချစ်တယ်လို့ တစ်ခွန်းလောက်ပြောပါလား”
“နှင်းသက်မွေးနေ့မှာ အားလုံးကို စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားမယ်ဆိုတော့လဲ……
နှင်းသက် ကို့ကို အရမ်းချစ်ပါတယ် ကိုရယ် ဒါပဲနော် ကိုအိပ်ပျော်အောင် အိပ် နှင်းသက်လဲ အိပ်တော့မယ်”
အသံချိုချိုလေးနှင့် ပြောကာ ဖုန်းချသွားသော်လည်း ကိုကို တစ်ယောက် ဖုန်းကိုကိုင်ကာ အိပ်ယာပေါ်တွင် ပြုံးပြုံးကြီး အတိတ်မေ့နေတော့သည်… ကိုကို တစ်ယောက် ရည်းစား မထားဘူးတာလဲ မဟုတ် ရည်းစားထားဖူးပါသည်…. သို့သော် ထားဖူးသည်မှာ တစ်ယောက်သာ ဖြစ်သည်… ထိုတစ်ယောက်နှင့်လဲ ဘာဆိုဘာမှ မဘာလိုက်ရပင် လက်တောင် ကောင်းကောင်း မကိုင်ဖူးလိုက်…. ခုတော့ နှင်းသက်ရဲ့ အကြည့် နှင်းသက်ရဲ့ အမူအယာ နှင်းသက်ရဲ့ အပြောချိုချိုလေးတွင် ကိုကိုတစ်ယောက် အတိတ်မေ့ရချေပြီ…..
ထိုညက ကိုကို အိပ်မက်ထဲတွင် နှင်းသက်နှင့် ကုလားကားထဲကလိုလဲ တွဲကကြသည်… အံမယ် သီချင်းတွေဆိုပီး ကကြတာ မိုက်သား….
မနက်စောစောနိုးလာသော ကိုကို အသစ်စက်စက်ဖြစ်ထားသော ချစ်သူလေးထံ ချစ်သဝဏ်လွှာလေးပို့ရန် ဖုန်းကိုယူကာ ကြည့်လိုက်တော့ ချစ်သူအသစ်စက်စက်လေးက
သူ့ထက်ဝိရိယ ကောင်းစွာ မနက် ၆ နာရီလောက်ကတည်းက ကိုကိုထံ
“Morning ko…. I Love you
ဆိုတဲ့ စာတိုလေးက ရောက်နှင့်ပြီ…. ကိုကို ပြုံးလိုက်မိသည်… ရင်တွေ ခုန်လှချည်လား ကိုကိုရယ် မင်းက မြီးကောင်ပေါက် (၁၆) နှစ်သားလဲ မဟုတ်ပဲနဲ့….
“I Love You Hnin….
ကိုကို စာကို တိုတိုလေးပဲ ရေးကာ ပြန်ပို့လိုက်သည်… ပီးတော့ ရေမိုးချိုး အဝတ်အစားလဲကာ ၀ါသနာပါရာ ဖွင့်ထားသော ဓါတ်ပုံဆိုင်လေးသို့ ထွက်လာခဲ့သည်…. ကိုကို က ဓါတ်ပုံ၊ဗီဒီယို အက်ဒစ်တင်း ၀ါသနာပါသောကြောင့် ဓါတ်ပုံဆိုင် သေးသေးလေးဖွင့်ထားသည်… ဓါတ်ပုံဆိုင်ဆိုသော်လည်း စာစီ၊စာရိုက်၊ဒီဇိုင်းဆွဲ အကုန်လုပ်သောကြောင့် သူ့ဆိုင်ကလေးက ရှုပ်ပွနေသည်…ဆိုင်ရောက်တော့ အပ်ထားသော ဒီဇိုင်းများ ဆွဲရင်းနှင့်ပင် နှင်းသက်ကို တစ်ချက်တစ်ချက် သတိရမိနေကာဆွဲနေသော ဒီဇိုင်းမှာလဲ ဘာပုံပေါက်လို့ ဘာပုံပေါက်နေမှန်းပင် မသိတော့…. ကိုကို ကွန်ပျူတာရှေ့မှ ခွါကာ နှင်းသက်ရဲ့ နံပါတ်ကလေးများနှိပ်ကာ ခေါ်လိုက်သည်….
“အံမယ် ပိုပြီ…. ”
“ဟုတ်တယ် ခုတောင် အလုပ်လုပ်နေတာ အလုပ်လုပ်လို့မရဘူး နှင်းသက်ကို အရမ်းသတိရနေလို့ ဖုန်းဆက်လိုက်တာ”
“ကိုက ဓါတ်ပုံဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ဆို ဘယ်နားမှာလဲ ”
“အင်း ဒါဆိုလဲ ပြီးရော.. ကို အလုပ်ထဲမှာခဏလေး စိတ်နှစ်ပြီးလုပ်လိုက်နော် နှင်းသက်ကိုချစ်တယ်ဟုတ်”
“ချစ်တာပေါ့ နှင်းသက်ရာ ”
“ဒါဆို အလုပ်လုပ်တော့ ဒါပဲနော် အိမ်မှာဆိုတော့ ဖုန်းပြောရတာ သိပ်မကောင်းဘူး ဘိုင့်”
ကိုကို နှုတ်ဆက်စကားပင် မပြောလိုက်ရ နှင်းသက် ဖုန်းချသွားသည်…. နှင်းသက် စကားအတိုင်းပင် အလုပ်ထဲ စိတ်နှစ်ထားလိုက်မိသည်…. အချိန်ဘယ်လောက်ကြာသွားသည်မသိ… အလုပ်ခဏရပ်ကာ အင်တာနက်မှ ဒီဇိုင်းများ ဓါတ်ပုံ အယူအဆကလေးများ လိုက်ကြည့်မိနေချိန်တွင် ဆိုင်မှ အကူကောင်လေးမှ
“ဆရာ ဓါတ်ပုံ ရိုက်မလို့တဲ့ အလှပုံ”
“အေး အေး အထဲခေါ်လိုက်”
အထဲဝင်လာသော ကောင်မလေးများကို ကြည့်လိုက်မိတော့ ကိုကို အံ့သြသွားသည်…. နှင်းသက်နှင့် သူမ သူငယ်ချင်းဟု ထင်ရသော ကောင်မလေးသုံးယောက်…နှင်းသက် က ရုပ်တည်လေးနှင့်ပြုံးလဲ မပြ ရီလဲမပြ နှုတ်တောင်မဆက် ကိုကို ဘာပြောရမှန်း မသိချိန်တွင်.. နှင်းသက်သူငယ်ချင်းမှ
“နှင်းသက်ရာ နင်ကလဲ ဘာစိတ်ကူးပေါက်တာလဲ ဒီရောက်မှ ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်ရတာလဲ”
“ဟာ ….. နင်ကလဲ ဓါတ်ပုံရိုက်တာပဲ သူ့ဘာသာ သူဘယ်အချိန်ပဲ ရိုက်ချင်ချင်ပေါ့ဟာ နင်မရိုက်ချင်မရိုက်နဲ့လေမိုးမိုး နင်ရိုက်မယ်မဟုတ်လား…. ဆိုင်ရှေ့မှာ ချစ်သုဝေပုံကပ်ထားတာ မတွေ့ဘူးလား
ဘယ်လောက်လှလဲငါတို့ရိုက်လို့ ချစ်သုဝေထက်လှသွားရင် ငါတို့ပုံကပ်ချင်ကပ်မှာပေါ့ နင်ပဲ မော်ဒယ် ဖြစ်ချင်တယ်ဆို ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား အစ်ကို…. သမီးတို့ ပုံကပ်မယ်ဟုတ်”
ကိုကို တစ်ယောက် ယောင်ကန်းကန်းနှင့် ခေါင်းညိတ်မိသလား ခေါင်းခါမိသလား မပြောတတ် ကြည့်ရတာ နှင်းသက်က ကိုကိုနှင့် သူမအကြောင်းကို သူမ သူငယ်ချင်းများအား သိစေချင်ပုံမပေါ် သူမသူငယ်ချင်းများအား မလှိမ့်တစ်ပတ်နှင့် ဆိုင်ကို ခေါ်လာပုံရသည်…. ကိုကို ရင်ထဲကြည်နူးမိသွားသည်.. သူက နှင်းသက်ကို အရမ်းသတိရတယ် ပြောလိုက်သောကြောင့် နှင်းသက်မှ သူ့ထံကို လာခြင်းပင်….
ထိုနေ့က နှင်းသက်နှင့် သူငယ်ချင်းများအား ဓါတ်ပုံများရိုက်ပေးကာ…. ထိုအထဲကမှ နှင်းသက်တစ်ယောက်တည်းပုံများကို ပညာစုံသုံးကာ ကွက်ရိုက်ယူထားလိုက်သည်…..
“ဟာ…. ဆရာ… ဒီနေ့ ဆရာ ကောင်မလေးအလန်းလေးတွေဓါတ်ပုံရိုက်ပေးလိုက်လို့ မှော်ဝင်သွားတယ်ဖြစ်မယ် ဆရာ့ဒီဇိုင်းတွေ အလန်းတွေပါလား…..”
တပည့်ကျော်ရဲ့ မှတ်ချက်စကားပါပေ….ကိုကို ဘာမှ မပြော ….ပြုံးသာနေလိုက်သည်… အချစ်ရဲ့ စွမ်းပကားဟုတော့ စာအုပ်တွေထဲမှာ ဖတ်ဖူးသည် ဟုတ်မည်ထင်ပါတယ်…
မနက်က အလုပ်လုပ်တုန်းက ကပေါက်တိ ကပေါက်ချာ.. နှင်းသက် တို့ ဓါတ်ပုံလာရိုက်ပြီးမှပင် အလုပ်လုပ်ရတာ ဈာန်ဝင်တော့သည်… အင်း နှင်းသက်တို့ ဓါတ်ပုံလေးတွေ လှအောင် ပြုပြင်ဦးမှပဲ
ကွန်ပျူတာထဲမှ ပုံများ ဖွင့်ကာ ဓါတ်ပုံများ လိုသလို ပြင်နေစဉ် နံဘေးမှ တပည့်လေးက ထိုင်ကြည့်ကာ ပညာသင်နေသည်… ကိုကို ဘေးမှ တပည့်လေးကို ကြည့်ကာ
“ပြန်ရင်ပြန်တော့ကွာ ငါလဲ ပြန်တော့မယ်”
သို့သော် စောစောပြန်ရမည်ဆိုသောကြောင့် တပည့်ကျော်လဲ ပျော်ရွှင်စွာ အထုပ်ကောက်ဆွဲပီး ထွက်သွားတော့မှပင် ကိုကို နှင်းသက် ဓါတ်ပုံလေးကို အနီးကပ်ဆွဲကြည့်ကာ တစ်စိမ့်စိမ့်ထိုင်ကြည့်တော့သည်
တပည့်ကျော်ရှိနေလျှင်ဖြင့် ဒီလို ကြည့်လို့မကောင်းဘူးလေ… ခုတော့ တစ်ယောက်တည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ် တစ်ဝကြီး ငေးလို့ ရလေပြီ…. ကိုကို နှင်းသက်ရဲ့ တစ်ယောက်ပုံ တစ်ပိုင်းပုံ မျက်နှာချည်းသက်သက် ပုံများကို
ပိုက်ဆံအိတ်ထဲ ထည့်လို့ရတဲ့အရွယ်များထုတ်ကာ တယုတယပိုက်ဆံအိတ်ထဲထည့်ယူပြီး အိမ်ပြန်ခဲ့တော့သည်…. အိမ်ပြန်ရောက်မှ အိပ်ယာပေါ်မှာ နှင်းသက်ရဲ့ ဓါတ်ပုံလေးကြည့်ပီး စိတ်ကူးယဉ်တော့မည်…
ကိုကို နှင်းသက်ပုံလေး ထုတ်ကြည့် စကားတွေပြောကာ ဓါတ်ပုံထဲမှ နှင်းသက်မျက်နှာလေးနှင့် မျက်နှာချင်းအပ်ကာ အိပ်ပျော်သွားသည်…………..
ဒီလိုနှင့် ရည်းစားဦး နေ့ရက်ပေါင်းများစွာကို ဖုန်ုးပြောခြင်းနှင့်ပင် အလွမ်းဖြေနေရသည်။ ကိုကို နှင်းသက်နှင့် အပြင်မှာတွေ့ရန်ပြောသော်လည်း မအောင်မြင်…
နှင်းသက်အပြင်ထွက်မရလို့ပါဟူသော အဖြေကိုသာ ရသည်… ချစ်သူသက်တမ်း တစ်လကျော်လာချိန်ဝယ် တစ်ရက်တွင် နှင်းသက်ဖုန်းဆက်လာသည်။ စတိတ်ရှိုးရှိသည်.. နှင်းသက်နှင့် သူငယ်ချင်း သွားကြည့်မည်
ကိုကို လိုက်မှာလားတဲ့ … ကိုကိုက ဒီအခွင့်အရေးကို စောင့်နေတာ ဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်သွားမှာလဲ လိုက်မယ် ဆိုတော့ နှင်းသက်က သွားမယ်ရက် မနက်ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်တဲ့..
စိတ်ကူးနှင့်ရူးကာ စိတ်ကူးယဉ် နေ့ရက်များကို ဖြတ်ကျော်လာသော မနက်တစ်ရက် နှင်းသက်က ဒီညနေသွားကြမယ် ဆိုပီး စတိတ်ရှိုးလုပ်မည့် ဘောလုံးကွင်းရှေ့တွင် ချိန်းလိုက်သည်။
ကိုကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြည့်လို့အကောင်းဆုံးဖြစ်မည့် အဝတ်အထည်ပေါင်းများစွာကိုမွှေနှောက်ရှာဖွေကာ နှင်းသက်နှင့် ဆုံမည့်နေရာတွင် အစောကြီးကြိုသွားစောင့်နေမိသည်… စိတ်စောနေတာကိုး..
မတွေ့ရတာ ကြာပြီဖြစ်သော ချစ်သူလေးနှင့် တွေ့ရမည်လေ…
နာရီဝက်ခန့်စောင့်ပြီးသည်နောက်တွင် နှင်းသက်ဆီက ဖုန်းလာသည်… သူတို့ရောက်နေပြီ… အအေးဆိုင်ကိုလာခဲ့ပါဆိုသောကြောင့် ကားလော့ခ်ချကာ နှင်းသက်ပြောသော အအေးဆိုင်သို့ ထွက်ခဲ့လိုက်သည်။
အအေးဆိုင်ရောက်တော့ နှင်းသက်အပြင် နှင်းသက်သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နှင့် သူတို့ရဲ့ ဘဲဟု ထင်ရသော ခပ်လန်းလန်း ဒီဇိုင်းဆန်းနှင့် ကောင်လေးနှစ်ယောက်ပါတွေ့သည်…
နှင်းသက်ဘေးနားတွင် ဝင်ထိုင်ကာ နှင်းသက်မျက်နှာလေးကို တစ်ရှိုက်မက်မက် ကြည့်နေမိသည်…. သြော်…. သူအရင်ချစ်ခဲ့တဲ့ ဝင်းပပ မျက်နှာလေး မဟုတ်ပါလား..
မိတ်ကပ်တွေ လိုင်နာတွေ ပါးနီတွေ နှုတ်ခမ်းနီတွေနဲ့ ကော်ပတ်ရုပ်မလေး မျက်နှာကို ကြည့်နေရသလိုပါလား… အရင်က နှင်းသက်မျက်နှာလေးက ဘာမှ မလိမ်းမချယ်ထားသော သနပ်ခါးရေကျဲလေးနှင့်မျက်နှာလေးပါ..
အင်းလေ ဒီမျက်နှာက လှတယ်ဆို… ဟိုမျက်နှာလေးက ချစ်စရာကောင်းသော မျက်နှာလေးပေါ့…. ခေတ်စနစ်နဲ့ ညီစွာ ဝတ်ထားသည်က ဂါဝန်လိုလို အင်္ကျီအရှည်က ပေါင်လည်လောက်ရောက်သည်… အောက်မှာက
ဂျင်းဘောင်းဘီ ကျပ်ကျပ်ကို လည်ရှည်ဒေါက်ဖိနပ်နှင့် တွဲဝတ်ထားသည်က ကြွကြွရွရွလေးနှင့် လှပနေသည်…
“တကယ်….. ကိုကို ဒါက နှင်းသက်သူငယ်ချင်းတွေ ဟိုဘက်က သူတို့ ဘဲတွေ ဟဲ့ ဒါက ငါ့ကိုကို … သူတို့နာမည်မိတ်ဆက်မပေးတော့ဘူးနော် နှင်းသက်သူငယ်ချင်းလို့ပဲ မှတ်ထားလိုက်တော့…”
အအေးဆိုင်လေးတွင် စကားပြောရင်း စတိတ်ရှိုး စသောအခါ ဘောလုံးကွင်းထဲသို့ ဝင်လာခဲ့ကြသည်… ခုံများရှိသော်လည်း နှင်းသက်တို့ နောက်တွင်သာ မတ်တပ်ရပ်ကြည့်ချင်သည် ဆိုသောကြောင့်
အနောက်တွင်သာ မတ်တပ်ရပ်ကြည့်ကြတော့သည်… စတိတ်ရှိုးကြည့်ကြတော့ ကိုကိုက ရှေ့တွင် ရပ်နေသော နှင်းသက် ပုခုံးလေးကို ကိုင်ကာကြည့်နေမိသည်… ဘေးနားမှ နှင်းသက်သူငယ်ချင်းအတွဲများကတော့
ခါးများကို နောက်မှ အသီးသီး သိုင်းဖက်ကာ ဟုတ်နေကြသည်။ ကိုကို နှင်းသက်ကို သူတို့လိုပင် နောက်မှ ခါးလေးကို သိုင်းဖက်ချင်သော်လည်း မရဲပါ… နှင်းသက်စိတ်ဆိုးသွားမှာကြောက်သည်။
သီချင်း တစ်ပုဒ်နှစ်ပုဒ်ခန့် လိုက်အော်ပီးတော့ နှင်းသက်က ကိုကို့ကို လည်ပြန်မော့ကြည့်ကာ လျှာထုတ်ပြောင်ပြသည်. ပီးတော့ ကိုကို့လက်ကို ပုခုံးပေါ်မှပြောင်းကာ ခါးကို ဖက်လို့ရအောင် နေရာပြောင်းပေးသည်…
ကိုကို ရင်ထဲမှာ ဗြောင်းဆန်နေသည်… စတိတ်ရှိုးမှ ဘေ့စ် ထုသည့်အသံလား ကိုယ့်ရင်ခုန်သံလားဟုပင် ပြန်မဆန်းစစ်နိုင်… နှင်းသက် ကိုယ်လုံးအိအိလေးက ခုတော့ ကိုကို့ ရင်ခွင်ထဲမှာ… နှင်းသက်ရဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီကျပ်ကျပ်
အောက်က တင်သားလုံးကျစ်ကျစ်လေးသည် ကိုကို့ကိုယ်နှင့်လာကပ်နေသည်… ကိုကိုအာတွေ ခြောက်လာသည်… ကိုယ်ကို မသိမသာလေး နောက်သို့ ရို့ထားမိသည်…
ဒီလို စည်းချက်အောက်မှာ ကိုကိုတစ်ယောက် ဒုက္ခရောက်နေပြီ…. နွေးထွေးတဲ့ ချစ်သူကိုယ် အိအိထွေးလေးကို ဖက်ထားရင်းနှင့်ပင် နှင်းသက်ရဲ့ နားသယ်စပ်လေးကို နမ်းလိုက်တော့
“ကိုကို အပြင်ထွက်ရအောင် နှင်းသက်ညောင်းပြီ…”
“အင်း သွားမယ်လေ… သူငယ်ချင်းတွေရော”
“ရတယ် ထားလိုက် စတိတ်ရှိုးပြီးတော့မှ ရှာမတွေ့ရင် ဖုန်းဆက်လိမ့်မယ်”
ကိုကိုနှင့် နှင်းသက် လူတွေကြားမှ တိုးကာ ဝှေ့ကာနှင့်ပင် အပြင်ထွက်လာခဲ့သည်။
“ဘယ်သွားမလဲ နှင်းသက် အအေးသောက်မလား”
“ညောင်းတယ်ကိုကိုရယ် ပြီးတော့ လူတွေ အများကြီးနဲ့ မျက်စိရှုပ်တယ် အေးအေးဆေးဆေး စကားသွားပြောကြမယ်လေ”
“ကောင်းတယ်… လာ ကားက ဟိုးနားမှာ ရပ်ထားတာ”
ကိုကို ကားမောင်းရင်းပင် စကားပြောလို့ ကောင်းမည့် နေရာရှာရင်းဖွေရင်း မြို့လေးကို ပတ်ကာ စီးဆင်းနေသော မြစ်ရဲ့ နံဘေးနား ကားကို ရပ်လိုက်သည်… မှောင်ရိပ်နည်းနည်းကျတဲ့နေရာပေါ့…
ညရဲ့ မှိန်ပျပျ လရောင်အောက်မှာ မြစ်ပြင်ရဲ့ တစ်လက်လက်ဖြစ်နေသော ရေရဲ့ အရောင်ကို ကြည့်ကာ ကိုကို စိတ်ကူးယဉ် ကြည်နူးနေတုန်း…
“ကိုကို အဲ့မှာ အဲ့လိုပဲ ရပ်နေမှာလား နှင်းသက်ကို ဘာစကားမှမပြောတော့ဘူးလား”
“အဲ့…. ဟုတ်ပါဘူး နှင်းသက်ရဲ့ လေကောင်းလေသန့်လေးရှုကြည့်နေတာ ဟီး..”
“ဟွန့် ပြောကို မပြောချင်ဘူး.. ကိုကို ရည်းစားထားဖူးလား”
အမှန်မှာ တစ်ယောက်တည်းသာ မဖြစ်ညစ်ကျယ် ထားခဲ့ဖူးသော်လည်း
“သုံးယောက် ကျောင်းတက်တုန်းက ဟဲဟဲ လာ စကားပြောမယ် ကိုယ် နှင်းသက်ကို အရမ်းလွမ်းနေတာ… ခုမှ တွေ့ရတော့တယ် နှင်းသက်ရယ်”
ကိုကို ကားနောက်ခန်းထဲ နှင်းသက်ကို ဝင်ထိုင်စေကာ ဘေးနားဝင်ထိုင်ရင်း ချွဲတော့သည်…ကိုကို နှင်းသက်ကို ဖက်ချင်သော်လည်း မဝံ့မရဲဖြစ်နေစဉ်ပင် နှင်းသက်မှ ရင်ခွင်ထဲ မှီငဲ့လာသောကြောင့်
အလိုက်သင့်လေး ဖေးမကာ ဖက်ထားလိုက်သည်…ကိုကိုနှင့်နှင်းသက် တွတ်တီးတွတ်တာ စကားများပြောရင်း ကိုကိုနှင်းသက် ပါးလေးကို နမ်းလိုက်သည်… ရင်ခွင်ထဲ ခေါင်းအပ်ထားတဲ့ နှင်းသက်က
ကိုကို ရင်တွေခုန်နေတယ် ဒုတ်ဒုတ် ဒုတ်ဒုတ် တဲ့ နှင်းသက်ကြားနေရတယ် ပြောတော့ နှစ်ယောက်သား ရီမိသေးသည်…ကိုကို ဖက်ထားသော လက်ကို ဖြေလျော့ရင်း နှင်းသက်မျက်နှာလေးကို ဆွဲမော့လိုက်တော့
နှင်းသက်မျက်ဝန်းတို့က ရီဝေနေသလို အကြည့်နှင့် ကြည့်နေသောကြောင့် ကိုကို ခေါင်းကို တစ်ဖြည်းဖြည်းငုံ့ကာ နှင်းသက် နှုတ်ခမ်းလေးကို နမ်းလိုက်သည်… နှင်းသက် နှုတ်ခမ်းလေးတွေ နွေးထွေးလိုက်တာ…
ဖွင့်ဟလာသော နှုတ်ခမ်းလေးကို စုပ်နမ်းရင်းပင် ကိုကို နှင်းသက်ကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဖက်ထားသည်… နှင်းသက်လဲ ကိုကို့ကို ဖက်ထားသည်… ကိုကို ရဲ့ အနမ်းတွေ နှင်းသက်မျက်နှာပေါ် မိုးရွာသလို ပိုးပိုးပေါက်ပေါက်
ကျနေစဉ်… နှင်းသက် ကိုကိုနှင့်ခွာလိုက်ပီး..
“ကိုကို ရည်းစားထားဖူးတာ ဟုတ်လို့လား”
“နှင်းသက် မယုံပါဘူး ကိုကို ရည်းစားမထားဖူးဘူး…နှင်းသက်သိတာပေါ့ နှင်းသက် ရည်းစားတွေ အများကြီးထားဖူးတာ”
“နှင်းသက်ရဲ့ လက်ကိုလဲ မကိုင်ရဲဘူး စတိတ်ရှိုးမှာလဲ နှင်းသက်ကို မဖက်ရဲဘူး နမ်းလဲ မနမ်းရဲဘူး ခု နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းတာလဲ မနမ်းတတ်ဘူးလေ… ခစ်ခစ်”
ကိုကို ဘာပြောရမှန်းမသိ ဆွံ့အသွားသည်… နှင်းသက်သည် ရည်းစားထားခြင်းတွင် အတွေ့အကြုံရှိသော ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်.. နှင်းသက်နှင့် ရည်းစားဖြစ်စကတည်းကပင် ထိုအကြောင်းများကို
နှင်းသက်မှ ပြောပြထားသည်… သို့သော် သူ့ကိုယ်သူ ထိန်းသိမ်းခဲ့သည်… နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းသည့်အဆင့်ထက် မည်သူမှ ပိုလို့မရဟုပြောသည်… အဲ့လို ပွင့်လင်းသော ကောင်မလေးတစ်ယောက်
ကိုကို နှင်းသက်ကို အရမ်းချစ်သည်.. အရာရာအားလုံးကိုလဲ ခွင့်လွှတ်ထားသူဖြစ်သည်။
“ဒါဆို အတွေ့အကြုံရှိကြောင်းပြရတာပေါ့ လာထား……”
ထိုစဉ်မှာပင် နှင်းသက်ဖုန်းမြည်လာသည်…. ဖွင့်နားထောင်လိုက်သော နှင်းသက်သူငယ်ချင်း စတိတ်ရှိုးပြီးပြီ ပြန်မယ်တဲ့
“ကိုကို…နှင်းသက် ကျောင်းသွားအပ်ရမယ် သိလား”
“ဟုတ်လား နှင်းသက်ခု ဘယ်နှစ်လဲ”
“တတိယနှစ် သွားအပ်မှာ ……….မြို့မှာ ကိုကိုလိုက်မလား”
“တကယ်လား လိုက်မယ်လေ. ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲ”
“တစ်ရက်ပေါ့ ဒီနေ့သွားမယ်ဆို နက်ဖြန်ပြန်လာမယ်လေ..”
“ဟိုရောက်တော့ နှင်းသက်က ဘယ်မှာသွားနေမှာလဲ”
“သွားနေစရာလားကိုရယ် ကိုတစ်ယောက်လုံးရှိနေတာ ကို့အနားမှာပဲနေမှာပေါ့…”
“နှင်းသက်လဲ ကို့ကို အရမ်းချစ်တယ်”
“ကိုက နှင်းသက်ကို ပိုချစ်တာ”
“အံမယ် နှင်းသက်ကသာ ပိုတာပါ”
“ဒါဆို နှင်းသက်ကို တစ်ခုမေးမယ် ကိုက နှင်းသက်ရည်းစားစကားပြောတာလား နှင်းသက်က ကို့ကို ရည်းစားစကားပြောတာလား”
“ဟားဟား အဲ့ဒါ အဖြေပဲ ရည်းစားစကားအရင်စပြောတဲ့သူက အရင်ချစ်တာ အဲ့တော့ အနည်းဆုံး နှင်းသက် ချက်ခြင်းအဖြေပြန်ပေးရင်တော့ ကိုက အရင်ချစ်တော့ ပိုပြီးချစ်တာ”
“နှင်းသက်က ကို ရည်းစားစကားမပြောခင်ကတည်းက ကြိတ်ခိုက်နေတာလေ ဟဲဟဲ “
“ဒါဆို နှင်းသက် ကို့ကို ဘယ်မှာစတွေ့လဲဖူးလဲပြော”
“ကို နှင်းသက်ပြုတ်ကျလို့ လာတွဲတုန်းကပေါ့”
“ဟဲဟဲ ကိုက နှင်းသက်မပြုတ်ကျခင်ကတည်းက တွေ့ပီ ချစ်သွားတာ”
“အာ……………… သွားကွာ….. မချစ်တော့ဘူး ကိုကိုလူလည်… သူများကို အနိုင်ပေးရမှာ အနိုင်လဲ မပေးဘူး”
“ဟေ့ တစ်ခြားနေရာတွေသာ အနိုင်ပေးချင်ပေးမယ် ချစ်တဲ့နေရာမှာတော့ အနိုင်မပေးနိုင်ဘူး “
ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲပွေ့ကာ နှင်းသက်ကို မြတ်မြတ်နိုးနိုးနမ်းလိုက်သည်…
“နှင်းသက် အရင်က ရည်းစားတွေ ဘယ်လောက်ပဲ များခဲ့ များခဲ့ အရင်ကအကြောင်းတွေ ကိုယ်မသိချင်ဘူး အရင်က ဘယ်လောက်ပဲ ဆိုးဆိုး ခု ကို့ကို ချစ်နေတဲ့အချိန်မှာ
လိမ္မာရင် ကိုယ်ပျော်ပါတယ် လိမ်လိမ်မာမာ နေနော်နှင်းသက်”
“အင်းပေါ့ ကိုရယ် နှင်းသက်မှာက အားကိုးစရာ အစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်လုံးရှိနေပြီပဲ … ကို နှင်းသက်တို့ လာတာလဲ ကြာပြီ… ပြန်ကြရအောင်.. နှင်းသက်ကားလက်မှတ်ဝယ်ရင်
ပြောပြောဆိုဆို မျက်စောင်းလေးထိုးကာပြောလာသော နှင်းသက်ကို ကြည့်ရင်း ကိုကို အသဲယားလာသောကြောင့် မျက်နှာဖူးဖူးလေးကိုကိုင်ကာ နှုတ်ခမ်းကို စုပ်နမ်းလိုက်သည်…
နှင်းသက်အလိုက်သင့်ပြန်နမ်းပါသည်…နှင်းသက်ရဲ့ ကျောပြင်ပြေပြေလေးကို သိုင်းဖက် ပွတ်သက်ရင်း မွတ်သိပ်စွာ အနမ်းတွေ ခြွေချမိသည်…. နှင်းသက် ကိုကို့ကို တင်းကျပ်စွာဖက်ထားမိသည်။
ကိုကို ရင်ဘတ်ချင်းအပ်ထားသလိုဖြစ်နေတာကြောင့် နူးညံ့အိထွေးသော အထိအတွေ့များကို ခံစားနေရသည်… ကိုကို့လက်များ ထိုနေရာများသို့ ရွှေ့ချင်သော်လည်း မရွှေ့ရဲပါ.. လက်မရဲခြင်းပင်
ထိုနေရာသို့ လက်ရွှေ့လျှင် နှင်းသက်ခွင့်ပြုမည် ဘာမှ မပြောမည်မှန်းသိသော်လည်း ကိုကို ဘယ်လိုမှမရဲ…. ကိတ်စမရှိပါ..အကြံရှိပါသည်… ခုမကိုင်ရလို့ ဘာမှမဖြစ်ပါ…
နောက်ရက်များတွင် နှင်းသက် ကျောင်းကိစ္စနှင့် ခရီးသွားမှ နှစ်ယောက်တည်း အေးဆေး လှုပ်ရှားမည်…. နှစ်ယောက်သား အလွမ်းသယ်မဆုံးဖြစ်နေချိန်တွင်….
ကိုကို ကားတံခါးဖွင့်ဆင်းပြီး ကြည့်လိုက်တော့ မြစ်နံဘေး မြေကွက်လပ်တွင် ဘော်လုံးကစားနေသော ကလေးများ၊ ကိုကိုနှင့် နှင်းသက် ညနေခင်းလေးကို မြစ်ကမ်းနံဘေး လာကြည်နူးနေခြင်းဖြစ်သည်။
ကိုကို့ကားက စတေကာ အမဲတွေကပ်ထားသောကြောင့် ကားထဲကို မမြင်ရ မှန်ကိုကပ်ကြည့်ရင်တောင် ကိုယ့်အရိပ်ပဲ ကိုယ်ပြန်မြင်ရမှာမို့ ကားထဲ စိတ်ကြိုက် ကြည်နူးနေခြင်းဖြစ်သည်… ကြည့်ရတာ
အေဘေးလေးတွေ လာချောင်းလို့ မရလို့ နှောက်ယှက်ခြင်းဖြစ်မည်… ကလေးတွေကြည့်တော့ စပ်ဖြဲဖြဲနှင့် ဟင်းဟင်း မြွေမှန်းသိအောင် လျှာထုတ်ပြလိုက်ဦးမှပဲ
ကိုကို ကားဘေးမှ ဘောလုံးကို တစ်ချက်ကြည့်ကာ ကောင်လေးတွေဘက် ကန်ပေးသလိုလိုနှင့် မြစ်ထဲ ကန်ချပေးလိုက်သည်….
“ဟာ…… ဆောရီးကွာ ခြေချော်သွားတယ်…”
မှတ်ကရော ပြောပြောဆိုဆို ကားပေါ်တက်ကာ မောင်းထွက်လာလိုက်သည်…နှင်းသက်မှ” တော်တော်တတ်နိုင်တဲ့လူ ကလေးတွေနဲ့ဖက်ပြီး “တဲ့ ကလေးတွေ ဘာလုပ်လို့ဖက်ရမလဲ ဖက်မယ့်ဖက် နှင်းသက်ကိုဖက်မှာပေါ့
လေအေးစက်ဖွင့်ထားသော ကားကြီးက ညအမှောင်ကို မီးထိုးကာ မောင်းနှင်နေသည်…နံဘေးနားဝယ် သူ့ပုခုံးလေးမှီကာ အိပ်နေသော နှင်းသက်ကို ဖေးမက မျက်နှာသုတ်ပုဝါ အကြီးစားကို နှစ်ယောက်လုံအောင်
ပြင်ခြုံလိုက်သည်.. ဒီနေ့ည နှင်းသက်က ကျောင်းသွားအပ်မည်ဆိုသောကြောင့် နှင်းသက်နှင့် လိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်… နှင်းသက်မိဘတို့က တော်တော်နှင့်မပြန် ကားထွက်မှ ပြန်သောကြောင့် ကိုကို ကားကွင်း အပြင်စပ်နားတွင်
သွားစောင့်ကာ တက်လိုက်လာရသည်… ဆောင်းတွင်းဖြစ်သောကြောင့် အပြင်မှာအေးနေမည်… ကားထဲကလဲ အဲကွန်း ဖွင့်ထားသောကြောင့် စိမ့်နေသည်… ခြုံတဘက်ထဲမှ နှင်းသက်ကိုယ်လေးကတော့နွေးထွေးနေသည်…
နှင်းသက်ဆီက အနွေးဓါတ်တွေ သူ့ကိုယ်ထဲ ကူးစက်လာသလိုပင် ကိုကိုလဲ နွေးထွေးနေပါသည်… နှင်းသက်ကို ဖက်ထားရင်းပင် စိတ်က မကောင်းသောအကြံအစည်များတွေးတောလာသည်…
ဟိုရောက်ရင် ဟိုတယ်ခန်းတစ်ခန်းယူ… နှင်းသက် ကျောင်းအပ်တဲ့ကိစ္စပီးရင် ….. ဟား ဟား ဟား…. တွေးရင်းနှင့် အားမရသောကြောင့် နှင်းသက်ကိုယ်လုံးလေးကို ခပ်တင်းတင်းဖက်ကာ ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့
ဘယ်အချိန်ကတည်းက နိုးပီး သူ့မျက်နှာမော့ကြည့်နေသည်မသိ
“ကိုကို ဘာတွေ ပြုံးနေတာလဲနှင်းသက် ကြည့်နေတာကြာပြီ…”
“သြော် ဒီလိုပါပဲ နှင်းသက်နဲ့လာရတာ ပျော်လို့ပါ..”
“တကယ်နော် နှင်းသက် ကားမူးလို့ ပြန်အိပ်တော့မယ်”
ကိုကို မျှော်လင့်နေတဲ့ မနက်ကို ရောက်လာပါပြီ…. ကိုကိုနှင့် နှင်းသက် အိတ်လေးကိုယ်စီလွယ်လျက် မနက်စာ စားသောက်ပြီး… ကျောင်းကိစ္စထွက်ခဲ့သည်… ကျောင်းအပ်တာ လိုက်လုပ်ပေးရင်းနှင့်ပင်
အဆိုင်းမန့် ထုတ်တာနှင့် စာအုပ်တွေ ထုတ်တာနှင့် နေ့လည်ဖြစ်သွားပြီ…. အားလုံးပီးစီးတော့ နေ့လည် နှစ်နာရီထိုးတော့မည်… ကိုကိုနှင့်နှင်းသက် ကျောင်းကန်တင်းတွင်ပင် ဖြစ်သလို စားသောက်ရင်း
“ကဲ နှင်းသက် နေ့လည်တောင်စောင်းပြီး အားလုံးပီးပီ မဟုတ်လား”
“အင်း ပြီးပြီလေ… သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီ ခဏသွားဦးမယ်”
“အာ.. ကိုကလဲ ခဏပဲကို နှင်းသက်လာမှာသူသိတယ် သွားမှကောင်းမှာပေါ့…”
“ဒါဆိုလဲ မြန်မြန်သွားကွာ ကိုယ်ပင်ပန်းနေပြီနားချင်ပြီ ဘယ်မှာသွားနားမှာလဲ “
“ဒီလိုလုပ်လေ.. ကိုစုံစမ်းပြီး စီစဉ်ထားလိုက် နှင်းသက် သူငယ်ချင်းနဲ့ တွေ့ပီးရင် သူ့ကို တစ်ခြားသူငယ်ချင်းနဲ့ သွားအိပ်မယ်ပြောပီး ထွက်ခဲ့မယ်”
“ဒါဆိုလဲ ပြီးရော… ကို ဒီအထုပ်တွေ ယူသွားရမလား”
“မယူနဲ့ ဒါတွေပါ နှင်းသက်ယူသွားမယ်”
ကိုကို နှင်းသက်နှင့်လမ်းခွဲပြီး… ဟိုတယ်သွား နှစ်ယောက်ခန်းစုံစမ်းပြီး အခန်းတွင်း ဝင်နားနေလိုက်သည်… ထိုစဉ်
ဖုန်းမြည်လာသောကြောင့် ကြည့်လိုက်တော့ နှင်းသက်
“နှင်းသက် ပြော ပြီးပြီးလား”
“အေး …. သူငယ်ချင်းရေ ငါနင့်နဲ့လာအိမ်တော့ဘူးဟာ ဒီမှာ ရတီက အတင်းဆွဲထားတယ် သူနဲ့ပဲ အိပ်တဲ့”
“ဟမ်… ဒီမှာ နှစ်ယောက်ခန်းယူထားပြီးပြီးလေ.. နှင်းသက်ကလဲ”
“ငါလဲ ဒီမှာ ရတီကို ဘယ်လိုမှ ပြောလို့မရဘူးဟာ ငါ့ပိုက်ဆံအိတ်တွေရော ပစ္စည်းတွေ အကုန်သိမ်းထားလိုက်ပီး… “
“မနက်ကိစ္စ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ပြန်ဖို့ကိုလေ… ဟာကွာ… မရဘူး နှင်းသက် ရအောင်ထွက်လာခဲ့”
“ဆောရီးကွာ သူငယ်ချင်း ငါတောင်းပန်ပါတယ် ဒါပဲနော်… တီ………………………………”
ပြောရင်းဆိုရင်း ဖုန်းချသွားတော့ ကိုကို အခန်းထဲမှ နှစ်ယောက်အိပ်ကုတင်ကျယ်ကြီးကို ကြည့်ရင်း…….
“အား………….ဝလူး ဝလူး… ဂူး………ဟား………..”
ကားတစ်စီးတည်းစီး ထိုင်ခုံကပ်လျက်ထိုင်. တဘက် တစ်ထည်တည်း အတူခြုံပီး စကားမပြောတာကတော့ အတော်ဆိုးပါသည်။
မနေ့ညက ကိစ္စကို နှာမွှန်ကာ ကိုကိုက ဒီနေ့မနက်မှ ကားပေါ်ရောက်သည်အထိ နှင်းသက်ကို စကားဟက်ဟက်ပက်ပက်မပြော ပြောစရာရှိတာပြော လုပ်ပေးစရာရှိတာသာလုပ်ပေးပြီး
စိတ်ကောက်ပြနေလိုက်သည်။ နှင်းသက်ကလဲ ကိုကို စိတ်ကောက်မှန်းသိကာ.. အရေးတယူလုပ်ပြီး ပြန်ချော့မနေ ဒီအတိုင်းပစ်ထားသည်။ ကားပေါ်ရောက်တော့လဲ သူ့ဘာသာသူအိပ်နေသည်။
ကိုကိုတစ်ယောက်သာ ဘာလုပ်ရမည်မသိပဲ ယောင်ပေပေဖြစ်နေသည်။ မထူးပါဘူးလေ.. သူတောင် ကိုယ့်ကို စကားရောဖောရောလေး ပြန်မပြောတော့လဲ ကိုယ်လဲ အိပ်တာပေါ့ အိပ်ရေးတောင်ဝသေးတယ်…
ကျောင်းသွားအပ်ပြီး ပြန်လာကတည်းက ကိုကိုနှင့်နှင်းသက် အခေါ်မပြောမရှိတာ ယခုဆိုလျှင် တစ်ပါတ်တောင် ရှိပြီ.. ကိုကို နှင်းသက်ကို အရမ်းသတိရကာ အရမ်းလွမ်းနေသည်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကလေးဆန်တယ်ဟုလဲ ထင်မိသည်။ ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့လဲ ဟုတ်နေသည်… ရည်းစားက ရည်းစားတစ်ကဏ္ဍ၊ အတူမအိပ်လို့ ကိုကို စကားမပြောတာက တစ်ကဏ္ဍဖြစ်သည်။
နှင်းသက် သူ့ဘာသာသူ အိပ်ချင်အိပ်မည် မအိပ်ချင်နေမည်.. ဘာမှပြောပိုင်ခွင့်မရှိ. သူ့လွတ်လပ်ခွင့်ပင်။ ကိုကို သူ့ဘာသာသူ ကောက်ချက်ချကာ ဖြေသိမ့်ရင်း နှင်းသက်ဆီ ဘယ်လို အကြောင်းပြကာ
ဖုန်းဆက်ရင်ကောင်းမလဲ စဉ်းစားနေမိသည်။ ဟုတ်ပြီ… ဟိုတစ်ခေါက်က နှင်းသက်ပြောဖူးသည်။ ကိုကို အင်တာနက်သုံးနေတာတွေ့တော့ သူလဲ သုံးမည်. သူ့ကို ဂျီမေးလ် အကောင့်ဖွင့်ပေးဟုပြောထားသည်။
ကိုကို မလုပ်ပေးဖြစ်သေး.. ခုလုပ်ပေးပြီ.. ဖုန်းဆက်လိုက်မည်။
“ဟိုလေ.. ဟိုတစ်ခေါက် နှင်းသက် ပြောထားတယ်လေ ဂျီမေးလ်အကောင့်ဖွင့်ပေးဆိုတာ အခု လုပ်ပေးပြီးပြီးသိလား”
“ဟယ်………..ဟုတ်လား ပျော်လိုက်တာ.. ပေး”
“အင်း မှတ်ထားနော် အကောင့်နာမည်က …………………. ပတ်စ်ဝေ့ါက …………….”
“အင်း ရပြီ ရပြီ…ခုဝင်ကြည့်မယ်နော်”
“ဝင်ကြည့် ပြီးရင် ကိုယ်နဲ့ စကားပြောမယ် “
ကလေးလေးတစ်ယောက်လိုရွှင်မြူးစွာ အော်ဟစ်ရင်း ဖုန်းချသွားတော့ ကိုကို ပြုံးမိသည်။ တော်သေးတယ် ငြိမ်းချမ်းရေးရသွားလို့။ ကိုကို နှင်းသက်နှင့် အကြာကြီး မခွဲနိုင်ပါ။
ကိုကို ကွန်ပြူတာ စကရင်ပေါ်မှ နှင်းသက်ရဲ့ အကောင့်လေး စိမ်းလာမယ့်အချိန်ကို စောင့်နေလိုက်သည်။ နှင်းသက်အကောင့်လုပ်ပြီးကတည်းက ကိုကို သူ့အကောင့်ကို အင်ဗိုက်လုပ်ကာ အဆပ်…. လုပ်ပီးသားမို့
နှင်းသက် အွန်လိုင်းပေါ် ရောက်လာလျှင် သူသိမည်ဖြစ်သည်။ ခဏအကြာ နှင်းသက် အကောင့်လေး စိမ်းလာသောကြောင့် လှမ်းနှုတ်ဆက်ရင်း… အလွမ်းတွေ ဖွင့်ချတော့သည်။
ကိုကို အွန်လိုင်းတွင် အလွမ်းသယ်လို့ မဝတော့… တွေ့ချင်သည်ဆိုကာ ပူဆာပြီ.. နှင်းသက်သည်လည်း ကိုကိုနှင့် မတွေ့ စကားမပြောဖြစ်သည်မှာ တစ်ပါတ်ခန့်ရှိပြီမို့ သတိရသောကြောင့်တွေ့ကြရန် ချိန်းလေပြီ..
“ကိုကို နှင်းသက်ကို အရမ်းချစ်တယ်ပေါ့”
“ချစ်တာပေါ့ နှင်းသက်ရယ် ဘယ်လိုပြောလိုက်ပါလိမ့်”
“ဒါဆို ကျောင်းအပ်ပြီးပြန်လာတုန်းက နှင်းသက်ကို ဘာလို့ စိတ်ကောက်နေလဲ”
“ဟဲဟဲ ဟိုလေ နှင်းသက်များ ချော့မလားလို့ “
“နှင်းသက်မကြိုက်ရင် မကောက်တော့ပါဘူး နှင်းသက် တွေ့ကြရအောင်ကွယ်”
“အင်း… ကိုကို နှင်းသက်အိမ် လာရဲလား”
“လာရဲပါတယ် ဘာလုပ်ဖို့လဲ အိမ်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတော့မို့လား”
“ဟာ မဟုတ်ပါဘူး လာရဲရင် ည ကိုးနာရီလောက် အိမ်နောက်ဖေး ခြံထဲ ဝင်လာခဲ့ နှင်းသက်စောင့်နေမယ်”
“အင်း ဒါပဲနော် တာ့တာ ကြာနေပြီ..”
ကိုကို ပျော်သွားသည်။ ညရယ် မြန်မြန်ရောက်ပါတော့… နှင်းသက်နဲ့ တွေ့ရမည်လေ…
ကိုကို နှင်းသက်ခြံရှေ့အနားသို့ ည ရှစ်နာရီလောက်ကတည်းက ရောက်နေသည်။ လာခဲ့မည်သာ ပြောရသည် ဘယ်လို ခြံထဲ ဝင်ရမည်ကို မသိသေး… ခြံရှေ့ ကားဖြတ်မောင်းရင်း အခြေအနေကြည့်ဦးမှ…
အင်း လမ်းသွားလမ်းလာ နည်းနည်းရှင်းတယ်ဆိုတော့ ခြံထောင့်နားကနေ ခြံထဲ ဝင်လို့ ရမည်ထင်သည်။ နှင်းသက်က ခြံထဲ ခွေးရှိသည်တော့မပြော ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရအောင် သွားမည်… နှင်းသက်နဲ့ တွေ့ချင်သည်လေ
ကိုးနာရီထိုးရန် ၁၅ မိနစ်ခန့်အလိုတွင် ကိုကို ကားကို နှစ်လမ်းကျော်မှ စားသောက်ဆိုင်နားရပ်ကာ လမ်းလျှောက်ခဲ့လိုက်သည်။ နှင်းသက် ခြံရှေ့အရောက်တွင် လမ်းရဲ့ ဘယ်ညာ ကြည့်လိုက်တော့ လူရှင်းနေသည်။
အိုကေ… ကိုကို ခြံစည်းရိုးတိုင်များကို ကျော်ကာ ခြံတွင်းသို့ ခုန်ချလိုက်သည်… အသံပင်မထွက်… ခြေကို ဖွနင်းရင်း မှောင်ရိပ်ခိုကာ ခြံနောက်သို့ တဖြည်းဖြည်းရွှေ့ခဲ့သည်။
ခြံထောင့်သစ်ပင်အမှောင်ရိပ်ခိုရင်း ကြည့်နေစဉ် အိမ်နောက်ဖေး တံခါးလေး ဖြေးညှင်းစွာပွင့်လာသည်။ အိမ်ထဲမှ ထွက်လာသည်က ကိုကိုသိပ်ချစ်ရတဲ့ နှင်းသက် ။
“အင်……. ကိုကို ဟယ် တစ်ကယ်ရောက်လာတယ် မထင်ဘူး.. ဘယ်လိုဝင်လာလဲ”
“အံမယ် အလွမ်းမသယ်နဲ့ လာ လာ”
နှင်းသက် ခြံဘေးနားသို့ ခေါ်သွားသည်။ တော်တော် မှောင်ရိပ်ကျပါပေသည်။ စက္ကူပန်းခြုံအောက်မှာကား ဒန်းသေးသေးလေး… ဒန်းသေးသေးလေးတွင် နှစ်ယောက်အတူထိုင်မိသည်။
“နှင်းသက် အဖေတို့ မဆင်းလာဘူးလား”
“အိမ်ပေါ်က လှမ်းအော်လိမ့်မယ် အဲ့ခါ တက်သွားလိုက်မယ်”
ကိုကို နှင်းသက် ကိုယ်လုံးလေး ကို ပွေ့ဖက်လိုက်သည်။ အေးမြနေသော ဆောင်းနှင်းမြူတွေကြားမှာ ချစ်သူကိုယ်လုံးလေး ဖက်ထားရသည်မှာ နွေးထွေးလိုက်ပါဘိ
ချစ်သူနှစ်ဦး ပူးကပ်သွားသည်။ တီတီတာတာ စကားတွေမဆိုအား.. နှုတ်ခမ်းချင်းဖိကပ်ကား မွတ်သိပ်စွာ နမ်းနေမိသည်။ နှင်းသက်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေ အိစက်လိုက်တာ…
ကိုကို နှင်းသက်နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်းရင်းမှ ပုခုံးကို ဖက်ထားသော လက်များ လျှော့ချပြီး အောက်သို့ ရွေ့လာသည်။ ညဝတ်အကျီ င်္ပါးပါးလေးသာ ဝတ်ထားသော နှင်းသက် ကိုယ်လုံးလေးကို
မြွေတစ်ကောင်လို ရစ်ပတ်လာချေပြီ.. နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်းနေသော ကိုကို့နှုတ်ခမ်းများကို နှင်းသက် အငမ်းမရ စုပ်ကာ နမ်းနေသည်။ ပါးစပ်မှလဲ ငြီးသံ ပါးလျလျလေး ထွက်နေသည်။
ကိုကို့လက်များက နှင်းသက်ရဲ့ ရင်အုံပေါ်သို့ အလိုလို ရောက်လာသည်။ နှင်းသက် ကိုကို့ ကို အတင်းဖက်ထားသည်။ ကိုကို ရင်တွေအရမ်းခုန်ကာ နှင်းသက် နို့အုံ တင်းတင်းလေးများကို ဆုပ်နယ်နေသည်။
နှင်းသက်ကား ညအိပ်ခါနီးမို့ထင့် အကျီ င်္အောက်တွင် ဘရာဇီယာ မဝတ်လာပါ.. အကျီ င်္တစ်ထပ်ခံထားလျက်နဲ့ပင် နူးညံ့ သော အထိတွေ့ကို ကိုကို ခံစားနေရသည်.. ကိုကို့လက်များကို အကျီ င်္အောက်သို့ ရွှေ့လိုက်သည်။
ချောမွေ့သော အသားအရေကို ခံစားရသည်။ တစ်ဖြည်းဖြည်း အပေါ်တိုးရွေ့လာတော့ နိမ့်ချည်မြင့်ချည် ရင်တွေခုန်နေသော ရင်သားနူးနူးညံ့ညံ့လေးကို စတင် ကိုင်တွယ်မိတော့သည်။
နှင်းသက် နို့လေးများက လက်တစ်ဝါးအုပ်စာခန့် ရှိသည်။ တင်းတင်းပြည့်ပြည့်ရှိလှသည်။ ကိုကို ဂျုံနယ်သလို ပွတ်သပ်နယ်ချေရင်း နို့သီးခေါင်းလေးများကို ကိုင်တွယ်ကြည့်မိတော့ နို့သီးခေါင်းက ခုမှ စူတူတူ လေးဖြစ်စ ဖြစ်ဟန်တူသည်။ ကိုကို လက်ညှိုး၊လက်မကို အသုံးပြုကာ နို့သီးခေါင်းလေးကို ချေလိုက်တော့ နှင်းသက် ပါးစပ်မှ တစ်အင်းအင်း နှင့် ငြီးတွားသံ များထွက်လာသည်။
ကိုကို့ နှုတ်ခမ်းကို လဲ အငမ်းမရ လိုက်နမ်းနေသည်။ လက်များကား ကိုကို လည်ပင်းကို သိုင်းဖက်ကာ ရင်ကို ကော့ထားသည်။ ကိုကို တစ်ယောက် နှင်းသက် မျက်နှာအနှံ့ အနမ်းတွေပျိုးလိုက်
နို့များကို ဆုပ်ချေရင်း ကျောပြင်ပြေပြေလေးကို ပွတ်သပ်ရင်းနှင့် နှင်းသက် အကျီ င်္ကို လှန်လိုက်သည်… လရောင် မပီဝိုးတဝါးအောက်မှာ နှင်းသက်ရဲ့ ဖြူဖွေးသော ရွှေရင်အစုံကို မြင်တွေ့ချိန်
ကိုကို အာခေါင်များခြောက်ကပ်သွားသည်။ နို့သီးခေါင်းလေးများကို ငုံစုပ်ရန် ခေါင်းငုံ့လိုက်သည်။
“ရှင် ……… အမေ လာပြီ…”
ခိုးစားရသော အသီးပိုချိုမှန်း ကိုကို သိသွားပြီးနောက် ..နှင်းသက်အိမ်နောက်ဖေးမှ ဒါန်းလေးသည် ကိုကိုနှင့် နှင်းသက်နှစ်ယောက်သားအတွက် ညဘက် ချိန်းတွေ့ရာ နေရာလေးဖြစ်လာသည်။
တစ်ပါတ်လျှင် သုံးရက်ခန့် အမြဲ ချိန်းတွေ့တတ်ကြပြီ.. နှစ်ယောက်သားတွေ့လျှင် ကိုကိုဘက်မှ တစ်ဖြည်းဖြည်း တိုက်စစ်ဆင်လာရာ.. ခုဆိုလျှင် နှင်းသက်ခမျာ ညဘက် ကိုကိုနှင့်တွေ့ရန်
ခြံထဲဆင်းလာပါက အကျီ င်္အောက်တွင် ဘရာဇီယာ နှင့် ပင်တီတောင် မဝတ်လာဖြစ်တော့ပေ။ စကပ်တို. အကျီ င်္ဖားဖားလေးများဖြင့် ဆင်းလာတတ်နေပြီ.
နှစ်ယောက်သားတွေ့လျှင် ကိုကိုမှာ အနမ်းတွေခြွေ ဖီးလ်တက်လာပြီဆိုလျှင် နှင်းသက်ရဲ့များကို နို့များကို ပွတ်သပ်ဆုပ်နယ် အကျီအောက်မှ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်နေသော နို့သီးခေါင်းလေးများကို
အကျီ င်္လှန်ကာလဲ နှုတ်ခမ်းများဖြင့် စုပ်နေတတ်ပြီ… နို့သီးလေးများမာလာပါက တစ်ဆင့်တက်ကာ နှင်းသက်ရဲ့ ဗိုက်ပြေပြေလေးများမှ တစ်ဖြည်းဖြည်းဆင်းကာ…နှင်းသက်ရဲ့ ညီမလေးဆီသို့လဲ
အလည်သွားတတ်နေပြီ… နှင်းသက်နှုတ်ဖျားမှာ တ ဟင်း ဟင်းနှင့် ငြီးသံလေးများထွက်နေပြီဆိုလျှင် ဆီးခုံမို့မို့ပေါ်မှ အမွှေးရေးရေးပါးပါးလေးများကို ဖြတ်ကာ ညီမလေးအဝမှာ စိုစွတ်မှုများကို
အလိုအလျောက်လဲ ကိုကိုခံစားတတ်လာသည်. ထိုအချိန်ဆိုပါက ကိုကိုသည် နှင်းသက်ညီမလေးကို လက်နှင့် ပွတ်သပ်တော့သည်.. နှုတ်ခမ်းသားများကြားမှ အစေ့သေးသေးလေးကို လက်တစ်ဖက်တည်းမှ
လက်ချောင်းလေးငါးချောင်းရဲ့ အကူအညီနဲ့ ရှာရသည်မှာ ရင်ခုန်စရာကောင်းလှသည်။ တွေ့လျှင် ထိုအစေ့လေးကို လက်ညှိုးလေးနှင့် ဖိကာ ပွတ်သပ်လျှင် နှင်းသက်မှာ မနေနိုင်တော့
တစ်အားငြီးကာ ကိုကို့ကို ဖက်တွယ်လာတော့သည်.. ကိုကို တစ်ဆင့်တက်ကာ လက်ခလယ်တစ်ချောင်းတည်းကို နှင်းသက်ညီမလေးထဲ ထည့်တော့ အစပထမတွင် နှင်းသက် ငြင်းသော်လည်း
ခုတော့ မငြင်းတော့ပြီ… တွေ့လျှင် နှစ်ယောက်သား တစ်ယောက်အလိုကို တစ်ယောက်လိုက်တတ်လာပြီ… နှင်းသက်ကို ထိုကဲ့သို့ လုပ်နေချိန် နှင်းသက်လဲ ကိုကို့ညီလေးကို ပြန်လည်ကိုင်တွယ်ပေးတတ်သည်..
အရင်က ကိုကိုနှင်းသက်ဆီ ဂျင်းဘောင်းဘီများဖြင့် လာတတ်သော်လည်း ခုဆိုလျှင် လုပ်ရကိုင်ရလွယ်မည့်ဘောင်းဘီမျိုး ရွေးဝတ်လာသည်။
တစ်ခေါက်က ပုဆိုးနှင့်လာဖူးသည်. သို့သော် အပြန်ခြံစည်းရိုးကျော်သော်အခါ အပြင်ဘက် လူအရိပ်အချည်ကြည့်ကာ ကမန်းကတန်းခုန်ချရတတ်သည်မို့ ပုဆိုးငြိကာ ပြဲဖူးသည်..
ထိုအချိန်မှစကာ ကိုကိုနောက်တစ်ခေါက် ပုဆိုးမဝတ်လာတော့.. လုပ်ရကိုင်ရ လွယ်သော်လည်း ပြန်ပါက မလွယ် . မတော်လျှင် ဇက်တောင် ကျိုးနိုင်သည်။
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး စပေါ့ကွာတား ဘောင်းဘီတိုများဖြင့် လာတတ်သည်။ အတွင်းခံပင် ဝတ်မလာ ။
ပြန်ခါနီး ခြံအပြင်နှင့်အတွင်း တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အလွမ်းသယ်လို့ မဝနိုင်အောင်ပင်. နှင်းသက်ဆီမှ ပြန်လာလျှင် ကိုကို့ ညာဘက်လက်များမှာ အမြဲ စေးကပ်နေသည်။
ကိုကို ရှေ့ဆက်ရန်ကြိုးစားဖူးသေးသည်. အဆင်မပြေပါ.နှင်းသက်နှင့်လဲ နှစ်ကိုယ်တူ ကြည်ဖြူပါသော်ငြား ပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဒါန်းကလဲ လှုပ်စိ လှုပ်စိ ဖြစ်နေလို့ ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေ.
ကိုကိုလဲ ပွဲဦးထွက် အဆင်မပြေတာမျိုး မဖြစ်ချင်သောကြောင့် အတူနေရန် ကိစ္စ ခဏရပ်ထားလိုက်သည်။ အကြံအစည်ရှိပါသည်လေ..
အတူမနေရသော်လည်း နှင်းသက်ကို ချော့မော့ကာ ဒါန်းပေါ်တွင်ထိုင်စေပြီး.. နှင်းသက် ပေါင်ကြားခေါင်းအပ်ကာ ကိုကို နှင်းသက်ညီမလေးကို နမ်းပေးသည်။
အမွှေးရေးရေးပါးပါးလေးမို့ မရှုပ်ပါ… သန့်စင်ဆေးရည်များသုံးသော နှင်းသက် ညီမလေးသည် အနံ့တစ်မျိုးလေး ရှိသည်။ ထိုအနံ့လေးကို ကိုကိုကြိုက်သည်။ မွှေးတာလဲ မဟုတ် နံ့တာလဲ မဟုတ်သော အနံ့လေးဖြစ်သည်။
ကိုကို နှင်းသက်ညီမလေးကို ပထမဆုံး စနမ်းပေးသော ညကို သတိရနေသေးသည်။
“တကယ်ချစ်လို့ ခု ကိုကို လုပ်နေတာတွေ ခွင့်ပြုတာပေါ့ကွယ် မချစ်ရင် ဘယ်သူက ပေးကိုင်မှာလဲ”
“ဒါဆို တကယ်ချစ်တယ်ပေါ့.. တစ်ကယ်ချစ်ရင် ကို နမ်းပေးမယ်လေ”
“နမ်းတာပဲ ခုရော မနမ်းလို့လား နမ်းလွန်းလို့ နှင်းသက် နှုတ်ခမ်းတောင် ထော်နေပြီ..”
“အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလေ နှင်းသက်ရဲ့ ညီမလေးကိုပြောတာ”
“အာ…. ဘာဖြစ်လို့လဲ နှင်းသက်ကလဲ နော် နမ်းပေးမယ်”
ပြောပြောဆိုဆို ကိုကို ဒါန်းလေးပေါ်မှ ဆင်းလိုက်ကာ မြေပြင်ပေါ်ဝယ်ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်သည်။ နှင်းသက်မှာ ရှေ့တည့်တည့်တွင် ဒူးထောက်ထိုင်နေသော ကိုကို့ကို ကြည့်ကာ ဝတ်ထားသော ဂါဝန်တိုလေးကိုအတင်းဆွဲကာ
ပေါင်နှစ်ချောင်းစိနေအောင် ထိုင်မိသည်။ ကိုကိုကတော့ ဆုံးဖြတ်ပြီးသား ကိစ္စကို ပြီးမြောက်အောင် ရှေ့ဆက်ရန်သာ ရှိသည်ဟု တွေးထားပြီး.. နှင်းသက်ရဲ့ ပေါင်သားဖွေးဖွေးလေးများကို ပွတ်သပ်ကာ နှုတ်ခမ်းလေးကို
အသာအယာ စုပ်ယူနမ်းလိုက်သည်။ နမ်းရင်း နမ်းရင်းနှင့် အရှိန်ပါလာတော့ နှင်းသက်ရဲ့ ပေါင်များ တစ်ဖြည်းဖြည်းနှင့်ပင် အလိုလိုကားသွားသည်… ကိုကို နှင်းသက်ရဲ့ စကပ်လေးကို ဆွဲလှန်လိုက်တော့
နှင်းသက်ဘာမှ မသိချင်တော့ပေ.. မျက်စိအစုံကိုသာ မှေးမှိတ်ရင်း ကိုယ်ပေါ်သို့ ရောက်ရှိလာမည့် မကြုံဖူးသေးသည့် ကြုံလာမည့် အတွေ့အထိများကို မျှော်လင့်လိုက်သည်။ ကိုကို့နှုတ်ခမ်းများ နှင်းသက်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းမှ
ဖယ်ခွါကာ… စက္ကူပန်းခြုံအောက်က လရောင်ရဲ့ မပီဝိုးတဝါး အလင်းရိပ်အောက်မှ ရေးရေးမြင်ရသော နှင်းသက်ညီမလေးဆီသို့ ငုံ့ချလိုက်သည်။
လက်များဖြင့် အမွှေးရေးရေးများကို ဖယ်ကာ နှုတ်ခမ်းဖြင့် ဖိစုပ်လိုက်သည်။ စိုစိစိဖြစ်နေသော နွေးထွေးသည့် ခံစားမှုက ရင်ခုန်ယစ်မူးဖွယ်… ကိုကို နမ်းနေရသည်မှ အဆင်မပြေသလိုဖြစ်နေသည်။
နှင်းသက်ရဲ့ ပေါင်များကို ပိုကားကာ ဒါန်းပေါ်တင်လိုက်သည်။ ထိုအခါမှ ညီမလေးခမျာ ပိုပြီးလွတ်လပ်သွားသည်။ နှုတ်ခမ်းသားများကို လက်နှစ်ဖက်နှင့်ဖြဲကာ ပြူထွက်လာသော အစေ့လေးကို လျှာဖျားလေးနှင့်တို့လိုက်တော့
နှင်းသက်ရဲ့ ပေါင်နှစ်ချောင်းမှာ တစ်ဆတ်ဆတ်တုန်ခါသွားသည်။ ညီမလေးပေါ် နှုတ်ခမ်းကို အပ်ကာ အစေ့ကို သွားများဖြင့် ဖိစုပ်လိုက်တော့ နှင်းသက်ရဲ့ လက်ချောင်းများက ကိုကို့ ဆံပင်များကို လာရောက်ဆွဲကိုင်တော့သည်။
ကိုကို လျှာကို ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် နှင်းသက်ကို ပြုစုတော့သည်။ အစေ့လေးကို လျှာဖျားဖြင့် လျက်လိုက် … အောက်မှ တွင်းဝဆီသို့ လျှာကို ရနိုင်သလောက် ထိုးထည့်လိုက်လုပ်နေတော့သည်။
နှင်းသက်မှာ ဒါန်းပေါ်တွင် ပေါင်နှစ်ချောင်းကားလျက် ကိုကို့ခေါင်းမှ ဆံပင်များကို ဆွဲကိုင်လျက် နှင့်ပင် အရသာထူးကို ခံစားနေတော့သည်။
အစေ့လေးကို စုပ်ရင်း အောက်မှ တွင်းဝကို လက်ညှိုးထည့်ကာ အတွင်းအထွက် လုပ်နေချိန်တွင် နှင်းသက်ညီမလေးအတွင်းမှ အရည်များစိမ့်ထွက်လာကာ ပေါင်များ တစ်ဆတ်ဆတ်တုန်ရင်း နှင်းသက် ပီးသွားတော့သည်။
ကိုကို မျက်နှာတစ်ခုလုံးလဲ ပေပွနေပြီ…. အရည်များရွှဲကာ ပြောင်လက်နေသော ကိုကို့နှုတ်ခမ်းများကို နှင်းသက် စုပ်နမ်းရင်း ကိုကို့ရင်ခွင်ဝယ် မှီထားကာ မှိန်းနေတော့သည်။
တစ်ရက်နှစ်ရက်ဆိုလျှင် နှင်းသက် ကျူရှင်သွားတက်ရတော့မည်။ အဝေးသင်အတွက် သွားတက်တာလို့ ပြောသည်။ ဒီမှာ တက်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ မရတဲ့။ ဟိုမှာပဲ တက်ရမည်။ အဆောင်နေမည် ဆိုတော့လဲ
သွားပေါ့လေ။ လိုက်ပို့လို့လဲမရ၊ နှင်းသက်ရဲ့ အိမ်က လိုက်ပို့မည်။ အဆောင်တွေ ဘာတွေ အပ်ခဲ့ပေးမည်တဲ့။ ကိုကို ဆွေးတော့သည်။ မရရတဲ့အချိန်လေးမှာ ကပ်သပ်တွေ့ကြရင်း အလွမ်းသယ်ကြရပြီ။
အရင်လို နှစ်ယောက်သားတွေ့သည့်အချိန်တွင် အလုပ်ပင်မရှုပ်အားတော့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ဖက်ကာ တတွတ်တွတ် မှာတမ်းခြွေနေကြသည်။ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ဖို့။ သတိရဖို့၊ ဖုန်းဆက်ဖို့
လျှောက်မလည်ဖို့၊ ကျူရှင်ပြီးတာနှင့် ကိုကို့ဆီ အမြန်ဆုံးပြန်လာဖို့၊ မှာတမ်းမှာ ခြွေလို့မဆုံးနိုင် … မျက်ရည်လေးစမ်းစမ်းလုပ်ပြနေသော နှင်းသက်ကို ချစ်လို့မဝနိုင်… အသံတိုးတိုးလေးနှင့်
နှင်းသက်ကို နေ့တိုင်းသတိရနော်.. မမေ့သွားနဲ့နော်တဲ့ … ကိုကို ရင်ထဲမှာ မကောင်း… သွားမှာက တစ်လလောက်သာ ကြာမည်ဖြစ်သော်လည်း စိတ်ထဲတွင် ကိန္နရီ၊ ကိန္နရာများလို နှစ်ပေါင်း ခုနှစ်ရာလောက်
ခွဲရမတတ်ဖြစ်နေကြသည်။ နှင်းသက် ကျူရှင်သွားတက်မည့် မနက်တွင်ပင် မနက်အစောကြီး ကိုကို့ ဓါတ်ပုံဆိုင်လေးသို့လာကာ လာနှုတ်ဆက်သွားသည်။
“ကိုကို နှင်းသက်သွားတော့မယ်။ ဟိုရောက်တာနဲ့ ဖုန်းလိုက်မယ်နော်၊ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်သိလား၊ ကိုကို့ကို နှင်းသက်အရမ်းချစ်တယ်”
ပါးပြင်တစ်ဖက်ကို ဖွဖွနမ်းကာ အပြေးထွက်သွားသော နှင်းသက်ရဲ့ ကျောပြင်လေးကို ကြည့်ကာ ကိုကို သက်ပြင်းမောကို ဟူး ခနဲ မှုတ်ထုတ်လိုက်မိသည်ထင့်
ဆိုင်တွင် ဆက်ထိုင်နေသော်လည်း အလုပ်ထဲ စိတ်မပါ. တပည့်ကျော်ကို ခေါ်ကာ ဆိုင်ပိတ်ခိုင်းလိုက်ပြီး. သူ့ကိုလဲ ပေးပြန်လိုက်သည်။ ဆိုင်ထဲတွင် ကိုကိုတစ်ယောက်တည်း ကွန်ပျူတာရှေ့ ထိုင်ငိုင်နေသည်။
နှင်းသက်နဲ့ ချစ်သူစဖြစ်ပြီးကတည်းက စီးကရက်ကို ဖြတ်ထားသော်လည်း … အခုတော့ ဆေးလိပ်တစ်ဘူးဝယ်ကာ ထိုင်ဖွာရင်း နှင်းသက်ပုံဖွင့်ထားသော စကရင် ကိုကြည့်.. နှင်းသက်အကြောင်းများ
စဉ်းစားနေမိသည်။ နှင်းသက်နဲ့ ချစ်သူဖြစ်ခဲ့တဲ့ သက်တမ်းတစ်လျှောက်တွင် ပျော်စရာများလဲ ကြုံဖူးသလို စိတ်ညစ်စရာများလဲ ကြုံခဲ့သည်။
သို့သော် ကိုကို စိတ်ညစ်စရာများကို ချစ်သည့်စိတ်ဖြင့်သာ ဖျောက်ကွယ်တတ်စမြဲ။ နှင်းသက်သည် အရမ်းချစ်စရာကောင်းသည်။ ကလေးဆန်သည်။ တစ်ခါတစ်ခါ လူကြီးတစ်ယောက်လို့ ဟန်နှင့်ပန်နှင့်
လုပ်တတ်သော်လည်း ကိုကို့မျက်လုံးထဲတွင် ချစ်စရာ ညီမငယ်လေး တစ်ယောက်အဖြစ်သာ မြင်နေတော့ ပြုံးမိသည်။ ထိုသို့အခါမျိုးတွင် နှင်းသက်သည် ချက်ချင်း ကလေးတစ်ယောက်လို
ပြန်ဖြစ်သွားပြန်သည်။ စိတ်ကောက် ၊ ခြေထောက်ဆောင့်၊ နှုတ်ခမ်းကိုက်ကာ စိတ်ဆိုးပြတတ်သည်။ ကိုကို့မှာ ထိုအခါမျိုးတွင် စိတ်မညစ် တစ်ဟားဟားနှင့်သာ အော်ရယ်တတ်သည်။
တစ်ကယ်စိတ်မကောက်မှန်းသိတာကိုး…. ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်လေးတော့ ပြန်ချော့ပေးရသည်။ မိန်းကလေး သဘာဝမို့ အချော့ခံချင်သည်လေ။
ငယ်တော့လဲ ဆိုးနွဲ့ချင်သည်။ ကိုကိုကလဲ အငယ်တစ်ယောက်လိုပင် ဦးစားပေးသည်မို့ သူတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်သူဘဝလေးက ပျော်စရာလေးများဖြင့် ပြည့်နှက်ခဲ့သည်သာ။
ကိုကို အလုပ်လုပ်ရင်း ဂျီတော့ခ်ဖွင့်ထားမိသည်မို့ စကရင်အောက်ညာဘက်ထောင့်နားလေးမှ တက်လာတော့ ချက်ဘောက်လေးကိုကြည့်ကာ ပျော်သွားသည်။
ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူလေး … နှင်းသက် ဟိုကို ရောက်ရောက်ချင်းသာ ဖုန်းဆက်သည်။ ပြီးနောက် အဆက်အသွယ်မရသည်မှာ သုံးရက်ခန့်ရှိပြီ.. နှင်းသက် ဖုန်းက အိမ်တွင် ထားခဲ့သည်မို့ ဖုန်းဆက်လို့လဲမရဘူးလေ.
“နှင်းသက် ဘယ်ကနေ အွန်လိုင်းတက်လာတာလဲ”
“အချိန်မရဘူး ကိုကိုရယ် နှင်းသက် ကျူရှင်အချိန်က အပြည့်ပဲ သိလား ခု ထမင်းထွက်စားတုန်း သတိရလို့ တက်လာတာ”
“ကို နှင်းသက်အသံလေး ကြားချင်သေးတယ်လေ”
“အေးပါ နောက် အဆောင်ပြန်ရောက်ရင် ဆက်လိုက်ပါ့မယ် နော် ခု အရမ်းသတိရလို့ လာကြည့်ကြည့်တာ ဘာလုပ်နေလဲ”
“အလုပ်လုပ်နေတာပါ နှင်းသက်ရယ် “
“ဂျီတော့ခ်ကြီးဖွင့်ပီးတော့ ကောင်မလေးတွေနဲ့ ကျူနေလားမသိဘူး မှန်မှန်ပြော”
“ပီးရော ပီးရော နောက်မှ ညနေဖုန်းဆက်မယ် ရစ်မယ် ခု ကျူရှင်ပြန်သွားလိုက်ဦးမယ်”
ပြောပြောဆိုဆို လိုင်းအောက်သွားသည်။ ကြည့်ရတာ ကျူရှင်အချိန်တွေ ဆက်နေသည်လားမသိ… သို့သော်ဘာပဲပြောပြော ခဏပြောရလဲ ခဏပေမို့ အလွမ်းပြေပါသည်။
ညနေရောက်တော့ ကိုကို ဆိုင်စောစောပိတ်ကာ အိမ်ပြန်လာကာ နှင်းသက်ဖုန်းဆက်မည့် အချိန်ကိုစောင့်နေမိသည်။
အချိန်တွေက တစ်ရွေ့ရွေ့ ကုန်လာပြီ။
(၇) နာရီထိုးရန် 10 မိနစ်အလိုမှပင် ဖုန်းလာသည်။ ကြည့်လိုက်တော့ နှင်းသက်ကျောင်းသွားတက်တဲ့ မြို့လေးရဲ့ ကုတ်နဲ့မို့ နှင်းသက်ပင်ဖြစ်ရမည်။
“ကြာလိုက်တာ နှင်းသက်ရာ ညနေကတည်းကစောင့်နေတာ ခုမှဘာလို့ဆက်တာလဲ မိုးတောင်ချုပ်နေပြီ”
“ကျူရှင်ပီးလဲ နောက်ကျတယ်လေ. ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ထမင်းထွက်စားတာ စားပြီးတော့ ဖုန်းဆက်တာပေါ့”
“ထမင်းက ဒီအချိန်ကြီးထွက်စားတယ် အဆောင်ဘယ်အချိန်ပြန်မလဲ. “
“ပါတယ် နှစ်ယောက် ချောချောလေးတွေ”
“အံမယ် အသံက ဘာဖြစ်သွားတာလဲ”
“မသိဘူးလေ သူငယ်ချင်းချောချောလေးတွေနဲ့ ထမင်းစားနေတော့ ကို့ကိုများ မေ့နေလားလို့ပါ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာ”
“မဟုတ်ပါဘူးကိုရယ် နှင်းသက်စိတ်ထဲမှာ ကို့လောက်ဘယ်သူမှ မချောဘူး… သိလား”
“ထားပါလေ ခု ထမင်းစားပီးပီးမှတ်လား အဆောင်စောစောပြန်နော်…”
ကိုကို နှင်းသက် စကားဆက်ပြေနေသော်လည်း စိတ်ထဲတွင် မကောင်းပေ… စိုးရိမ်သလိုလို ဝမ်းနည်းသလိုလို သာဖြစ်နေတော့သည်။ ယောကျာ်းလေး သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်၊ ချောချောလေး
ထမင်းထွက်စားနေသည်။ မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းများရော ပါရဲ့လား၊ ပြီးရင်အဆောင်ပြန်မှာလား ဟိုကောင်လေးတွေ လိုက်ပို့မှာပေါ့… ကျူရှင်လဲ အတူတူသွားကြမှာပဲ
အတွေးတွေ ချာချာလည်ကာ ကိုကို ည အိပ်မပျော်…………………
နှင်းသက် ကျူရှင်က ပြန်လာပြီး နှစ်ပါတ်ခန့် အကြာတွင် ကျောင်းများ ဖွင့်သောကြောင့် ကျောင်းသွားပြန်တက်ရပြန်သည်။ ကိုကို ခမျာ အလွမ်းတွေ အတိုးချမယ်တောင် မကြံရသေး တစ်ခေါက်ပြန်ခွဲရပြန်ပြီ…
ကျောင်းသွားပြန်မတက်ခင် ပြန်ရောက်လာသည့် နှစ်ပါတ်တာ ကာလကလဲ ဘာမှ မကြာလိုက်သည့်အပြင် ကောင်းကောင်းပင်မတွေ့ရ။ အရင်လို ညဘက် သွားတွေ့ချင်သော်လည်း
စာတွေကျက်နေရသည် ဆင်းလာလို့မရဟုဆိုကာ အရင်လို ကြာကြာလဲ မတွေ့ရ။ နှစ်ခါလား သုံးခါလား ဒီလောက်ပဲ သွားတွေ့လိုက်ရသည်။ ဖုန်းဆက်လျှင်လဲ ခဏသာ ဆက်ရသည်။ ကြာကြာမပြောရ။
နှင်းသက် ကျူရှင်သွားတက်ပြီးပြန်လာကတည်းက နည်းနည်းပြောင်းလဲသွားသလိုပင်။ ကိုကို စိတ်များမတည်ငြိမ်။ ယောက်ယက်ခတ်နေသည်။ နှင်းသက်တစ်ယောက် ကျူရှင်သွားတက်ရင်းများ
ရည်းစားရသွားလို့လား။ သူ သူမ ကို မစွန့်လွှတ်နိုင်။ တစ်ဘဝလုံးစာ ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ နှင်းသက်ကို ဘယ်လောက်ထိ ချစ်လဲ ဆိုသည်မှာ ကိုကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို အသိဆုံးဖြစ်သည်။
စိတ်ကို တည်ငြိမ်အောင်ထားပြီး အလုပ်ထဲသို့ စိတ်နှစ်ထားလိုက်သည်။ အလုပ်ထဲ စိတ်ပါဝင်စားလို့မရအောင် နှင်းသက်အကြောင်းများ ကိုကို့အတွေးထဲမှာ စိုးမိုးထားသည်။
နှင်းသက် ကျောင်းသွားပြန်တက်ကတည်းက ကိုကို့ဆီကို ဖုန်းမဆက်သည်မှာ တစ်ပါတ်ခန့်ရှိနေပြီ။ အွန်လိုင်းတွင်လဲ မတွေ့။
ကိုကို့ အတွေးစိတ်ကူးများကို နောက်တစ်နေ့ မနက်စောစောမှာပင် နှင်းသက်က ဖုန်းဆက်ခြင်းနှင့် ချေဖျက်လိုက်သည်။ ကျောင်းသို့မနက်စောစောသွားရသည်။ ညနေမှပြန်ရောက်ကာ..ထမင်းတောင်အပြင်မထွက်စား
အဆောင်သို့ ဝယ်လာကာ အဆောင်မှာပင်စားသည်။ ပြီးတာနှင့် စာများ စကျက်ရတော့သည်။ ညတော်တော်မိုးချုပ်မှ အိပ်ရသည်တဲ့။ နောက်ပိုင်းလဲ ဖုန်းဆက်မည်မဟုတ်တဲ့။ အရေးကြီးမှသာဆက်မယ်တဲ့
ဘာမှ စိတ်မပူရန်နှင့် ကိုကို့ကို အရမ်းလွမ်းကြောင်း အိပ်မက်မက်ကြောင်းပြောသည်။ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ရန်ပြောသည်။ နောက်ဆုံးစကားလေးကြားရတော့ ကိုကိုအရမ်းပျော်သွားသည်။
ဖုန်းဆက်ရန် အချိန်မပေးနိုင်သော်လည်း ညဘက် ညဘက် စာကျက်ချိန် သတိရသောကြောင့် ကိုကို့ထံ စာရေးထားသည်တဲ့။ စာပို့ထားသည် ပြောသည်။ ဓါတ်ပုံလေး ထည့်ပေးထားသည်။
စာဖတ် ဓါတ်ပုံကြည့်ရင်း အလွမ်းဖြေထားတဲ့။ စာမေးပွဲနားနီးရင် ဖုန်းတစ်ခေါက်ထပ်ဆက်မယ်ဆိုကာ ဖုန်းချသွားသည်။
ကိုကို နှင်းသက်ဆီမှာ ဖုန်းလာသောကြောင့် နေရထိုင်ရသည်မှာ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားသည်။ နှင်းသက်ဆီမှ ဖုန်းလာပြီး နှစ်ရက်ခန့်အကြာတွင် နှင်းသက်ရေးထားသော စာနှင့် ဓါတ်ပုံရောက်လာသည်။
အရမ်းလွမ်းတယ်ကွယ်။ ကိုရော နှင်းသက်ကို သတိရရဲ့လား။ ကြည့်ရတာ နှင်းသက်ကို စိတ်ဆိုးနေတယ်ထင်တယ်။ ဖုန်းလဲ မဆက် အဆက်အသွယ်လဲ မလုပ်လို့ ဆိုပြီး
စိတ်မဆိုးပါနဲ့ ကိုရယ်။ နှင်းသက် မှာ ဖုန်းဆက်ဖို့တောင် အချိန်မရှိတာ တကယ်ပါ။ အရမ်းပင်ပန်းတာပဲ။ မနက်အစောကြီး ကျောင်းသွားရတယ်။ ညနေမှ အတန်းတွေကပြီးတယ်
အရင်လို ကျူရှင်တက်တုန်းကလိုမျိုး လိုက်တောင် မလည်ရပါဘူးကွယ်။ တကယ်ပါ။ စာတွေ အများကြီးပဲ တစ်အားကျက်ရတာ။ ထမင်းလဲ ကျောင်းကပြန်လာရင်းနဲ့ တစ်ခါတည်းဝယ်လာပြီး
အဆောင်မှာပဲ စားရတယ်။ အဆောင်နဲ့ ကျောင်း၊ ကျောင်းနဲ့အဆောင်ပဲ သွားဖြစ်တယ်။ ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ ကို့ကို သတိမရတာ မဟုတ်ဘူးနော်. ကို့ကို အရမ်းသတိရတယ်။
နှင်းသက် ပြန်လာတုန်းကလဲ ကိုနဲ့ သိပ်မတွေ့ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ။ နှင်းသက်ကို နားလည်ပေးပါကွယ် နော်… ကိုက လိမ္မာပါတယ်။
နှင်းသက် ဓါတ်ပုံလေး ထည့်ပေးလိုက်တယ်.. လှတယ်ဟုတ်.. ဟဲဟဲ ကြည့်ကြည့် ကိုပြုံးနေပြီ… သိတာပေါ့ ကိုနှင်းသက်ကို အရမ်းချစ်တယ်ဆိုတာကို
ခုလေ နှင်းသက် ပန်ဒါလေး ဖြစ်နေပြီးသိလား .. အိပ်တာလဲ မမှန်.. စာတွေ အရမ်းကျက်ရတော့ မျက်ကွင်းတွေညိုပီး ပန်ဒါလေးဖြစ်နေတာ..
ကို တစ်ခုပြောစရာရှိတယ်သိလား။ နှင်းသက် စာမေးပွဲတွေ ဖြေပီးရင် အိမ်ကို ချက်ချင်းမပြန်ဘူး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လိုက်လည်မယ် နှစ်ရက်သုံးရက်ကြာမယ်ပြောထားတယ်
ကို နှင်းသက်ဆီ လာမလားဟင်။ ကိုနဲ့ နှင်းသက်လိုက်လည်ကြမယ်လေ…
သြော်….. အလုပ်တွေ မအားဘူးဟုတ်လား … အင်းလေ မလာချင်ရင်လဲ ပီးရော… နှင်းသက် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲ လိုက်လည်တော့မယ်…
ကိုကို နှင်းသက်ရဲ့ စာကို ဖတ်ကာ အရမ်းပျော်သွားသည်။ စာ လေးစောင်ပါလာသော်လည်း ဒီစာကို ဖတ်ရတာ အပျော်ဆုံးဖြစ်နေသည်။
စာထဲတွင် စာမေးပွဲ ဘယ်နေ့ ဖြေရမလဲ ဘယ်နေ့ပြီးမလဲဆိုတာတော့ မပါသေး… ဒီလကုန်လောက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဟားဟား ဒီလကုန်လျှင် နှင်းသက်ဆီ လိုက်သွားမည်။ လိုက်လည်မည်။
စာနှင့်အတူပါလာသော် ဓါတ်ပုံလေးကိ ကြည့်ကာ တစ်ဝကြီးနမ်းပစ်လိုက်သည်။ ယခုတော့ ဓါတ်ပုံလေးကို နမ်းထားဦးမယ်… တွေ့တော့မှသာ လူကို အရှင်လတ်လတ် ပါးတွေ ချိုင့်သွားအောင်
“အင်း … ကို ဘာလုပ်နေလဲ”
“နှင်းသက် ကို သတိရနေတာပေါ့ကွာ”
“ခစ် သူများစိတ်ချမ်းသာအောင် ပြောတတ်တယ် ခု စာမေးပွဲဖြေရတော့မယ်လေ… သိလား ကို “
“ရပြီ… ၂၃ ရက်နေ့ဖြေရမယ် ၃၁ ရက်နေ့ ပြီးမယ် “
“ဟုတ်လား အတော်ပဲ ၃၀ ရက်နေ့ ည ကိုယ် နှင်းသက်ဆီလာခဲ့မယ်လေ.နော်..”
“အင်း နှင်းသက်အဆောင်မှာလာခေါ်ပေါ့ မနက်”
“အား……. ဘယ်ရမလဲ နှင်းသက်လဲ ကိုနဲ့လိုက်နေပေါ့”
“ဟာ….. မနေချင်ပါဘူး ရှက်စရာကြီး..”
“အံမယ် ရှက်တယ်ပေါ့… ကိုက နှင်းသက် နှုတ်ခမ်းလေးတွေ နှင်းသက်ရဲ့ ချိုချိုလေးတွေကို သတိရနေတာ ညီမလေးကိုလဲ အရမ်းသတိရတယ် “
“ဟာ ဘာတွေ ပြောနေမှန်းလဲ မသိဘူး.. တော်ပြီကွာ လာမယ်မဟုတ်လား အဆောင်နေရာပြောပြထားမယ်”
နှင်းသက်ရေ………………….. နှင်းသက်ဆီကို ကိုယ်လာပြီဟေ့………………..
ကိုကို မနက်အစောကြီးရောက်သည်။ ရောက်ကတည်းက အခန်းသွားယူထားလိုက်သည်။ အခန်းကလေးက ကောင်းသည်။ ဘန်ဂလို လေးဖြစ်သော်ကြောင့် ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းနှင့် နေရထိုင်ရသည်မှ သန့်သည်။
နှစ်ယောက်ခန်းဖြစ်သော်ကြောင့် နှစ်ယောက်အိပ်ကုတင်ကျယ်ကြီးကလဲ ကိုကို့ကို စိန်ခေါ်နေသည်။ ဒီအိပ်ယာကြီးပေါ်တွင် ညရောက်ပါက နှင်းသက်နှင့် ချစ်ဗျူဟာ စစ်တလင်းခင်းရမည်။
ကိုကိုနှင့် နှင်းသက် တိုင်ပင်ပြီးသားဖြစ်သည်။ စာမေးပွဲပြီးလျှင် ပြီးသည့်နေ့တွင်ပင် နှင်းသက်နှင့် ကိုကို ကားဂိတ်တွင် ချိန်းထားသည်။ နှင်းသက်က ညကတည်း အဝတ်အစား သိမ်းဆည်းစရာရှိသည်များ
သိမ်းထားမည်။ စာမေးပွဲပြီးသည်နှင့် အိမ်ပြန်မည်ပြောကာ ကားဂိတ်သို့ဆင်းမည်ဖြစ်သည်။ ထိုမှ ကိုကိုနှင့် ဟဲဟဲ…..။
ခဏလောက်တော့ အိပ်ထားမှ ဖြစ်မည်။ တစ်ညလုံးကားမောင်းလာခဲ့ရသောကြောင့် တစ်ကိုယ်လုံးကိုင်ရိုက်ထားသလို ဖြစ်နေသည်။ ဇက်ကြောတွေလဲ တက်နေသောကြောင့်
ရေနွေးလေးစပ်ကာ စိမ်ပြီးချိုးလိုက်သည်။ နာရီဝက်ခန့် ရေနွေးနှင့် စိမ်ပြီးသောအခါ ကိုယ်လက်အညောင်းအညာများ ပြေလျော့ကာ အိပ်ချင်လာသည်။
မနက်စာ မှာစားပြီး… တစ်ရေးတစ်မောအိပ်လိုက်သည်။ နေ့လည် (၁၁) နာရီခန့် နှိုးဖို့လဲ ကောင်တာတွင် မှာထားလိုက်သည်။ သွားကြိုရမည်လေ။
နေ့လည် (၁ဝး၄၅) တွင် ကောင်တာမှ ဖုန်းနှင့်နှိုးသော်ကြောင့် အိပ်ရာက နိုးလာတာနှင့် မျက်နှာသစ် ကိုယ်လက်သန့်စင်ကာ နှင်းသက်ကို ကြိုရန် အဝေးပြေးသို့ ထွက်လာခဲ့လိုက်သည်။
အဝေးပြေးသို့ရောက်လျှင် နှင်းသက်နှင့် ချိန်းထားသော နေရာတွင် ကားရပ်ကာ စောင့်နေလိုက်သည်။ နှင်းသက် စာမေးပွဲဖြေနိုင်ရဲ့လားမသိ။ ဖြေနိုင်ဖို့အရေးကြီးသည်။
ဒါမှသာ စိတ်လက်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနှင့် ပျော်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အငှားကားပေါ်မှ ဆင်းလာသော နှင်းသက်ကို တွေ့လိုက်သည်။ အိတ်နှစ်လုံးနှင့် ပုံစံက ခရီးသွားမည့်ပုံ။ ကိုကို ကားထဲမှ ထွက်ကာ နှင်းသက်ဆီကို လျှောက်သွားလိုက်သည။်
နှင်းသက်ကို ခေါ်ကာနှစ်ယောက်သား ကားနှင့်ပင် အခန်းယူထားသော ဟိုတယ်သို့ ပြန်ထွက်လာခဲ့သည်။ ကားကို ဘန်ဂလိုလေးတွေအထိ မောင်းယူသွားနိုင်သော်ကြောင့် အဆင်ပြေသည်။
နှင်းသက်ကို ကားနှင့်တစ်ခါတည်း အခန်းရှေ့ထိ ခေါ်သွားလိုက်သည်။ အခန်းထဲသို့ အိတ်များကို သယ်ကာ နေရာချပြီးတော့ နှင်းသက်ကို ကိုကိုကြည့်လိုက်သည်။
နှစ်ယောက်သား ရှိုးတို့ရှန့်တန့်တော့ ဖြစ်မနေပါ. နှစ်ဦးစလုံးမှာ အတွေ့အကြုံက ရှိသင့်သလောက်တော့ အစပျိုးမိသားမို့ နေသာထိုင်သာတော့ဖြစ်သည်။
“နှင်းသက် ရေချိုးမလား ရေချိုးရင် ချိုးလိုက်လေ”
“အင်း ကောင်းတယ် လောလောဆယ် ဗိုက်ဆာတယ် ဘာမှ မစားရသေးဘူး”
“ဒါဆို ဒီလိုလုပ် ကို စားသောက်ခန်းမှာ စားစရာတွေ မှာထားမယ် နှင်းသက် ရေချိုးလိုက် ပြီးရင် သွားစားကြမယ်”
နှင်းသက် ပြောပြောဆိုဆို အခန်းတွင်းမှ မှန်တင်ခုံရှေ့သွားကာ အဝတ်လဲပါတော့သည်။ ကိုကို မှန်တင်ခုံရှေ့မှ ခုံတွင်ထိုင်ကာ ကြည့်နေလိုက်သည်။
“အဲ့ဒါက ရုပ်ရှင်လေ ဒါက နှင်းသက်”
“ညဘက် ခြံထဲမှာ တွေ့တာကရော”
“အဲ့ဒါက မှောင်တယ် “
သို့သော် ကိုကို ဘာမှ မမြင်လိုက်ရ အဝတ်လဲသည်မှာ ရေချိုးခန်းထဲမှ တဘက်အကြီးယူကာ ဘယ်လိုလဲသည်မသိ နည်းနည်း တစ်စွန်းတစ်စနှင့်သာ ကျေနပ်လိုက်ရသည်။
“သွား ဟင်းသွားမှာပေးနော် ဗိုက်ဆာပြီ”
အေးလေ နေနှင့်ဦးပေါ့ ညကျရင်တွေ့မယ် ကိုကိုတေးထားကာ စားသောက်စရာများမှာရန် ဖုန်းကို ကောက်ကိုင်ပြီး စားသောက်စရာများ မှာထားလိုက်သည်။ နာရီဝက်ခန့် အကြာ နှင်းသက်ရေချိုးခန်း အတွင်းမှ
ထွက်လာသည်။ ရေချိုးပြီးကာစ မိန်းကလေးတစ်ဦးကို ခုမှပင် စတွေ့ဖူးသော ကိုကို ရင်ခုန်သံတွေ မြန်သွားသည်။ ရေစက်ကလေးများသီးနေသော နှင်းသက်မျက်နှာလေး မြင်ရသည်မှာ သင်္ကြန်ကို ပြန်အမှတ်ရမိသည်။
မှန်တင်ခုံဝယ် ထိုင်ကာ ရေသုတ်နေသော နှင်းသက်ကို ကိုကို နောက်မှ သိုင်းဖက်လိုက်သည်။ အသားလေးတွေက အေးစက်စက်နှင့် ရေစက်သီးနေသော ပါးမို့မို့လေးကို နမ်းရသည်မှာ လတ်ဆတ်လွန်းလှသည်။
နှင်းသက် မှန်ထဲမှ ကိုကို့ကို ကြည့်ကာ အသာအယာပင် အလိုက်သင့် မျက်နှာလေးကို စောင်းငဲ့ကာ ကိုကိုနှုတ်ခမ်းမှ အနမ်းများကို သူမ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးဖြင့် ကြိုလိုက်သည်။
နှင်းသက်ကိုယ်လုံးလေးကို ဖက်ကာနမ်းနေသော ကိုကို့မျက်နှာမှ နှင်းသက်ခွါကာ နှင်းသက်အဝတ်အစားလဲပြီး ထမင်းသွားစားရအောင်တဲ့။ မချင့်မရဲ လွှတ်ပေးလိုက်ရသော ကိုကို့ကို နှင်းသက်
အဝတ်အစားလဲရင်း တမင်ပင် မပေါ့်တပေါ်လှစ်ပြရင်း ကျီစယ်နေသည်။ ကိုကိုနှင့် နှင်းသက် ထမင်းစားသောက်ပြီးချိန် နေ့လည် ၂ နာရီကျော်လေပြီ။ နှင်းသက် ဘုရားသွားဖူးချင်သည်။
စာမေးပွဲဖြေနိုင်သော်လည်း ဘုရားတွင် ဆုတောင်းချင်သေးသည်။ လိုက်လည်ချင်သည်ဆိုသော်ကြောင့် နှစ်ယောက်သား ညနေခင်းအချိန်များကို ဘုရားသွား၊ မြို့ထဲလိုက်လည် ညနေစောင်း
ကော်ဖီဆိုင်ထိုင်ပြီး ဟိုတယ်သို့ပြန်လာတော့ ည (၇) နာရီ။ အခန်းတွင်း အဝတ်အစားလဲပြီး အိပ်ယာကျယ်ပေါ်သို့ ကိုကို့ကို ကြည့်နေသော် နှင်းသက်ကို သွားပွေ့ချီလိုက်သည်။
ဘာစကားတစ်ခွန်းမျှမဆိုဖြစ်ပဲ နှင်းသက်နံဘေးနား ဖြေးညှင်းညင်သာစွာ ဝင်လှဲပြီး နဖူးလေးကို ငုံနမ်းလိုက်တော့ နှင်းသက်မျက်လုံးလေးများ အလိုလို မှေးစင်းသွားသည်။
နှင်းသက်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးများကို စုပ်နမ်းလိုက်တော့ နှုတ်ခမ်းလေးများ ပွင့်ဟလာကာ ကိုကို့ ကျောပြင်ကျယ်ကြီးကို လက်လေးများဖြင့် သိုင်းဖက်လာတော့သည်။
ကိုကိုရဲ့ အနမ်းများသည် နှင်းသက်မျက်နှာပြင်သာမက လည်ပင်းရင်ညွန့်များထိအောင် ကျဆင်းလာတော့သည်။ ကိုကို့လက်များက နှင်းသက်ရဲ့ ရင်သားလုံးလုံးလေးများကို ဘရာဇီယာကိုချွတ်ကာ
လွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်သည်။ ရင်နှစ်မွှာမှာ ကိုကို့ မျက်စိရှေ့သို့ လွတ်လပ်စွာ ပွင့်အံကျလာသည်။ ကိုကို ညာဘက်လက်ဖြင့် နှင်းသက် ရဲ့ ရင်သားတစ်ဖက်ကို ဆုပ်ချေရင်း တစ်ဖက်မှလဲ
ရင်သားများကို အငမ်းမရ စို့ပစ်လိုက်သည်။ တစ်ပြွတ်ပြွတ်မည်အောင် စို့နေသော ကိုကို့ရဲ့ခေါင်းကို နှင်းသက်လက်ချောင်းများကို လာရောက် ပွတ်သပ်နေတော့သည်။ ရင်အစုံကို ကော့ထိုးကာ
တစ်ဟင်းဟင်း ငြီးငြူနေသော နှင်းသက်ရဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးကို ကိုကို သွားဖြင့်ဖွဖွကိုက်ရင်း ဆော့နေသည်။ နှင်းသက်သည် ကိုကို့နှုတ်ခမ်းများကို ပြန်လည်စုပ်နမ်းရင်း လက်များက
ကိုကို့ညီလေးဆီသို့ ရောက်လာသည်။ ညဝတ်ဘောင်းဘီအောက်မှ ထိုးဖောက်မတတ် မတ်ထောင်ကာ တင်းနေသော ကိုကို့ညီလေးကို နှင်းသက် ဘောင်းဘီကြားမှ ထုတ်ယူလိုက်သည်။
အပြင်သို့ရောက်လာသော ညီတော်မောင်မှာ နီရဲပြောင်လက်ကာ ပေါက်ကွဲမတတ်တင်းမာနေသည်။ ကိုကို နှင်းသက်ရဲ့ အဝတ်အစားများကို ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်သည်။
နှင်းသက်လဲ ချွတ်ရလွယ်အောင် အလိုက်တသင့် ကူချွတ်ပေးရင်း ကိုကို့အကျီ င်္များကိုပါ ဆွဲချွတ်လိုက်သည။် နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ စိတ်ထဲတွင် ဘာမှ မသိကြတော့ ယခုအချိန်တွင် စူးစိုက်ထားသော
အာရုံတစ်ခုသာ ရှိတော့သည်။ ကိုကို အဝတ်အစားများကျွတ်သွားသော နှင်းသက်ကို အိပ်ယာပေါ်သို့ တွန်းလှဲကာ ပေါင်ကြားအတွင်း ဝင်ကာ နှင်းသက်ရဲ့ အဖုတ်လေးကို မျက်နှာအပ်လိုက်သည်။
အမွှေးရေးရေးလေးများထောင်နေသော နှင်းသက် အဖုတ်ကလေးမှာ ကိုကို လျှာဖျားအောက်ဝယ် နီရဲ စိုလက်လာသည်။ ကိုကို နှင်းသက်ရဲ့ အစိကလေးကို လျှာဖျားလေးဖြင့် လျက်ပေးလိုက်တော့
နှင်းသက် အိပ်ယာပေါ်မှ ကြွတက်လာသည်။ ပေါင်များမှာ တစ်ဆတ်ဆတ်တုန်နေသည်။ တံတွေးများဖြင့် ပြောင်လက်နေသော အစိကလေးကို ကိုကို အပေါ်အောက်သွားကြားထဲ ထည့်ကာ လျှာဖြင့်ကပ်ရင်း
စုပ်ပေးလိုက်တော့ နှင်းသက် ကိုကို့ခေါင်းကို ဆွဲကိုင်ကာ အတင်းဖိကပ်ထားတော့သည်။
“ကိုရယ် နှင်းသက် မနေနိုင်တော့ဘူး မနမ်းပါနဲ့တော့နော်”
နှင်းသက်ရဲ့ အဖုတ်ကလေးမှ ခွာကာ သူမရဲ့ ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ကားလိုက်သည်။ သွယ်လျ ဖြူဝင်းသော ပေါင်တံတစ်လျှောက် ကိုကို လက်ဖြင့်ပွတ်သပ်ကာ အဖုတ်လေးကို လက်ဖြင့် အသာအယာဖြဲလိုက်သည်။
သူမ အဖုတ်ဝလေးတွင် ကိုကို ညီလေးကို ဖိတေ့လိုက်သည်။ နှင်းသက်ကို ကြည့်တော့ မျက်ဝန်းအစုံကို မှေးမှိတ်ထားရင် ကိုယ်တွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာမည့် အရာကို စောင့်စားနေဟန်။
ကိုကို ဒုတ်ကို ခေါင်းမှ ကိုင်ကာ သူမ အဖုတ်လေးတွင်းသို့ ဖိသွင်းလိုက်သည်။ စေးကျပ်လှသော အဖုတ်ကလေးမှ ကြီးမားတင်းကားသော ဒုတ်ကို ချက်ချင်းလက်မခံနိုင်ပါ။ ကြပ်သိပ်နေသည်။
ကိုကို နှင်းသက် ပေါင်များကို ပိုပြီးဖြဲကားလိုက်သည်။ ပြီးလျှင် ဒုတ်ကို သေချာတေ့ကာ သူမ အဖုတ်လေးကို လက်ဖြင့် အသာအယာဖြဲရင်း ဖိသွင်းလိုက်တော့ ကိုကို့ဒုတ်မှာ တစ်ဖြည်းဖြည်း နှင်းသက်အဖုတ်တွင်းသို့
တိုးဝင်သွားသည်။ ခေါင်း မြုပ်သွားပြီနောက်. နှင်းသက်ကို ကြည့်လိုက်တော့ နှုတ်ခမ်းများကိုကိုက်ကာ အံကြိတ်ထားသည်။ ကိုကို ဒုတ်ကို ခေါင်းမြုပ်ရုံလေးထားရင်း အသွင်းအထုတ်လုပ်လိုက်သည်။
တစ်ဖြည်းဖြည်းနှင့်ပင် တိုးဝင်သွားရာ ယခုဆိုလျှင် နှင်းသက်ရဲ့ အဖုတ်တွင်းသို့ ကိုကို ဒုတ်တစ်ဝက်ခန့် ဝင်ရောက်နေပီးဖြစ်သည်။ နှင်းသက်ဆီမှလဲ ငြီးသံလေးထွက်ကာ စစချင်းလို တင်းမထားတော့ပေ။
နှင်းသက်ရဲ့ အဖုတ်တွင်းမှ အရည်များ ပိုမို များပြားလာရာ တော်တော်အဆင်ပြေနေပြီမို့ ကိုကို နှင်းသက် ပုခုံးလေးကို ဖိကာ သူမအဖုတ်အတွင်းသို့ ဒုတ်ကို အဆုံးထိ ဖိထည့်လိုက်သည်။
တင်းကျပ်စေးပိုင်သော တွင်းသို့ ဝင်သွားသော ဒုတ်မှာ အရေပြားများဆွဲလှန်ခံရသကဲ့သို့ နာကျင်လှသည်။ နှင်းသက်သည် အား……. ဟု အသံတစ်ချက်ထွက်လာကာ ကြိတ်နေတော့သည်။
ကိုကိုရဲ့ ဒုတ်မှာ နှင်းသက်အဖုတ်တွင်း အဆုံးထိ ဝင်သွားလေပြီ.. ကိုကို ခဏနားကာ နှင်းသက်ကို နမ်းလိုက်သည်။ ထိုမှ တစ်ဖြည်းဖြည်း ပြန်လှုပ်ရှားရင်း အဝင်အထွက်လုပ်တော့သည်။
နှင်းသက်လဲ တစ်ဖြည်းဖြည်းနှင့် အရှိန်ရလာကာ အောက်မှာ ပြန်ပြန်ကော့ပင့်ပေးနေသည်။ ကိုကို စစချင်းမို့ ညှာကာ ဖြည်းဖြည်းလုပ်သော်လည်း အရှိန်ရလာသောအခါ ခပ်မြန်မြန်လေးဆောင့်တော့သည်။
အခန်းတွင်းဝယ် အသက်ရှုသံ တစ်ဖတ်ဖတ်မြည်သံများ တစ်ဖြည်းဖြည်းနှင့်ပြင်းထန်လာတော့သည်။ စေးကျပ်လှသော အဖုတ်ကလေးကို လုပ်နေရသည်မို့ ကိုကို ဖီးလ်မှာသူမတူအောင်ကောင်းလှသည်။
အချက်ငါးဆယ်ခန့်ခပ်မှန်မှန်နှင့် မြန်မြန်လေးဆောင့်ပြီးချိန်ဝယ် နှင်းသက်မှ ငြီးငြူသံများ ပြင်းထန်လာကာ ခပ်မြန်မြန်လေးနှင့်ကြမ်းကြမ်းလေး လုပ်ပေးရန်တောင်းဆိုတော့သည်။
ကိုကို အရှိန်မြင့်တင်ရင်း ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ဆောင့်ပေးလိုက်သည်။ နောက်ထပ်အချက်ငါးဆယ်ခန့်ဆောင့်ပြီးချိန်ဝယ် နှင်းသက်ရဲ့ ခြေထောက်များနှင့် လက်များသည် ကိုကို့ကို ကုတ်တွယ်လာရင်း ကျောပြင်များကိုကုတ်ကာ
ကိုယ်ခန္ဒာတစ်ဆတ်ဆတ်တုန်ရင်း ငြိမ်သက်သွားတော့သည်။ ကိုကိုလဲ ဆက်တိုက် ဆယ်ချက်ခန့်ဆောင့်ပြီး သုတ်ရည် ပူပူများကို နှင်းသက်ကိုယ်တွင်းသို့ ပန်းထုတ်ရင်း
နှင်းသက်ကိုယ်ပေါ်မှောက်ချကာ အသက်ကို လုရှုနေရတော့သည်။
ပြတင်းတံခါးမှ လိုက်ကာကိုဖြတ်ကာ ဝင်လာသော နေခြည်နုနုရဲ့ အလင်းတန်းနှင့်အတူ ကိုကို အိပ်ယာမှ နိုးလာသည်။ သူ့ လက်မောင်းကို ခေါင်းအုံးကာ ဖက်ပြီး အိပ်ပျော်နေသော နှင်းသက်မျက်နှာက
ဆံနွယ်ဖရိုဖရဲနှင့် တစ်မျိုးလေးချစ်စရာကောင်းသည်ထင်သည်။ ကိုကို နှင်းသက်ဘက်လှည့်ကာ မျက်နှာပေါ်ဝယ် အုပ်ကျနေသော ဆံနွယ်အချို့ကိုသပ်တင်ပေးကာ နဖူးပြင်ကို ဖွဖွ နမ်းလိုက်သည်။
ညတုန်းက ချစ်ပွဲဝင်ကြတာ (၁) နာရီခန့်မှ အိပ်ဖြစ်သည်ထင်သည်။ (၁) နာရီမှ အိပ်သော်လည်း နံနက် (၄) နာရီခန့် တစ်ရေးနိုးတွင် လင်းဆွဲလေး တစ်ခေါက်ဆွဲလိုက်သေးသည်။
နှစ်ယောက်သားငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် ဆူဖြိုးသည့်အရွယ်ဆိုတော့လဲ စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါနိုင်ကြသည်။ ညက တစ်ညလုံး ပုံစံမျိုးစုံနှင့် အားသွန်ခွန်စိုက် ဆက်ဆံထားသော်လည်း မနက်အိပ်ယာနိုးနိုးချင်းတွင်
ကိုကိုရဲ့ ညီတော်မောင်က မတ်နေပြန်သည်။ နှင်းသက်ကိုတော့ မနှိုးချင်သေးပေ။ ညတုံးက တစ်ညလုံး တိုက်ပွဲဝင်ရာတွင် ခံစစ်အနေအထားမို့ သူလဲပင်ပန်းနေမည်လေ အိပ်ပါစေ…
ကိုကို အိပ်ယာပေါ် ပြန်လှဲကာ သူ့ကိုဖက်ထားသော နှင်းသက်ကိုယ်လေးကို ပြန်ဖက်ရင်းညက အကြောင်းများပြန်စဉ်းစားကာ ပြုံးနေမိသည်။
“စာမေးပွဲလဲပြီးပြီ.. ကို့အနားမှာလဲ နေရတယ် နှင်းသက်အရမ်းပျော်တာပဲ”
စကားပြောကာ ကိုယ်အနေအထားရွေ့သောကြောင့် ကိုကို့ကို ဖက်ထားသော နှင်းသက်ရဲ့ လက်များက ကိုကို့ညီလေးကို သွားထိမိသည်။
“ဟယ်…..ကြည့်စမ်း ကို ကတော့ လွန်တယ်ဟေ့ မနက်အစောကြီး ပြန်ထောင်နေပြန်ပြီ”
“ဟဲဟဲ …. ညီမလေးကို လွမ်းလို့တဲ့ ခေါင်းထောင်ပြီးလိုက်ရှာနေတာ..”
“တော်ပြီကွာ… တစ်ညလုံးလဲ မအိပ်ဘူး ဘာတွေလုပ်နေမှန်းမသိဘူး ထ… မျက်နှာသစ် ရေချိုး မနက်စာစားပြီး လိုက်လည်ရအောင်”
ကိုကို အိပ်ယာထဲ ခဏလှဲပြီးမှ ရေချိုးခန်းထဲ လိုက်ဝင်သွားလိုက်သည်။ ရေချိုးခန်းအတွင်းဝယ် ရေပန်းအောက်မှ ကိုယ်တုံးလုံးလေးနှင့် နှင်းသက်ကို ကြည့်ကာ ကိုကိုလဲ နှင်းသက်ဆီတိုးဝင်လိုက်ရင်
နှုတ်ခမ်းအစုံကို စုပ်နမ်းလိုက်သည်။ နှင်းသက်အနမ်းမခံပါ။
“အာပုတ်ကြီးနဲ့ သွားတိုက်ဦး လစ်”
ကိုကို ကမန်းကတန်း မျက်နှာသစ် သွားတိုက်ပြီး ရေပန်းအောက် ပြန်လာတော့ နှင်းသက်က ဆပ်ပြာတိုက်နေပြီ။ ကိုကို နှင်းသက်ဆီမှာ shower gel ယူကာ နှင်းသက် ကိုယ်လုံးလေးကို ဆပ်ပြာမြုပ်များဖြင့်
ပွတ်သပ်ပေးလိုက်သည်။ဆပ်ပြာတိုက်ရင်းနှင့် နှင်းသက်ကို အနောက်မှ သိုင်းဖက်ကာ ဂုတ်သားလေးကို ဖွဖွ နမ်းလိုက်သည်။ အနောက်ဘက်သို့ ခပ်စောင်းစောင်းလေး လှည့်လာသော နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးများကို
စုပ်နမ်းလိုက်သည်။ လက်များကလဲ သူမရဲ့ နို့များကို ပွတ်သပ်ဆုပ်နယ်နေသည်။ နို့သီးခေါင်းလေးများ မာလာသောအခါ လက်ညှိုးလက်မနှင့် ဖိညှစ်ကာ ကစားနေမိသည်။ အနောက်သို့ ကော့နေသော နှင်းသက်ရဲ့
တင်ပါးကြားတွင် ကိုကို့ညီတော်မောင်က နေရာယူထားသည်။ အနောက်မှနေကာ နှင်းသက်ကို ကပ်တွန်းရင်း လက်များကို သူမ ညီမလေးဆီသို့ ပို့လိုက်သည်။ သူမလဲ စိတ်ပါနေပြီဖြစ်သည်။
ကိုကို့နှုတ်ခမ်းများကို ပြန်နမ်းရင် လက်များက ပြောင်းပြန်သိုင်းဖက်လာသည်။ ရေပန်းမှ ကျလာသော ရေစက်နွေးများအောက်မှ လူသားနှစ်ယောက် အလုပ်ရှုပ်နေပြီ။ ကိုကို နှင်းသက် ကို သူ့ဘက် ဆွဲလှည့်ကာ နို့များကို
အငမ်းမရ စို့လိုက်သည်။ နှင်းသက်ရဲ့ လက်များကလဲ သူ့ညီလေးကို လာကိုင်ကာ ပုံမှန်လှုပ်ရှားလာသည်။ ကိုကို ရေပန်းကို ပိတ်ကာ နှင်းသက်ကို ရေချိုးခန်း ကြမ်းပြင်ပေါ်ဝယ်လှဲချကာ နေရာယူလိုက်သည်။
ညီတော်မောင်မှာ ထောင်မတ်နေပီးဖြစ်သည်။ သူမ ညီမလေးမှာလဲ အရည်လေးများ စို့ကာ ညီလေးကို ဧည့်ခံရန် အသင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သော်ကြောင့် ခပ်မြန်မြန်ပင် ညီမလေးကိုယ်တွင်းသို့ အလည်ပို့လိုက်သည်။
ညက တစ်ညလုံး ဝင်ရောက်လည်ပတ်ပီးသားဖြစ်သည်မို့ မခက်ခဲပဲ ဝင်ရောက်သွားသည်။ စေးကျပ်ပိုင်နိုင်သော အထိအတွေ့တို့ကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သွားသော ခံစားမှုက ကိုကို့ ဒုတ်မှတစ်ဆင့်
ရင်သို့ ရောက်လာသည်။ ကိုကို စိတ်များမှာ တင်းကျပ်လှသည်မို့ ဒုတ်ကို သူမ အဖုတ်လေးအတွင်း ခပ်ထန်ထန်လေး ဆောင့်ချခြင်းနှင့် ပေါက်ကွဲနေသည်။ အချက်နှစ်ဆယ်ခန့် ဆောင့်ပြီးသော်
ကိုကို့ ဒူးခေါင်းနာလာသည်။ ကိုကို နှင်းသက်ကို ပွေ့ကာ မျက်နှာသစ်သော ဘေစင်ပေါ် သူမကိုယ်လုံးလေးကို တင်လိုက်သည်။ တင်ပါးကို အစွန်းသို့ ရွှေ့ယူကာ လိုသလို ပြင်လိုက်သော အနေအထားက
စိတ်ကြိုက်ဖြစ်လာသည်။ ကိုကို့နှုတ်ခမ်းကိုစုပ်နမ်းကာ လည်ပင်းကို သိုင်းဖက်ထားသော သူမရဲ့ ခါးကို ပြန်ဖက်ကာ မတ်တပ်ရပ်နှင့်ပင် အားရပါးရဆောင့်ပစ်လိုက်သည်။
အနောက်ဘက် မှန်ထဲမှ ပြန်မြင်နေရသော ကိုယ့်အရိပ်ကို ပြန်ကြည့်ကာ ကိုကို အားပိုပါလာသည်။ နှင်းသက်လဲ ကိုကိုရဲ့ ခါးကို ပြန်ကိုင်ကာ သူ့ရဲ့ ဆောင့်အားကို ထပ်ကူပေးသည်။ ရေချိုးခန်းအတွင်းဝယ်
ကိုကိုရဲ့ နှင်းသက်ရဲ့ နှုတ်မှထွက်လာသော ငြီးငြူသံများအပြင် ကိုယ်ခန္ဓာနှစ်ခုမှ ထိခတ်ကာ ပေါ်ထွက်လာသော တစ်ဖတ်ဖတ်အသံများဖြင့် ဆူညံနေသည်။
သူမ အဖုတ်အတွင်း နံရံများမှ ကိုကို ညီလေးကို ညှစ်စ ပြုလာသည်။ နှင်းသက်ပြီးတော့မည်။ ဆောင့်နေသည့် အားကို ပိုမိုထည့်ကာ အားရပါးရဆောင့်နေလိုက်သည်။
“အား…….. ကိုရေ… နှင်းသက်ရင်တွေ အရမ်းခုန်နေတယ်”
“ခပ်မြန်မြန်လေး လုပ်ပေးပါ… အား……ရှီး…”
“အင့် အင့် အင့်…. ဖတ် … ဖတ်”
ကိုကို အချက်နှစ်ဆယ်ခန့် အားရပါးရဆောင့်ပြီးသည့်နောက်တွင် နှစ်ယောက်သား ကာမဘုံရဲ့ အထွတ်အထိပ် ခံစားမှုကို တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ဖက်တွယ်ရင်း ခံစားနေမိသည်။
အတန်ကြာ အနားယူပြီးသည့်နောက်တွင်.. သူမကိုဘေစင်ပေါ်မှ ပွေ့ချီကာ ချပေးသော ကိုကိုရဲ့ ခြေထောက်တွေက မခိုင်ချင်…
ရေချိုးပြီးနောက် နံနက်စာစားရန် မှာလိုက်သည်။
“ဟယ်လို reception ကပါရှင်”
“ဟုတ်ကဲ့ အခန်း ၁၀၁ ကို ဘရိတ်ဖတ်စ် ပို့ပေးပါခင်ဗျာ”
“လိမ္မော်ဂျု့စ် နဲ့ ယူရိုပီယံ နှစ်ယောက်စာ..”
ကိုကို နှင်းသက်ကို သွားပြန်ကြိုလာသည်မှာ သုံးရက်ခန့်ရှိပြီ။ ပြန်ရောက်ခါစတွင် ကိုကိုမှာ လွန်ခဲ့သောရက်များမှ ကြုံခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်များက မမေ့နိုင်စရာ အဖြစ်အပျက်များပင်။
ပြန်ရောက်ခါစတွင် နှစ်ယောက်သားမှာ ချစ်မဝနိုင်အောင်ဖြစ်ရသည်။ ဖုန်းဆက်သည်။ ဖုန်းထဲတွင်လဲ ထိုအကြောင်းများ ပြောလို့မဆုံးနိုင်အောင်။ ဖုန်းမဆက်ပါက အွန်လိုင်းတွင် တက်ပြောကြသည်။
ထိုမျှအထိ နှစ်ယောက်သား အချစ်သည်းကြသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကိုကို ခရီးတစ်ခု ထွက်ရန်ပေါ်လာသည်။ နှင်းသက်ကိုပြောပြတော့ လွမ်းလောက်အောင် ချွဲပြပြန်ပြီ။
ကိုကို့ခမျာ မခွဲနိုင်မခွါရက် ချစ်ရသူ ချစ်သူလေးအား အနမ်းများဖြင့် နှစ်သိမ့်ရင်းပင် ခရီးထွက်ခဲ့ရသည်။ ထိုခရီးမှာ တစ်လခန့်ကြာမြင့်မည်မို့ လွမ်းစရာ ခရီးပင်။
ခရီးထွက်စဉ် ဖုန်းအဆက်အသွယ်လုပ်သော်လည်း ပြန်ရောက်ချိန်တွင် မမျှော်လင့်ထားသော မယုံကြည်နိုင်သော သတင်းက ကိုကို့ကိုစောင့်ကြိုနေသည်။
အိမ်ပြန်ရောက်ပြီး နှစ်ရက်ခန့်အကြာတွင် အဆက်အသွယ်ပြတ်နေသော သူငယ်ချင်းများက ဖုန်းဆက်ခေါ်သည်။ သူငယ်ချင်းမလေး တစ်ယောက်ရဲ့ မွေးနေ့ကို ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင် လုပ်မည်မို့ လာခဲ့ရန်ခေါ်သည်။
ကိုကိုမှာ နှင်းသက်နှင့် ချစ်သူဖြစ်ပြီးကတည်းက သူငယ်ချင်းများနှင့် အဆက်အသွယ်ပြတ်နေသည်။ နှင်းသက်သည် ကိုကို့သူငယ်ချင်းများကို မကြိုက် မနှစ်သက်။
မိန်းကလေး သူငယ်ချင်းများဆိုလျှင် တွေ့ရန်မပြောနှင့် စကားပြောသည်ပင်မကြိုက်။ မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းပဲလားဆိုတော့ မဟုတ် ယောကျာ်းလေး သူငယ်ချင်းများနှင့်ပင် တစ်ခါတစ်လေ အပြင်ထွက်မရ…
စိတ်ကောက်သည်။ နှင်းသက်နှင့် ချစ်သူ ဖြစ်စတွင် နှစ်ယောက်သား အေးအေးဆေးဆေး စကားပြောနေချိန်တွင် ကိုကို့ သူ့ငယ်ချင်းဆီမှ ဖုန်းလာသည်။ မိန်းကလေး သူငယ်ချင်း။
ခဏစကားပြောပြီး ဖုန်းပိတ်ကာ နှင်းသက်နှင့်စကားပြန်ပြောတော့ ။ ဘယ်သူလဲဟု မေးလာသောကြောင့် သဘောရိုးနှင့်ပင် မိန်းကလေး သူငယ်ချင်းဆီမှ ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြသောအခါတွင် အေးအေးဆေးဆေးပင် စိတ်ကောက်တော့သည်။
ဘယ်လိုမှ ချော့မရပြီ။ စကားပြောလျှင် စကားတော့ပြန်ပြောသည်။ သို့သော် ဘုဂလန့်သာပြောသောကြောင့် လက်လျှော့ကာ အိမ်ပြန်ပို့လိုက်သည်။
နောက်ပိုင်း ရာဇသံထုတ်သည်။ ယောကျာ်းလေး သူငယ်ချင်း၊ မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းများနှင့် မတွေ့ရ မသွားရ။ ကိုကိုကလဲ နှင်းသက်ကို အရမ်းချစ်သောကြောင့် နှင်းသက်ပြောသမျှ လိုက်နာသည်။
သူငယ်ချင်းများ လာခေါ်လျှင် အကြောင်းအမျိုးမျိုး ပြကာ ငြင်းဆန်ခဲ့သည်မှာ တော်တော်ကြာလေပြီ။
ယခုတော့ ကိုကို ပြန်ရောက်ချိန်တွင် နှင်းသက်မရှိ။ ဘုရားဖူးထွက်သွားသည်။ သူငယ်ချင်းများနှင့်လဲ မတွေ့သည်မှာ ကြာပြီမို့..ညနေဘက်တွင် သူငယ်ချင်းများထံထွက်ခဲ့လိုက်သည်။
သူငယ်ချင်းများနှင့်တွေ့တော့ ပြောမနာဆိုမနာ သူငယ်ချင်းများပေမို့ ၀ိုင်းပြောကြတော့သည်။
“လာပါပြီ လာပါပြီ… ပေါ်တော်မူ အောက်သွားမရှိတဲ့ကောင်ကြီး”
“ဟဲ့ နေမင်း နင်ကလဲ အဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဟာ ငါတို့သူငယ်ချင်းကို တွေ့တွေ့ချင်း”
“မဟုတ်ပါဘူး စု ရာ ငါက ဒီကောင့်ကို ပြောချင်နေတာကြပြီ… မနေနိုင်လွန်းလို့”
သူငယ်ချင်းများ ဘာပြောသည်ကို မသိ။ သို့သော်နှင်းသက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူတို့အမြင်မကြည်လင်သည်ကို သိသည်မို့ ခပ်မဆိတ်သာ နေလိုက်သည်။
“စု… ရော့ ငါ့မွေးနေ့လက်ဆောင်”
“ကျေးဇူး ကိုကို ငါ့စိတ်ထင် နင်မလာဘူးတောင် ထင်ထားတာ”
“လာတော့လဲ ကောင်းတာပေါ့ ငါတို့က ဒီကောင့်အချစ်ကြီး မဟေသီ က လာခွင့်ပိတ်ထားလို့ မလာဘူးထင်တာ ခုက ဘယ်လိုရောက်လာတာလဲ ပေးလာလို့လား နောက်ပြသနာ တက်နေဦးမယ်နော်”
“အေးဆေးပါကွာ… သူမပေးလာတာ မဟုတ်ပါဘူး ငါကိုယ်တိုင်လဲ အလုပ်မအားလို့ပါ…”
“ကိုကို မင်းကောင်မလေးနဲ့ အဆင်ပြေလား”
“သူငယ်ချင်း စိတ်တော့မဆိုးနဲ့ကွာ ငါတို့ ကြားတာတွေက မကောင်းဘူးနော် မင်းကောင်မလေးသတင်းက”
“အေး ဟုတ်တယ်ကိုကို နင် ခရီးထွက်သွားတဲ့ တစ်လမှာ သတင်းပြန်ကြားတာက သိပ်မမိုက်ဘူး”
“ဘာဖြစ်လို့လဲဟ ဘာသတင်းလဲ ငါလဲ ဘာမှ မသိပါလား.. ဖုန်းအမြဲဆက်နေတာပဲ ငါတို့နှစ်ယောက်”
“အေးလေကွာ ဖုန်းဆက်တာက ဖုန်းဆက်တာပဲ သူဘာဖြစ်လဲ မင်းကို ပြောပြမလား ပြောရင်လဲ ငါရိုင်းတယ်ဖြစ်မယ် ကိုကို ဟယောင် မင်းကို အောက်သွားမရှိတဲ့ကောင်လို့ပြောတာ”
“ဟယောင် နေမင်း ပြောစရာရှိတာပြောကွာ ပလ္လင်ခံပြီး ငါ့နှိပ်ကွပ်မနေနဲ့”
“မင်းမသိရင်ပြောပြမယ် မင်းခရီးထွက်သွားတဲ့အချိန် ဒီမှာ မင်းကောင်မလေး ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ တွဲသွားတွဲလာလုပ်နေတယ် မင်းသိလား”
“ငါတို့လဲ တွေ့တော့ အဲ့လိုထင်တာပဲ ဒါပေမယ့် တစ်ပါတ်လောက်ပဲ တွေ့ပြီး ဟိုကောင်လေးမတွေ့တော့လို့ စုံစမ်းကြည့်လိုက်တာ မင်းကောင်မလေးကျောင်းသွားတက်တုန်းက ရည်းစား လိုက်လာတယ်လို့ ကြားတယ်”
“ဟုတ်ရဲ့လားကွာ မင်းကလဲ သူ့သူငယ်ချင်းများလား လာလည်တာ ဖြစ်မှာပေါ့ နောက်ပြီး ဟိုကို ငါသွားကြိုခဲ့တာပဲ “
“ဒါကတော့ မင်းအပိုင်းလေကွာ.. ငါတို့က ပြန်ကြားတဲ့သတင်း ပြောပြတယ် နောက်ပြီး မင်းကောင်မလေးက အရင်ကတည်းက ရည်းစားများခဲ့တာမို့ မင်း မခံရအောင်ပြောပြနေတာ”
“ငါက ဘာမှ ခံရစရာမရှိပါဘူးကွာ ယောကျာ်းလေးပဲ…”
“ဟဲ့ ကိုကိုရဲ့ ယောကျာ်းလေးပေမယ့်လဲ ကိုယ့်သူငယ်ချင်း အလိမ်မခံရဖို့ ပြောပြနေတာဟဲ့ သောက်ကောင်ရဲ့ ငါပြောပြမယ် ကိုကို နင်တို့ ငါတို့ဆိုတာ ငယ်ငယ်ကတည်းက လည်ပင်းဖက်ပေါင်းလာတဲ့
သူငယ်ချင်းတွေ ဒါပေမဲ့ မေဦး ရန်ကုန်ရောက်သွားတော့ ငါတို့သွားလည်ဖြစ်လား ခုမှ မဟုတ်ဘူးနော် မေဦးရန်ကုန်ရောက်တာ သုံးနှစ်လောက်ရှိပြီ.. ငါတို့နဲ့ဆို ဘယ်လောက်မှ မဝေးဘူး
ခု နင့်နှင်းသက်သူငယ်ချင်းက ဒီလောက်ခရီးအဝေးကြီး လာလည်တယ်ဆိုတာကို နင့်ဘာသာနင် စဉ်းစားဖို့ ပြောပြတာ ကိုကိုရေ….. ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်စဉ်းစား မိန်းကလေးချင်းပြောရတာ မကောင်းဘူး”
“နေပါဦးဟာ…. မင်းတို့ကလဲ ငါ့ကို ဝိုင်းပြောနေကြာတာ ရေပက်မဝင်ဘူး ခုက စုရဲ့ မွေးနေ့ဆို စုစိတ်ညစ်နေဦးမယ်”
“ဒီမှာ ကိုကို ငါဘာမှ စိတ်ညစ်စရာမရှိဘူး ခု ငါ့မွေးနေ့ဆိုတာလဲ ပြောရရင်အကြောင်းပြချက်ပဲ နင့်ကိုဒီအတိုင်းခေါ်လို့ မရမှာစိုးလို့ သူငယ်ချင်းတွေလဲ အကုန်စုံရအောင် ခေါင်းစဉ်တပ်တာ သိပြီလား”
“ဟုတ်ပါပြီ သူငယ်ချင်းတို့ရာ မင်းတို့ စေတနာ ငါနားလည်ပါတယ် … ငါ သေချာမေးမြန်းပါဦးမယ် ခုတော့ စုမွေးနေ့ကို ငါတို့ ပြန်မဆုံဖြစ်တာ ကြာတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ပျော်ပျော်ပါးပါး ဖြတ်သန်းရအောင်”
ကိုကို အိမ်ပြန်ရောက်တော့ စဉ်းစားနေမိသည်။ သူငယ်ချင်းများပြောသော အဖြစ်အပျက်များ….
ဖြစ်နိုင်ချေရှိ.. မရှိ.. ကိုကိုကတော့ မဖြစ်နိုင်ဟု ထင်သည်။ သူငယ်ချင်းများသည် ကိုကို နှင်းသက်နှင့် ချစ်သူဖြစ်ပြီးကတည်းက အဆက်အသွယ်ပြတ်ရသည်မို့ နှင်းသက်အပေါ်မကြည်လင်ကြ
ရသည့်အခြေအနေအပေါ်မူတည်ကာ နှင်းသက်ကို အထင်လွဲနေတာ ဖြစ်ရမည်။ သူငယ်ချင်းများဖြစ်သည်မို့လဲ သူတို့ကိုလဲ အပြစ်မတင်ချင်။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းကောင်းစားသည်သာ ကိုယ်မြင်ချင်ကြသည်မဟုတ်လား
ပြီးတော့ သူနဲ့နှင်းသက်ရဲ့ အခြေအနေ ဒါက သူတို့ နှစ်ယောက်တည်းသိသည့် အခြေအနေမို့။ ဒီအခြေအနေမှာ နှင်းသက် ဒီလိုမျိုး ဘယ်လိုနည်းနှင့်မှ မလုပ်နိုင်ဟု ကိုကိုယုံကြည်ထားသည်။
“လာ ထိုင်ဦး သား သားကို ပြောစရာရှိတယ် “
ကိုကို ကော်ဖီခွက်ကို ဆက်တီစားပွဲပေါ်တင်ကာ မေမေ့ဘေးနား ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ မေမေဘာပြောစရာ ရှိလို့လဲဆိုတာ စဉ်းစားမိသည်။
“သား ကောင်မလေး အကြောင်း မေမေသိချင်တယ် သား”
“မေမေ့ကို သားရည်းစားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာမှ မပြောဖူးဘူး ခု မေမေသိချင်တယ်”
ကိုကို မေမေ့ကို နှင်းသက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောပြလိုက်သည်။ ချန်ထားရမည့် အကြောင်းအရာများကို ချန်ထားကာ ပြည့်ပြည့်စုံစုံပင်ပြောပြလိုက်သည်။ ကိုကိုအနေနှင့် နှင်းသက်ကို လက်ထပ်ဖို့အထိ
“ကိုကို သားကို မင်းဖေဖေမရှိတော့ကတည်းက မေမေတစ်ယောက်တည်း စောင့်ရှောက်ခဲ့တာ။ သားကို ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့အတူ ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးထားတယ်
သားကို မေမေ အကြံပေးတာပဲ ရှိတယ်။ ဘယ်ဟာကိုတော့ လုပ်ဆိုပီး မခိုင်းတာ မင်းသိပါတယ်။ ခုလဲ သားကို အကြံပေးချင်တယ်”
“သားက သားရဲ့ ကောင်မလေးအကြောင်းကို မပြောပြပေမဲ့…”
“မေမေစကားပြောနေရင်… ဖြတ်မပြောနဲ့လို့ ဘယ်နှခါပြောထားရမလဲ ကိုကို”
“အေး… သားကောင်မလေးအကြောင်းတွေကို မေမေ စုံစမ်းသင့်သလောက်စုံစမ်းခဲ့တယ် ဘယ်သူဘယ်ဝါသမီး ဆိုတာက အစပေါ့ သိလာခဲ့တဲ့ အကြောင်းတွေကတော့ မေမေမကြိုက်ဘူး…
မေမေ့သားမို့ မေမေ ချီးမွမ်းပြောတာမဟုတ်ဘူး.. မင်းအခုချိန်ထိ ရည်းစားဘယ်နှစ်ယောက်ထားခဲ့ဖူးလဲ မင်းက ယောကျာ်းလေးနော်
ဟိုက မိန်းကလေး ဒါမဲ့ သူမင်းနဲ့ ရည်းစားမဖြစ်ခင် မင်းအရှေ့မှာ ရည်းစားဘယ်နှစ်ယောက်ထားခဲ့လဲ သားသိမှာပေါ့.. “
“အဲ့ဒါတွေ သူပြင်လိုက်ပါပြီ မေမေ သားလဲ သူ့ကိုပြောထားပြီးပါပြီ”
“မင်းကသာ ပြောထားပြီ ပြောတယ် ခု သူကျောင်းသွားတက်တုန်းက ရခဲ့တဲ့ ရည်းစားကောင်လေးက ဒီကို ရောက်လာတယ် လိုက်လာတယ်ဆို”
“ဘယ်သူပြောပြောလေ မေမေစုံစမ်းလို့ သိတယ်ဆို သား ဘာပြောမလဲ”
“အဲ့ဒါက ဒီလိုပဲပြောကြတာပါမေမေ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး”
“ကောင်းပြီလေ သားကို မေမေက စိုးရိမ်လို့ပြောတာပါ.. ငါ့သား လူတွေအပြောခံရမှာစိုးလို့… သားဘဝ သားလျှောက်လှမ်းရမှာပါ…”
“ဟုတ်ကဲ့ သားနားလည်ပါတယ် မေမေ သားမေးကြည့်ပါဦးမယ်”
“ကဲ ဆိုင်သွားမယ် မဟုတ်လား နောက်ကျနေဦးမယ် သွားတော့”
ကိုကို ကော်ဖီခွက်ပင် မယူခဲ့တော့… စိတ်ထဲတွင် ရှုပ်ထွေးနောက်ကျိနေသည်။ ဆိုင်သို့ထွက်သာလာခဲ့သော်လည်း စိတ်က မပါ။ သို့ကြောင့် တပည့်ကျော်နှင့်ပင် ဆိုင်ကို ထားခဲ့ကာ အပြင်ထွက်ခဲ့သည်။
စိတ်ပြေလက်ပျောက်… မြစ်ကမ်းနားသွားကာ အေးအေးလူလူ သွားထိုင်ကာ နှင်းသက်အကြောင်းများ ပြန်လည်စဉ်းစားနေမိသည်။ ဘယ်လိုပင် တွေးတွေး ကိုကို့ခေါင်းထဲတွင် နှင်းသက်သည် အပြစ်မရှိ
မေမေနှင့် သူငယ်ချင်းများက နှင်းသက်အကြောင်းများကို တစ်စိတ်ကို တစ်အိတ်လုပ်ကာ ပြောနေကြခြင်းပင်ဖြစ်ကြောင်း ယူဆနေမိသည်။
ကိုကိုအတွက် မယုံကြည်နိုင်စရာ အဖြစ်အပျက်များသည် နှင်းသက်ဘုရားဖူးမှ ပြန်လာချိန်တွင် ဖြစ်ပွားတော့သည်။
နှင်းသက်ပြန်ရောက်သည်ကို သိလျှင်သိချင်း နှင်းသက်နှင့် အဆက်အသွယ်လုပ်သည်။ ပထမရက်ပိုင်းများတွင် ဖုန်းဆက်ရသော်လည်း.နောက်ပိုင်းရက်များတွင် နှင်းသက်ဖုန်းဆက်လိုက်လျှင်
မအားနေသည်က များသည်။ ထိုအချိန်များသည် ယခင်က ကိုကိုနှင့်နှင်းသက်တို့ ညဘက် မဆုံဖြစ်လျှင် ဖုန်းဆက်နေကြအချိန်များ… ထိုအချိန်သည် နှင်းသက်လဲ အိပ်ယာထဲရောက်နေပြီမို့
အေးအေးဆေးဆေး ပြောလို့ရသည်။ အခု ကိုကို ဖုန်းဆက်လိုက်လျှင် နှင်းသက်ဖုန်းသည် မအားပါ။ နာရီဝက် လေးဆယ့်ငါးမိနစ်ခန့်မှ ပြန်အားတတ်သည်။ ကိုကို က မည်သူနှင့် ပြောနေလဲဟုမေးလျှင်
သူငယ်ချင်းဖုန်းဆက်လို့ ပြောနေသည်တဲ့ ဒိလောက်ကြာလားဆိုတော့ တစ်ယောက်ဖုန်းချသွားလျှင် နောက်တစ်ယောက်ဆီက ဖုန်းဆက်ဝင်လာသော်ကြောင့် ဆက်ပြောရသည်ဆိုသော အဖြေသာရသည်။
ထိုအကြောင်းများ ဆက်ပြော ဆက်မေးလျှင်လည်း နှင်းသက် စိတ်ကောက်ကာ ဖုန်းချသွားတတ်သောကြောင့် ကိုကိုခမျာ သိပ်မပြောရဲဖြစ်နေသည်။ သို့သော် စိတ်ထဲတွင်တော့ သူငယ်ချင်းများပြောသလို
ဖြစ်နေပြီလားဟု သံသယအတွေးက စဝင်လာနေပြီဖြစ်သည်။
ကိုကို တစ်ရက်တွင် အလုပ်တွင်ထိုင်ရင်း အားနေသောကြောင့် အီးမေးလ်များပြန်စစ်နေမိသည်။ ထိုအချိန်တွင် နှင်းသက် အကောင့်လေး လိုင်းပေါ်တက်လာသည်။
ကိုကို ချက်ခြင်းမခေါ်မိ ။ တော်တော်ကြာသည်အထိ နှင်းသက်ဘက်ကလဲ စာမတက်လာသောကြောင့် ကိုကိုသာ စမေးလိုက်တော့သည်။
ကို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချက်နေတာ
အင်းပါဆိုသော်လည်း ကိုကို့ဘက်က စာတစ်ကြောင်းတက်သွားပြီး နောက် နှင်းသက်ဘက်က စာပြန်လာရန်မှာ ကြာလှသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုကို နှင်းသက်အီးမေးလ်ကို ဖွင့်လိုက်သည်။
ကံကောင်းပါသည်။ နှင်းသက်ပတ်စ်ဝေါ့ မချိန်းထားသည်မို့ အီးမေးလ်က ဝင်သွားသည်။ အီးမေးလ်အတွင်းကြည့်လိုက်တော့ ထူးထူးခြားခြားမရှိ ဂျီအကောင့်တွင်ကား နာမည်တွေများလှသည်။
ချက်လော့ဂ်ကို ဖွင့်ကာကြည့်မိလိုက်တော့ ကိုကို့ မျက်လုံးများပြာဝေသွားတော့သည်။
ချက်လော့ဂ်တွင် နှင်းသက် ချက်ထားသည်များက နှင်းသက်သည် သူငယ်ချင်းများပြောသလိုပင် ကျောင်းသွားတက်ရင်း ရည်းစားအသစ်ရခဲ့သည်။ ကောင်လေး နှင်းသက်ဆီ လိုက်လာသည့်အကြောင်းများ
ကိုကို ချက်လော့ဂ်ကိုကြည့်ကာ ဒေါသများထွက်လာသည်။ လက်ရှိချက်နေသည်မှာလဲ ထိုကောင်လေးနှင့်ပင်ဖြစ်သည်။ ကိုကို ချက်လော့ဂ်များကို ကူးကာ ချက်ချင်းပင် နှင်းသက်ကို ဂျီတော့ခ်တွင် ပြလိုက်သည်။
နှင်းသက် ဘက်မှ ဘာမှ ပြန်မတက်လာသည့်အပြင် ခဏအနေတွင် လော့ဂ်အောက်ပါလုပ်သွားတော့သည်။ ကိုကို နှင်းသက်ဖုန်းကို ဆက်တော့လဲ နှင်းသက် ဖုန်းပိတ်ထားသည်။ ကိုကို ဘာလုပ်ရမလဲ
တောက် လုပ်ရက်လိုက်လေခြင်းကွာ ကိုယ့်မှာတော့ ချစ်လိုက်ရတာ… သူကတော့ ရည်းစားအသစ်နှင့်ပျော်မြူးနေသည်။ နားမလည်နိုင်သည်မှာ ကျောင်းသွားကြိုချိန်တွင် ကိုကိုနှင့်ပင် နှစ်ကိုယ်တူ ချစ်ရည်တူ ခဲ့ကြသေးသည်။
ဖုန်းဆက်သော်လည်း ဖုန်းဆက်မရ… အိမ်သို့လိုက်သွားလျှင်ရသော်လည်း မလိုက်သွားချင်.. ယခုအချိန်တွင် ကိုကို့ဒေါသက နေရာမရွေးအချိန်မရွေး ပေါက်ကွဲသွားနိုင်သည်။
သူငယ်ချင်းတွေပြောသည့် အောက်သွားမရှိသည့်ကောင်ဆိုတာ တစ်ကယ်ပင်ဖြစ်နေပြီလား…..
ကိုကို တစ်ညလုံးဖုန်းခေါ်သည်မှာ မရ၊ ဖုန်းပိတ်ထားသည်။ တစ်ယောက်တည်း ယောက်ယက်ခတ်ကာ ပူလောင်နေသော်လည်း ကိုကို ဘာဖြစ်နေသည်ကို မည်သူမျှ မသိစေရ။
တစ်မိနစ်တစ်ခါ၊ နှစ်မိနစ်တစ်ခါ၊ ငါးမိနစ်တစ်ခါနှင့် ဖုန်းခေါ်နေသည်မှာ ည (၁၁) နာရီခန့်တွင် ဖုန်းခေါ်လို့ရသွားသည်။ ဖုန်းဝင်သော်လည်း တော်တော်နှင့်မကိုင်။
သုံးကြိမ်မြောက်တွင် ဖုန်းကိုင်သည်။ နှင်းသက်ဘက်မှ ဖုန်းကိုင်လိုက်သည်နှင့် ကိုကို တရစပ် ပြောချင်ရာများကို မနားတမ်းပြောတော့သည်။
“နှင်းသက် ဘာလို့ဖုန်းပိတ်ထားတာလဲ ဘာလဲ ကိုယ် ဖုန်းခေါ်မှာကြောက်လို့လား ဟားဟား အေးပေါ့လေ အပြစ်လုပ်ထားတဲ့သူဆိုတော့လဲ ကြောက်မှာပေါ့
ရင်မဆိုင်ရဲရင် သတ္တိမရှိရင် နဂိုကတည်းက ကိုယ့်ကို အဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြီးမှ လုပ်ပါလား။ ခုတော့ မင်းက ဘာလဲ ငါ့ကို လှိမ့်ချင်တိုင်းလှိမ့်လို့ရတယ်ဆိုပီးတော့ လုပ်တာလား”
“ဘာမဟုတ်တာလဲ …….. မင်းကွာ လုပ်ရက်တယ် ငါ့မှာတော့ မင်းကို ချစ်လိုက်ရတာ}
“နှင်းသက်လဲ ကို့ကို ချစ်တာပဲ”
“ဘာချစ်တာလဲကွာ…….တော်စမ်းပါ.. မင်းချစ်တာကို ငါတော်တော်အံ့သြတယ်…”
“နှင်းသက် ကို့ကို တကယ်ချစ်တာပါ”
“မင်းငါ့ကို တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် ဟိုကောင်က ဘာလဲ ပြော… မင်းက ငါ့ကိုတော့ နွားမရွှံ့ပိတ်ဖို့လား ဟင်……….. ငါ့သူငယ်ချင်းတွေပြောတာတောင် ငါက မင်းဘက်က ကာကွယ်ခဲ့တာ ငါအရူးပဲကွ”
“ကို့သူငယ်ချင်းတွေက နှင်းသက်ကို ဘယ်နှစ်ခါ အကောင်းပြောဖူးလို့လဲ”
“အေး အကောင်းပြောရအောင်ရော မင်းက ကောင်းအောင်နေလို့လား”
“ဟ မင်းကပဲ ငါ့ကို ဘာလုပ်လဲ ပြန်မေးရသေးတယ်ဟုတ်လား မင်းဘာလုပ်လဲ မင်းမသိဘူးလား “
“နဂိုကတည်းက နှင်းသက်က အဲ့လိုပဲ နေတတ်တာ ကိုသိတာပဲ”
“အေး ငါသိတယ်လေ ဒါပေမယ့် မင်းငါ့ကို ဘာကတိပေးခဲ့လဲ အရင်လို မနေတော့ပါဘူး ငါ့စိတ်ကြိုက်မင်းနေပါ့မယ် လိမ္မာပါ့မယ်လို့မင်းပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လား”
“တော်ပါတော့ ကိုကိုရယ် ကဲ ဒါဆို ခု ကိုကို ဘာဖြစ်ချင်လဲ ဘာလုပ်ချင်လဲပြော နှင်းသက်ဘာလုပ်ပေးရမလဲ နှင်းသက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေပေးရမလား”
“ဟားဟား မလုပ်ပါနဲ့ လုပ်စရာမလိုပါဘူးဗျာ… မင်းဘာသာမင်းသေတာ ငါ အမှုပတ်မခံနိုင်ဘူး ဒီမှာနှင်းသက် တွဲပေးတဲ့လက်ကို မင်းက ပုတ်ထုတ်တော့လဲ မင်းထိုက်နဲ့မင်းကံပဲ
မင်းက မင်းရွေးချယ်တဲ့လမ်းကို မင်းလျှောက်ချင်တော့ ငါလဲ မင်းကိုတွဲမခေါ်တော့ဘူး ငါ ငါ့ဘာသာပဲ အေးဆေးနေတော့မယ် ဟုတ်ပြီလား”
“ကိုကို ဆိုလိုချင်တာက နှင်းသက်နဲ့ လမ်းခွဲမယ် အဲ့လိုလား”
“ကောင်းပြီလေ.. ကိုကို ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ပါ နှင်းသက် ဒီတစ်ခုတော့ မှာပါရစေ..”
“မလိုပါဘူး ငါ့စိတ်နဲ့ငါ့ကိုယ်ပါ ကဲ တာ့တာ မင်းဘဝ သာယာဖြောင့်ဖြူးပါစေလို့တော့ ငါဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်”
ကိုကို ဖုန်းချလိုက်ပြီးနောက် ရေချိုးခန်းထဲဝင်ကာ ရေတစ်ဝုန်းဝုန်းလောင်းချိုးပစ်လိုက်သည်။ ရင်ထဲမှာပေါ့သွားအောင် သီချင်းများအော်ဆိုကာ ရေချိုးလိုက်သည်။ ရေချိုးပြီးလို့ အခန်းထဲ ပြန်ရောက်သော်လည်း
စိတ်ထဲမှာပေါ့မသွား ရင်ထဲတွင် တင်းကြပ်နေတုန်းပင်ဖြစ်သည်။ အိပ်ရာထဲလှဲကာ မျက်လုံးများမှိတ်ထားသော်လည်း အိပ်မပျော်။ အရင်ကဆိုလျှင် အလုပ်ထဲမှ ပင်ပန်းလာသည်များနှင့် အိမ်ရောက်ပြီး ရေချိုးပြီးသည်နှင့်
လူက ပေါ့ပါးကာ အိပ်ပျော်စမြဲ၊ ခုတော့ မျက်လုံးများက ကြောင်တောင်တောင်နှင့် အတွေးထဲမှာ နှင်းသက်ပုံရိပ်များပေါ်လာသည်။ ခေါင်းထဲမှ အတင်းမောင်းထုတ်ပစ်သော်လည်းမရ။
အမှန်ဆိုလျှင် ကိုကို နှင်းသက်ကို အရမ်းချစ်သည်။ အဆုံးရှုံးမခံနိုင်။ နှစ်ယောက်သား ဘယ်လို အခက်အခဲများနှင့်ပင် ကြုံတွေ့လာပါစေ. ရင်ဆိုင်ကာ ဘဝတစ်ခုထူထောင်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသား။
ထို့ကြောင့်နှင်းသက်ကို နဂိုကတည်းက ပြောထားသည်။ အရင်အကျင့်ဟောင်းများပြင်ကာ တတ်နိုင်သမျှ လိမ်လိမ်မာမာနေပါဟု ပြောထားသည်။
သို့သော် ယခုတော့ နဂိုဗီဇသည် ပြန်ပေါ်လာပြီဖြစ်သည်။ ကိုကို ဘယ်လိုမှ မယုံနိုင်သည်ကား ကျောင်းသွားကြိုစဉ်ကပင် သူတို့ နှစ်ဦး၏ အဖြစ်အပျက်။ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးရှိခဲ့တာတောင်
နှင်းသက် ဒီလိုလုပ်သည်ကို ကိုကို ဘယ်လိုမှ မယုံကြည်နိုင်အောင်ဖြစ်ရသည်။ ကိုကို နှင်းသက်အကြောင်းများတွေးရင်း မျက်ဝန်းမျက်ရည်စတို့ စီးကျလာသည်။
စိတ်ထဲတွင် နှစ်ဦးသား ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဘဝတစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့မည်ဟု ထင်ခဲ့သော်လည်း နှင်းသက်က အားလုံးကို ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ခုဆိုလျှင် နှင်းသက်နှင့်ကိုကို ပြတ်တောက်သွားသည်မှာ တစ်ပါတ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်သည်။
အွန်လိုင်းပေါ်မှ နှင်းသက်အကောင့်ကိုလဲ ကိုကို ဖျက်ပစ်လိုက်သည်။ ဖုန်းထဲမှ နှင်းသက်နံပါတ်လဲ ဖျက်ပစ်လိုက်သည်။
ကွန်ပျူတာအတွင်းမှ နှင်းသက်ပုံများကို ဖျက်ရန်ကြံစည်သော်လည်း မအောင်မြင်၊ ကိုကို့ နှလုံးသားက လက်မခံ။ ညဘက် ညဘက်ဆိုလျှင် နှင်းသက်ထံ ဖုန်းဆက်ရန် ကြိုးစားမိသည်မှာ ခဏ ခဏပင်
သို့သော် ဖြစ်ခဲ့သည့်အကြောင်းအရာများကို တွေးကာ မဆက်ဖြစ်အောင် ထိန်းထားနိုင်ခဲ့သည်။ ကိုကို စိတ်ထဲတွင် သူ့ထံ ဖုန်းဆက်ကာ မတောင်းပန်သော နှင်းသက်ကို အရမ်းအံ့သြမိသည်။
နေနိုင်လိုက်တာ… သူမ တကယ်ပင် သူ့ကို မချစ်လို့လား။ ရည်းစားဖြစ်စဘဝတွင်တော့ စသလို နောက်သလိုနှင့်နှင်းသက်ပြောဖူးသည်။
သူမ ကိုကို့ကို တစ်ကယ်မချစ်ပါတဲ့။ အသည်းကွဲချိန် အစားထိုးသည့်အနေနှင့် ချစ်ခဲ့တာဟုဆိုသည်။ ကိုကို စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားသောအခါ သူမပြန်ချော့သည်။
ယခုတော့ တစ်ကယ်ချစ်သွားပြီဆိုသည်။ ကိုကို့ရဲ့အပြုအမူ၊ ဂရုစိုက်မှုလေးတွေကို သူမအရမ်းချစ်တယ်ဟု ဆိုသည်။
သူမတစ်ကယ်ချစ်သည်ဆိုလျှင် ဖုန်းဆက်ကာ တောင်းပန်သင့်သည်ထင်သည်။ တစ်ပါတ်ခန့်ကြာခဲ့သော အချိန်တွင် ကိုကို နှင်းသက်ကို အရမ်းသတိရနေလေသည်။
ကိုကို့ဖုန်းသံမည်လာသည်…. အချိန်က ည (၁)နာရီ….ကြည့်လိုက်တော့ နာမည်မပေါ်သော နံပါတ်တစ်ခု
နံပါတ်တစ်ခုဟုဆိုသော်လည်း ကိုကို အမြဲတမ်းအလွတ်ရနေသော နံပါတ် နှင်းသက်ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်
ကိုကို ကိုင်ရင်းကောင်းမလား မကိုင်ရင်ကောင်းမလား စဉ်းစားနေတုန်းမှာပင် ဖုန်းပြန်ကျသွားသည်။
လေးခါမြောက်တွင်တော့ ကိုကို ဖုန်းကောက်ကိုင်လိုက်သည်။ သို့သော် မထူး…..၊ ဟိုဘက်ကလဲ ဖုန်းမထူး
နှစ်ဘက်စလုံး ဖုန်းကိုင်ထားစဉ်တွင်….. ကိုကို့နားစည်အတွင်းသို့ ဖုန်းစပီကာမှ တစ်ဆင့် ခပ်တိုးတိုးလေး ဝင်လာသော သီချင်းသံလေးတစ်ခု
အယ်လ်ဆိုင်းဇီ ရဲ့ ရေစီးကြောင်းသံယောဇဉ်…
မပြတ်သေးဘူး………. ရေစီးကြောင်းလေးအား ဓါးနဲ့ဖြတ် ပြတ်ပါ့မလား ဖြတ်မရဘူး ဒီလို သံယောဇဉ်တွေ
နှစ်ကိုယ်တူအဝေး… လူချင်းတွေ့ကြဖို့ ခဲယဉ်းလဲ အတွေးလေးထဲ အမြဲတမ်းတွေ့ ဒီလို သံယောဇဉ်တွေ ……… ဖြတ်ဖို့ခက်တယ်လေ
ကိုကို မျက်ဝန်းများမှိတ်ထားကာ နားစည်အတွင်း လာရောက်ရိုက်ခတ်သော သံစဉ်တွင် လိုက်ပါစီးမျောနေမိသည်။ ဒီသီချင်းကို အကြိမ်ကြိမ်နားထောင်ဖူးခဲ့သော်လည်း
ယခုတစ်ကြိမ်လောက် ရင်ထဲစိမ့်ဝင်သည်မရှိ… နားထောင်ရင်း မျက်ဝန်းများ မှေးမှိတ်ထားရင်းနှင့်ပင် ဟိုအရင်တစ်ချိန်မှ ပျော်ခဲ့ဖူးသည့်နေ့ရက်များ၊ တွယ်နှောင်ခဲ့ဖူးသည့် သံယောဇဉ်ကြိုးများကို ပြန်မြန်ယောင်လာသည်။
နားထင်တစ်လျှောက်ဖြတ်သန်းစီးဆင်းလာသော မျက်ရည်စက်တို့သည် ခေါင်းအုံးအတွင်း စိမ့်ဝင်သလိုပင် သီချင်းမှ ပေးလာသည့် ခံစားချက်များသည် ကိုကို့ရင်တွင်းသို့ စိမ့်ဝင်လာသည်။
သီချင်းပြီးဆုံးသွားချိန် ဘာစကားသံမှ နှင်းသက်ဘက်မှ မထွက်လာ။ ကိုကို ကြားနေရသည်က တိုးတိုးကလေး ရှိုက်ငိုနေသည့် ရှိုက်သံ သဲ့သဲ့လေးသာ။ ကိုကို့နှလုံးသားများကို လက်နှင့်ဆုပ်ညှစ်ထားသလိုပင်
ရင်တွင်းမွန်းကြပ်လာသည်။ ကိုကို နှင်းသက်ဟု ခေါ်သော်လည်း နှင်းသက် ပြန်မထူး… နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ခေါ်သော်လည်းမထူး…။
ဖုန်းကျသွားပြီ။ ကိုကို ဖုန်းကို နားတွင်ကပ်ရင်း ဆက်နားထောင်နေမိသည်။ ဖုန်းမှ ဖုန်းလိုင်းကျသွားသံ တစ်တူတူသာမြည်နေသော်လည်း ကိုကိုစိတ်ထဲတွင် နှင်းသက်မှ စကားတွေ အများကြီး လာပြောနေသလို ခံစားရသည်။
အိပ်ယာပေါ်မှ ထကာ အခန်းတွင်းကွန်ပျူတာရှေ့တွင် ထိုင်လိုက်သည်။ ကွန်ပျူတာအတွင်းမှ တစ်ချိန်က နှစ်ယောက်သားဓါတ်ပုံများကို ပြန်ကြည့်သည်။ တစ်ဖန်… ကူးထားသော ချက်လော့ဂ်များကို ပြန်ဖတ်ကြည့်တော့
စိတ်ထဲတွင် တင်းခနဲ ပြန်လည်တင်းမာလာသည်။ ပြန်လည်ပြောင်းညွတ်ချင်နေသော. ပြန်လည်သတိရချင်နေသော စိတ်များကို နာကျည်းသောစိတ်များက ပြန်လည်အစိုးရသွားသည်။
ကိုကို ဒီနေ့အလုပ်သို့မသွားပဲ ကားတစ်စီးနှင့် လျှောက်သွားနေလိုက်သည်။ ပန်းခြံ၊ ရုပ်ရှင်ရုံ၊ ဈေးဝယ်စင်တာ.. တစ်ခုပြီးတစ်ခု သွားကာ ဗိုက်ဆာလာရင် ကြုံရာတွင် ဝင်စားလိုက်သည်။
သို့သော် မသိစိတ်က စေခိုင်းနေသော နေရာများသည် နှင်းသက်နှင့် အတူတူ သွားခဲ့ဖူးသည့် နေရာများသာ.. ကိုကိုရဲ့ သိစိတ်အတွင်းတွင် နှင်းသက်ကို မုန်းသည်။ နာကျည်းသည်။ လိမ်လည်လှည့်ဖျားသည်။နောက်ထပ်မတွေ့ချင်။
မသိစိတ်အတွင်းတွင်မူ နှင်းသက်ကို သတိရစိတ်များကြောင့် ထိုနေရာများကို သွားနေသည်။ အိမ်ပြန်ရောက်သော်လည်း နှင်းသက်ဆီမှ ဖုန်းလာမည့်အချိန်ကို မသိမသာမျှော်နေမိသည်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိမ်ရသည်မှာ ပင်ပန်းလွန်းလှသည်။ ဟိုအကြောင်းပြ သည်အကြောင်းပြကာ အချိန်များမကုန်ကုန်အောင် အတင်းလုပ်နေမိသည်။
မှေးခနဲအိပ်ပျော်သွားချိန် ဖုန်းတုန်ခါမှုနှင့် လန့်နိုးသွားသည်။ လန့်နိုးသွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ဖုန်းကိုယူကာ ဖွင့်ပြီး နားနှင့်ကပ်ပီးသား ….
မနေ့ညကကဲ့သို့ပင် ရေစီးကြောင်းသံယောဇဉ် သီချင်းသံ ခပ်တိုးတိုးလေးက နားထဲဝင်လာသည်။ သီချင်းဆုံးသည်အထိ ဘာမှမပြောပဲ အသာငြိမ်နားထောင်လိုက်ပြီး သီချင်းဆုံးသွားချိန်တွင်
တစ်ဘက်မှ သက်ပြင်းချသံခပ်တိုးတိုးနှင့်အတူ နှင်းသက်ရဲ့ အသံခပ်အစ်အစ်လေး ပေါ်လာသည်။ ငိုထားသည်ထင့်….
ကို အိပ်မပျော်သေးဘူးနော်… နှင်းသက်သိတယ်… ဖုန်းမချနဲ့နော် နှင်းသက်ပြောတာလေးတွေကို ဘာမှပြန်မပြောပဲ နားထောင်ပေးပါလားကိုရယ်..
သီချင်းလေးက အရမ်းကောင်းတယ်နော်. သံယောဇဉ်ကြိုးကို ဘယ်လိုဖြတ်ဖြတ်မပြတ်ဘူးတဲ့.. နှင်းသက်ဘက်က ကို့အပေါ်မှာထားတဲ့ သံယောဇဉ်ကြိုးကလဲ အဲ့လိုပဲထင်ပါတယ်
နှင်းသက်လေ ဒီရက်ပိုင်းမှာ အများကြီးပြန်စဉ်းစားမိတယ်သိလား.. ငါ ဘာကြောင့် ဒီလို အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေ ဖြစ်အောင် လုပ်လိုက်မိသလဲ ဆိုပီးတော့ပေါ့..
ကိုပြောသလိုပါပဲ နှင်းသက်ရဲ့ အကျင့် ဗီဇ ကြောင့်လို့ထင်တယ်. သေချာပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့ နှင်းသက် ကို့ကို အရမ်းချစ်တယ် မစွန့်လွှတ်နိုင်ဘူးသိလား
ဒီတစ်ယောက်ကလဲ နှင်းသက် ချစ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး. နှင်းသက်ကျောင်းသွားတက်တော့ သူနဲ့တွေ့တယ် သူက နှင်းသက်ကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ နှင်းသက်လဲ ပြန်စိတ်ကစားလိုက်မိတယ်
အီစီကလီသဘောမျိုးပါပဲ ကိုရယ်.. ဒီလောက်ထိ ဖြစ်ပျက်သွားလိမ့်မယ်လို့လဲ မထင်ဘူး. သူလဲ ဒီအထိ လိုက်လာမယ်လို့ မထင်ဘူးလေ. အားလုံးက အေးအေးဆေးဆေးပြီးဆုံးသွားမယ် ထင်ထားပေမယ့်
ကိုက ဒီအကြောင်းတွေ သိသွားတော့နှင်းသက်အရမ်းကြောက်သွားတယ် ကို့ကိုလဲ ဘာပြန်ပြောရမလဲ မသိဘူး. ကိုပြောတာတွေကို ပြန်ပြောစရာစကားလုံးလဲ နှင်းသက်မှာ မရှိဘူး
အေးလေ.. နှင်းသက်ကိုယ်တိုင်က အမှားတွေ လုပ်မိခဲ့တာကိုး. နှင်းသက်မှားသွားပါတယ်. နှင်းသက်ကို ခွင့်လွှတ်ပါလို့ မပြောရဲဘူး. ဒါပေမယ့် ပြောချင်တယ် ကို့ဆီက နှင်းသက်ကို ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အရမ်းမျှော်လင့်မိတယ်
ခုမှ နှင်းသက် ကို့ကို ဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတာတွေ သိလာတယ် ကို့ကိုချစ်လို့လဲ နှင်းသက်ကိုယ်ကို နှင်းသက် ကို့ကို ပေးခဲ့တာပေါ့.
ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် အမှားလုပ်မိတဲ့ ညီမလေးတစ်ယောက်ကို ခွင့်လွှတ်ပြီး နှင်းသက်ကို နှင်းသက်ကို ပြန်ချစ်ပါ ကိုရယ်နော် တောင်းပန်ပါတယ် နှင်းသက်ကို ပစ်မထားပါနဲ့
ကိုမရှိပဲ နှင်းသက် ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်ဘူး.. ကို့ကိုအရမ်းလွမ်းတယ် တစ်ချိန်တုန်းက ပျော်ခဲ့တဲ့ရက်တွေကို အရမ်းသတိရတယ်. နှင်းသက်လိမ္မာပါတော့မယ် ကျေးဇူးပြုပြီး နှင်းသက်မှားနေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်က
ပြန်ဆွဲတင်ပေးပါ..နှင်းသက် ကို့လက်ကို ပြန်အားကိုးပါရစေ. ပြန်ဆုပ်ကိုင်ပါရစေ “
ကိုကို နားထောင်ရင်းနှင့် ငိုနေမိသည်။ သူလဲ နှင်းသက်ကို အရမ်းချစ်ပါသည်။ ဘယ်လောက်ချစ်သည်ဆိုသည်မှာ သူကိုယ်တိုင်အသိဆုံးမို့ သူလဲ မစွန့်လွှတ်နိုင်ပါ.. ဒါပေမယ့် နှင်းသက်ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေက အရမ်းလွန်သည်။
“ကို ပြောပါ နှင်းသက်နားထောင်နေတယ်”
“မင်းလုပ်ရပ်တွေကို မင်းသိရဲ့လား မင်းဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတာကိုရော မင်းသိလား”
“သိပါတယ် အရမ်းမှားသွားပါတယ် မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာကို နှင်းသက်သိသွားပြီ”
“မင်းက သိရုံတင် သိတာ ငါက ငါ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘယ်လိုမျက်နှာပြရမလဲ . ငါက မင်းကို အများကြီးကာကွယ်ထားပေးတာလေကွာ. ခုတော့ ခုတာ့ မင်းက”
“ပြောပါ ကိုရယ် “
“ခု ငါက မင်းကို ခွင့်လွှတ်ပြီပဲထား မင်းက ခြံခုန်ဖူးသွားပြီလေ နောက်လဲ မင်းဒီလို လုပ်ဦးမှာပဲ မင်းဒီလိုမလုပ်ဘူးလို့ မပြောနိုင်ဘူး”
“မလုပ်တော့ပါဘူး နှင်းသက်ကတိပေးပါတယ် “
“ဟားဟား မင်းကတိပေးတာကို ငါကြောက်တယ် မင်းက ကတိတစ်ခုကို လွယ်လွယ်ပေးပြီးလွယ်လွယ်မေ့ပစ်တဲ့ မိန်းကလေးပဲ”
“ခု နှင်းသက်အများကြီးပြောင်းလဲသွားပါပြီ.. မယုံရင် ကို စောင့်ကြည့်လိုက်ပါ.. နှင်းသက် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေပြပါ့မယ်”
“မင်းဘယ်လောက်ကြာကြာနေနိုင်မှာမို့လဲ. အရင်ကလဲ မင်းဒီလိုပဲ ပြောတာပဲ ပြီးတော့လဲ ဒုံရင်းက ဒုံရင်းပါပဲ”
“ခု တစ်ကယ်ပြောတာပါ ကိုစောင့်ကြည့်ပါ နှင်းသက်ပြောင်းလဲတာတွေ မြင်မှ ကိုလက်ခံပါ.. ဒါပေမယ့် နှင်းသက်ကိုတော့ မမုန်းလိုက်ပါနဲ့နော်… နော် ကို”
“တော်ပါပြီ နှင်းသက်ရယ် ကြောက်သွားပါပြီ”
“ကို့ကို နှင်းသက်သက်သေပြမယ်လေ.. ခုနှင်းသက်က အရင်နှင်းသက်မဟုတ်တော့ဘူး ကို့ရဲ့ အချစ်တွေ ခွင့်လွှတ်ခြင်းတွေနဲ့ အသစ်ပြန်တည်ဆောက်မယ့် နှင်းသက်ပါ ကိုရယ်နော်”
“ကို ဘယ်လောက်ထိ ယုံကြည်ရမလဲ တစ်လ လား နှစ်လ လား ခြောက်လ လား ဘာမှ မသိနိုင်ဘူးလေ နှင်းသက်ရဲ့ စိတ်ကို ကို အစိုးရတာမှ မဟုတ်ပဲ”
“တစ်သက်လုံး ယုံရမှာပါ “
“ကိုယ် နှင်းသက်ကို ပြန်ချစ်ရမှာကို အရမ်းကြောက်တယ် နောင်တ ထပ်မရချင်တော့ဘူး ထပ်လဲ မနာကျင်ချင်တော့ဘူး”
“ကို ဖုန်းမဆက်တဲ့ရက်တွေမှာ နှင်းသက်ဘယ်လောက်အထီးကျန်လဲဆိုတာ ကို မသိပါဘူး ကိုရယ်”
“နှင်းသက် ကောင်လေး ရှိတာပဲ သူ့ဆက်ခိုင်းပေါ့”
“သူ့မှ နှင်းသက်မချစ်ပဲ ကိုရယ် နှင်းသက်ချစ်တာ ကိုတစ်ယောက်တည်းပါ”
“ခုတော့ ကို လဲ ပုံပြင်ကြိုက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီလား မသိဘူးနော်..”
“ကို.. ကို … နှင်းသက်မွေးနေ့ရောက်တော့မယ်နော်”
“တစ်ခုခုပေးနော်… တန်ဖိုးကြီးဖို့ မလိုပါဘူး အမှတ်တရလေး ဖြစ်အောင်လို့ “
“နောက်ကျနေပြီ နှင်းသက် အိပ်တော့လေ.. အိပ်ရေးပျက်နေမယ် ကိုလဲ အိပ်တော့မယ်”
“အင်း ကိုလဲ အိပ်တော့နော်… တာ့တာ.. အိပ်မက်ထဲမှာ တွေ့မယ်နော် ကို့ကို လွမ်းလို့ … ကစ်စ်စ်စ်စ်စ်စ်”
ဒီရက်ပိုင်း ကိုကို့ စိတ်တွေ ပြန်လည်လန်းဆန်းလာသည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ အရင်ရက်တွေဆီက ထိုင်းမှိုင်းနေသောစိတ်ဖြင့် ဖြတ်သန်းသော နေ့ရက်များနှင့်
ယခု လန်းဆန်းစွာဖြတ်သန်းနေရသော နေ့ရက်များက ဘာမှမဆိုင်… အရာရာကို အကောင်းမြင်သည့်စိတ်များဖြင့်ကြည့်သည်။ အရင်က အချိန်တိုင်း အဆူခံ အဆဲခံနေရသော
တပည့်ကျော်မှာလဲ အခုတော့ ကိုကိုစိတ်ကျေနပ်စေတာလေးများ လုပ်ပေးမိလျှင် မုန့်ဖိုးတွေဘာတွေတောင်ရတတ်သည်ဆိုတော့ အရာရာက အဆင်ပြေနေသည်။
ကိုကို နှင်းသက်နှင့် ပြန်လည်ဆက်သွယ်က အဆင်ပြေနေသည့်အကြောင်းကို မည်သူမှပေးမသိ။ အားလုံးကို လျှို့ဝှက်ထားသည်။ မိခင်ဖြစ်သူမှစကာ သူငယ်ချင်းတွေအဆုံး
နှင်းသက်ကို မကြည်လင်သည့်အကြည့်များနှင့်သာ ကြည့်ကြသည်မဟုတ်ပါလား။ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကများ ကိုယ့်ချစ်သူကို မကောင်းပြောတာ
ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး နားထောင်နိုင်သူ ရှိလို့လဲ။ ဒါကြောင့်ကိုကိုလဲ အားလုံးကို ဘာမျှမပြောသည့်အပြင် အားလုံးကိုပါ ရှောင်နေလိုက်သည်။
တွေ့လျှင်မေးလျှင်ပြောနေပါက လိမ်သည်ဖြစ်စေဦးကြာကြာမလိမ်နိုင်ဟု ကိုကိုထင်သောကြောင့် မိခင်ဖြစ်သူနှင့်ပါ အတတ်နိုင်ဆုံး မျက်နှာချင်းမဆိုင်ပဲနေသည်။
ဒီလိုနှင့်ပင် နှင်းသက်ရဲ့ မွေးနေ့သို့ရောက်ရှိလာတော့မည်။ ကိုကို နှင်းသက်အတွက် ဘာလက်ဆောင်ပေးရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကို စဉ်းစားနေသည်မှာ ကြာပေပြီ။
ဒီနေ့တော့ မြို့ထဲတွင် ဆိုင်အတွက် ဓါတ်ပုံထုတ်မည့် ဓါတ်ပုံစက္ကူများသွားဝယ်ရင်း အကျီ င်္တွင် စတေကာ သဘောမျိုးကပ်လို့ရသည့် ဓါတ်ပုံစက္ကူထွက်သည်ဆို၍ စမ်းဝယ်လာခဲ့သည်။
ဆိုင်ရောက်တော့ အစမ်းဝယ်လာသော ဖိုတိုပေပါကို စမ်းကာ ထုတ်ကြည့်သည်။ မဆိုး ဆိုင်များတွင်တင်ရောင်းသောအကျီ င်္စတေကာလောက်နီးနီးထွက်သောကြောင့်
အကျီ င်္အဖြူဗြောင်နှစ်ထည်သွားဝယ်ကာ နှင်းသက်နှင့် နှစ်ယောက်တွဲရိုက်ထားသည့် ဓါတ်ပုံတစ်ပုံကို စတေကာလုပ်ပြီး အကျီ င်္ဆင်တူလေး လုပ်လိုက်သည်။ မွေးနေ့လက်ဆောင်
ပေးရမည်။ နောက်ရက်တွင် နာရီဆင်တူလေး တစ်စုံသွားဝယ်ကာ အကျီ င်္လေးနှင့်အတူ ထားလိုက်သည်။ နာရီနှင့် အကျီ င်္လေးပေးရမည်။ နာရီဆင်တူ အကျီ င်္ဆင်တူလေးနှင့်
ဟဲဟဲ တော်တော်လိုက်ဖက်မည့် စုံတွဲပဲ အပြင်တွေဘာတွေလျှောက်လည်ရင် ဆင်တူဝတ်ပီးထွက်ရမယ်။
“ကို နှင်းသက်အတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင်ဝယ်ထားပီးပီး သိလား”
“အဲ့ဒီနေ့ကျရင် ကြည့်လေ.. အရမ်းမိုက်တယ်သိလား”
“ဈေးကြီးတာတွေ မဝယ်ပါနဲ့ ကိုရယ် ပိုက်ဆံကုန်တယ်”
“အံမယ် သိပါတယ် နှင်းသက်နဲ့ ကို အတူနေဖို့ ပိုက်ဆံစုခိုင်းဦးမယ် မဟုတ်လား ကိုစုထားပါတယ် နှင်းသက်ရဲ့”
“အဟင်း ကိုကလဲ နှင်းသက်က ပိုက်ဆံကုန်မှာစိုးလို့ပြောတာပါ”
“ဟုတ်ပါပြီ ဆရာမရယ် “
“အဲ့ဒီနေ့ကျရင် အိမ်နောက်ဘက်လာခဲ့လေ..နော် ကို”
“သြော် မေ့တော့မလို့ ဘတ်ဒေးကိတ်လေးပါ လုပ်ပေးပါလားနော်… နှင်းသက် ကိတ် စားချင်တယ်”
“အာ….. ကြည့်စမ်း ကိုမေ့နေတာ လက်ဆောင်အတွက်ပဲ လုပ်နေတော့ ဘတ်ဒေးကိတ်ကို မေ့သွားတယ် “
“အင်း….အကြီးကြီး မဟုတ်ဘူးနော် သေးသေးလေးပဲ ကိုနဲ့ နှင်းသက် နှစ်ယောက်စားလို့ ရရင် ရပြီ”
“အိုကေ… ဒီည ၁၂ ကျော်တဲ့အထိ စကားပြောမယ်နော် ပြီးရင် နှင်းသက်ရဲ့ မွေးနေ့ မှာ နှင်းသက်အတွက် ပထမဆုံး ဘတ်ဒေးဝှစ် လုပ်ပေးမယ်”
“ကိုလဲ နှင်းသက်ကို အရမ်းချစ်တယ် နှင်းသက် လိမ္မာပါတော့နော်… သိလား”
“စိတ်ချပါကိုရယ် နှင်းသက်အရမ်းကြောက်သွားပါပြီ… ကို့ကို နှင်းသက်မခွဲနိုင်ဘူးဆိုတာ သိသွားပြီ ကိုလဲ နှင်းသက်ကို မခွဲနိုင်ဘူးဟုတ်”
“အလည်မလေး… အေးပေါ့ နှင်းသက်ကို ကို့တစ်ဘဝလုံးအတွက် ချစ်တာပါ”
ကိုကို ထိုညက ၁ နာရီလောက်မှပင် အိပ်ရသည်။ ၁၂ ကျော်ချိန်တွင် နှင်းသက်အတွက် ဘတ်ဒေးဝှစ် နှင့် ဘတ်ဒေးကစ်စ်စ် လေးပေးကာ အိပ်ခိုင်းလိုက်ရသည်။
ကိုကို နောက်တစ်ရက်မနက်မိုးလင်းသည်နှင့် ကိတ်ဆိုင်ကိုပြေးကာ ဘတ်ဒေးကိတ် သေးသေးလေးတစ်လုံးကို အသဲအသန်မှာယူရတော့သည်။
ညနေအမှီလုပ်ခိုင်းကာ… ညနေရောက်သည်နှင့် ကိတ်ကိုသွားယူကာ ဆိုင်တွင် ပြန်ထားထားလိုက်သည်။ အိမ်ကိုယူသွားလို့ မဖြစ်။ မေမေတွေ့သွားပါက မေးနေဦးမည်။
မိခင်မွေးနေ့တွင် မွေးနေ့ကိတ်တစ်ခါမှမလုပ်ပေးဖူးသော သားအလိမ္မာလေးက မစိတ်တက်ကာ မွှန်ထူနေသည်ကို ကိုကို မတွေးမိတော့ပေ။
ည ကိုးနာရီခန့်တွင် ကိုကို ရေမိုးချိုး အဝတ်အစားလဲပြီးနှင်းသက်နှင့် မွေးနေ့ပါတီလေးလုပ်ရန် ထွက်ခဲ့လိုက်သည်။
ဆိုင်တွင် ကိတ်ဝင်ယူကာနှင်းသက်ဆီရောက်တော့ ဆယ်နာရီပင် ထိုးလုပြီ။ ကားကို ရပ်နေကျနေရာလေးတွင်ပင် ရပ်ကာ နှင်းသက်တို့ အိမ်နောက်ဖေးဘက်သို့ ဝင်လာခဲ့လိုက်သည်။
ထိုင်နေကျ ခုံလေးတွင် ချစ်ရသော ချစ်သူလေး နှင်းသက်က ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်ကာ ကိုကို့ကိုစောင့်နေသည်။
“ကိုရယ် ကြာလိုက်တာ နှင်းသက်ရောက်နေတာ ကြာလှပြီ”
“အင်း ကိတ်ဝင်ယူနေတာနဲ့ နည်းနည်းကြာသွားတယ် ဟတ်ပီးဘတ်ဒေး နှင်းသက်”
“ကျေးဇူး ကိုကို လာ မွေးနေ့ကိတ် ဖယောင်းတိုင်ထွန်းမယ်”
“ဟင် နှင်းသက် ဖေဖေတို့ တွေ့သွားဦးမယ်”
“စိတ်ချ ဆရာကြီး ညနေ နှင်းသက်အတွက် သူတို့ မွေးနေ့ လုပ်ပေးကတည်းက သူတို့စားတဲ့ ထဲမှာ အိပ်ဆေး နည်းနည်းစီထည့်ထားပီးသား ဟိဟိ”
“ဟာ ငရဲကြီးဦးမယ် “
“အင်….. ဒါမှ နှင်းသက်နဲ့ ကိုကို မွေးနေ့ အေးအေးဆေးဆေးလုပ်လို့ ရမှာလေ”
နှင်းသက်နှင့်ကိုကို ကိတ်ကို တစ်ယောက်တစ်ဇွန်းစီခွန့်ကျွေးရင်း စကားလေးတီတီတာတာပြောဆိုရင်း နှင်းသက်မှ
“ကိုကို ဒီည မပြန်နဲ့နော် နှင်းသက်နဲ့နေ သိလား”
“ဟင် ဒီမှာ တစ်ညလုံးလား”
“ဒီမှာ ဘယ်ဟုတ်မလဲ နှင်းသက် အခန်းထဲ လိုက်ခဲ့လေ”
“ဖြစ်တာပေါ့ ဖြစ်လို့ ခေါ်တာပေါ့ ကိုကိုရဲ့မလိုက်ချင်ဘူးလား”
“လာပါ ကိုကိုရဲ့ မနက် ကျမှ အစောကြီးထပြန်ပေါ့ “
ဒီလိုနှင့် ကိုကို နှင်းသက်လက်ကလေးကို ကိုင်ရင်း နှင်းသက်တို့ အိမ်ထဲသို့…………….
”လာ ကိုကို တိုးတိုးနော်”
နှစ်ယောက်သား နောက်ဖေးအိမ်တံခါးဖြည်းဖြည်းဖွင့်ပြီး ခြေဖွနင်းကာ အိမ်ထဲသို့ တစ်လှမ်းချင်းလှမ်းလာသည်။ သူများအိမ်တွင်း ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ဝင်ရသည်မှာ ပထမဆုံးမို့လို့ ကိုကို ရင်တွေ ဗြောင်းဆန်နေသည်။
နှင်းသက်ကတော့ ဘယ်လိုနေသည်မသိ။ ကိုကိုကတော့ ခြေတွေလက်တွေတုန်ကာ ဒူးများ မခိုင်ချင်သလိုလို ဖြစ်နေသည်။ တစ်ဖြည်းဖြည်းနှင့် နှင်းသက်အခန်းနားသို့ရောက်လာလေပြီ။ နှင်းသက်က အခန်းတွင်း
ဝင်ရန် အချက်ပြကာ အိမ်ရှေ့ဘက်သို့ ထွက်သွားသည်။ ကိုကိုလဲ ဘာဘာညာညာ မစဉ်းစားနိုင်တော့ပဲ အခန်းတွင်းသို့ ခြေဖွနင်းကာ ဝင်လိုက်တော့သည်။
အခန်းတွင်းဝယ် ညအိပ်မီး မှိန်ပျပျလေးထွန်းထားသည်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အခန်း ကိုယ်ချစ်ရသူရဲ့ အခန်းမို့ ကြောက်နေသည့်ကြားကပင် အခန်းတွင်းလှည့်ပါတ်စပ်စုလိုက်သေးသည်။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အိပ်ခန်းပီပီ ရှင်းလင်းသပ်ရပ်နေသည်။ အခန်းတွင်းဝယ် မှန်တင်ခုံတစ်ခုံ၊ မှန်တင်ခုံဘေးနားဝယ် ဇာခြင်ထောင်ပါးလေး ထောင်ထားသော ကုတင်လေး၊ အခန်းထောင့်ဝယ်
အဝတ်ထည့်သည့်ဘီရိုနှင့် ဘီရိုနံဘေးဝယ် အဝတ်လှန်းသည့်စင်တစ်စင် ။ ကိုကို ကုတင်ပေါ်တက်ထိုင်ပြီး နှင်းသက်ကိုစောင့်နေလိုက်တယ်… အချိန်တော်တော်ကြာသည်အထိ နှင်းသက်မလာသေး။
နှင်းသက်ကလဲ ဘာလုပ်နေသည်မသိ ကိုကိုရင်တွေတုန်လာသည်။ မထူးတော့ အိပ်ရာပေါ်အိပ်ကာ စောင်ကို ခေါင်းမြီးခြုံထားရင်း ဘုရားစာရွတ်နေလိုက်တော့သည်။
ဟော် အခန်းတံခါးဖွင့်သံကြားတယ် ကုတင်သံ တရွေ့ရွေ့တိုးကပ်လာသော ခြေသံ ကိုကို ရင်တွေခုန်လာပြန်သည်။ နှင်းသက်လား ဒါမှမဟုတ် အိမ်သားတစ်ယောက်ယောက်များလား
ကုတင်ပေါ် တစ်ဦးတစ်ယောက်တက်ထိုင်လိုက်သည့် ခံစားမှုနှင့်အတူ ကိုကို ခြုံထားသော စောင်ကို ဆွဲယူခြင်း ခံလိုက်ရသည်။ ကိုကို မျက်လုံးများကို မရဲတရဲ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့
“နှင်းသက်ရာ ကြာလိုက်တာ ဘာလုပ်နေတာလဲ သည်မှာ ကိုက ရင်တွေခုန်လွန်းလို့သေတော့မယ် ကြောက်လို့”
“အိမ်ရှေ့သွားပြီး လိုက်ကြည့်နေတာ နောက်ဖေဖေတို့အခြေအနေလဲ သွားအကဲခတ်တာ ခဏလေးပါ”
“ကြည့်ပါဦး ချွေးတွေလဲပြန်လို့ အဲ့လောက်တောင် ကြောက်တယ်ပေါ့လေ”
နှင်းသက် ကိုကို ဘေးနားဝင်လှဲအိပ်ကာ ကိုကိုလက်မောင်းကိုခေါင်းအုံးရင်း ကိုကို့ကို ဖက်ထားလိုက်သည်။ ကိုက်ိုလဲ နှင်းသက် ကိုယ်လုံးလေးကို အလိုက်သင့်ပြန်ဖက်ထားရင်း
နှစ်ယောက်သား စကားတိုးတိုးပြောရင်း အတွေ့အကြုံသစ်ဝယ်ယစ်မူးနေကြတော့သည်။ မိန်းကလေး တစ်ယောက်နှင့် နှစ်ယောက်တည်း အိပ်ယာတစ်ခုတည်းဝယ်အိပ်နေတော့လဲ
ကိုကိုရဲ့ လိင်စိတ်များက ကြွတက်လာပြန်သည်။ နှင်းသက်ကို ဖက်ထားရင်းမှ နှင်းသက်နဖူးလေးနမ်းလိုက် ပါးလေးနမ်းလိုက်နှင့် လုပ်နေသည်။ လက်များကလဲ အငြိမ်မနေ
ညအိပ်ဂါဝန်ပါးလေးသာ ဝတ်ထားသော နှင်းသက်တစ်ကိုယ်လုံးအနှံ့လက်များက တရွရွ ပြေးလွှားနေသည်။ နှင်းသက်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို ငုံနမ်းလိုက်တော့ နှင်းသက်ကလဲ
အလိုက်သင့်ပင် နှုတ်ခမ်းများကိုဟကာ ပြန်နမ်းလိုက်သည်။ အပေါ်တွင် နှုတ်ခမ်းများနှင့် လျှာများက စစ်ခင်းနေသလို ကိုကို့လက်များကလဲ နှင်းသက် ကိုယ်လုံးပေါ်ဝယ် နယ်မြေသစ်များ ရှာဖွေနေသည်။
ကိုကို နှင်းသက်ရဲ့ နို့အုံများကို ဆုပ်ညှစ်နယ်လိုက်တော့ နှင်းသက်ရဲ့ ညီးသံလေးပါးပါးထွက်လာသည်။ ပေါင်အတွင်းသားလေးများကို ပွတ်သပ်ရင်း ဂါဝန်ကိုလှန်တင်လိုက်သည်။
မီးရောင်မှိန်မှိန်အောက်ဝယ် နှင်းသက်ကိုယ်လုံးလေးက ခုတော့ အဝတ်မဲ့သွားလေပြီ… ကိုကိုလဲ အချိန်မဆွဲတော့ပဲ အကျီ င်္နှင့် ဘောင်းဘီကို ချွတ်လိုက်သည်။
ကိုကို နှင်းသက်နှုတ်ခမ်းများကို နမ်းနေရာမှ တစ်ဖြည်းဖြည်းအောက်ဆင်းလာကာ နှင်းသက်ရဲ့ ညီမလေးကို မျက်နှာအပ်လိုက်သည်။ အမွှေးပါးပါးလေးများဖုံးအုပ်ထားသော နှင်းသက် ညီမလေးသည်
စိုစွတ်စွာ စောင့်ကြိုလျက်ရှိသည်။ နှင်းသက်ရဲ့ ပေါင်လေးများကို အသာကားကာ ပိပိအကွဲကြောင်းလေးတစ်လျှောက် လျှာနှင့် တို့ထိက လျှက်လိုက်တော့ နှင်းသက်ကျောလေးများပင် ကော့လာတော့သည်။
ပိပိဖောင်းဖောင်းလေးရဲ့ နှုတ်ခမ်းသားများကို လက်ချောင်းလေးများနှင့်ဖြဲကာ အစိလေးကို စုပ်လိုက်တော့ ပေါင်သားများပင်လှုပ်ခါလာသည်။ ကိုကို လျှာကို အကွဲကြောင်းတစ်လျှောက် အပေါ်အောက်
လျှက်လိုက် အပေါက်လေးထဲ ရောက်သလောက် ထိုးထည့်နေချိန်ဝယ် နှင်းသက်လဲ တစ်အီးအီးနှင့်ညီးကာ ကိုကို ဆံပင်များကို ထိုးဖွနေတော့သည်။
“ကိုရယ် အား…………… ကောင်းလိုက်တာ….. နှင်းသက်ဘယ်လိုမှ မခံစားနိုင်တော့ဘူး”
ကိုကို နှင်းသက်ရဲ့ ပိပိလေးကို နမ်းပေးလျက်နှင့်ပင် နှင်းသက်ရဲ့ ကိုယ်လုံးလေးတစ်ဆတ်ဆတ်တုန်ကာ ကာမပန်းတိုင်ဆုံးသို့ ရောက်ရှိသွားတော့သည်။
ကိုကို မျက်နှာတစ်ခုလုံးလဲ နှင်းသက်ညီမလေးမှ ပေးသော အချစ်ရည်များနှင့်ပေပွနေပြီ… နှင်းသက် အိပ်နေရာမှ ထကာ ကိုကိုမျက်နှာမှာပေနေသော အရည်များကိုလက်နှင့်သုတ်ရင်း
“အရမ်းချစ်တယ် ကိုရယ် လာခု နှင်းသက်အလှည့် ” ဟုဆိုကာ ကိုကို့ကို လှဲအိပ်စေပြီး ပေါက်ကွဲမတတ်ထောင်မတ်နေသော ကိုကို့ညီတော်မောင်ကို ငုံ့ကာ စုပ်တော့သည်။
ထိပ်ဖူးလေးကို လျှာနှင့်ပတ်ကာ စုပ်သည်။ အကြောမြောင်းမြောင်းထနေသော အချောင်းတလျှောက် လျှာနှင့်လျက်ကာ ငုံကာ စုပ်သည်။ နှင်းသက်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးနှင့် အဝင်အထွက်ပြုနေသော
ညီတော်မောင်ကို ကြည့်ကာ ကိုကိုလဲ ဇရက်မင်းစည်းစိမ်ကို ခံစားနေတော့သည်။ နှင်းသက်သည် ဥများပါမကျန် ငုံကာစုပ်ရင်း ကိုကို့ကိုပြုစုနေတော့သည်။
ကိုကိုခမျာ ကြာလျှင် နှင်းသက်ရဲ့ ပါးစပ်တွင်းပင် ပြီးသွားမှာစိုးသည်မို့ နှင်းသက်ရဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကို အပေါ်သို့ဆွဲတင်လိုက်သည်။
“နှင်းသက်ရယ်တော်ပြီ တော်ကြာနေ ပြီးသွားလို့ အတူမနေလိုက်ရပဲ ဖြစ်နေဦးမယ် ကိုတို့ အတူတူနေကြရအောင်နော်”
နှင်းသက် အပေါ်မှ ခွထားစေပြီး ကိုကိုထောင်မတ်နေသော ညီတော်မောင်ကို ပိပိလေးနှင့်တေ့လိုက်တော့ နှင်းသက်ကာ အလိုက်သင့်လေးပဲ ဖိကာ ထိုင်ချလိုက်သည်။
ရှေ့တွင် တစ်ချီပြီးထားပြီမို့ နှင်းသက်ရဲ့ ညီမလေးဝယ် ရွှဲနေသော အရည်များကအဝင်လွယ်အောင် ကူညီပေးနေသည်။ မအောင်းရသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သော ဂူလေးအတွင်းသို့ ဝင်သွားသော
ကိုကိုညီတော်မောင်ကတော့ စီးစီးပိုင်ပိုင်လေးပင် ခံစားနေရသည်။ ဖြည်းဖြည်းချင်းအသွင်းအထုတ်လုပ်ရင်းကပင် တစ်ဖြည်းဖြည်းနှင့် နှင်းသက် အပေါ်က ဆောင့်နေသော ဆောင့်ချက်များသည်
အားပါလာသည်။ အခန်းတွင်းဝယ် နှင်းသက်ရဲ့ တင်ပါးဝိုင်းဝိုင်းကြီးများနှင့် ကိုကို့ပေါင်တို့ ရိုက်ခတ်မိသောအသံ တစ်ဖတ်ဖတ် မြည်သံကို မကျယ်ရအောင်ထိန်းရင်း အတူတူနေရသည်ခံစားချက်က ဘာနှင့်မှ မတူ။
နှင်းသက် မောကာ ခဏနားချိန်ဝယ် နှင်းသက်ရဲ့ကိုယ်ကို အပေါ်မှပင် ထားကာ ကိုကိုအောက်မှ ပင့်ကာဆောင့်သည်။
“အား…… ကောင်းလိုက်တာ နှင်းသက်ရယ် အင့် အင့် ရှီး”
“ကိုကို လုပ်နော် နှင်းသက်ကို မညှာနဲ့ သိလား ကို့ကို အရမ်းချစ်တယ် အား …. ကောင်းတယ်”
နှင်းသက် ကိုကို့ကို ဖက်တွယ်ရင်း တိုးတိုးကြိတ်ကာ ညီးရင်းပြောသည်။
ကိုကိုအောက်မှ ဆောင့်နေရသည်မှာ ညောင်းလာတော့ ပုံစံပြောာင်းသည်။ နှင်းသက်ကို အောက်မှာပြန်ထားကာ အပေါ်မှ တက်ကာပြန်နေသည်။
စိတ်ရှိလက်ရှိမနေနိုင်သော်လည်း ကပ်ကာ ညှောင့်သည်။ နှင်းသက်လဲ အောက်မှ ပြန်ပြန်ကော့ပေးရင်း ကိုကို့ကို ကူညီပေးသည်။ နှစ်ယောက်သား တိုင်မင်မှန်မှန်နှင့် ချီတက်နေကြသည်မှာ
“ကို မြန်မြန်လေးလုပ်ပေး နှင်းသက်ပြီးတော့မယ် အရမ်းကောင်းနေပြီ… အား ……… ဘယ်လိုကြီးလဲ ကိုရယ်”
“အင်း ကိုလဲ ကောင်းတယ် ပြီးတော့မယ် မြန်မြန် အားရပါးရလုပ်ချင်တယ် နှင်းသက်ရယ် အသံထွက်မှာကြောက်လို့”
“လုပ်ကွာ ထွက်လဲထွက်ပစေတော့…. မြန်မြန်လေးနော်..”
ကိုကို နှင်းသက်ရဲ့ ပေါင်နှစ်လုံးကို ပုခုံးပေါ်တင် ကုတင်ကို လက်ထောက်ရင်း နှင်းသက်ရဲ့ ညီမလေးအတွင်းသို့ အားရပါးရဆောင့်တော့သည်။
တစ်ဖတ်ဖတ် မြည်သံများနျင့်အတူ နှင်းသက်ရဲ့ ခြေထောက်များတောင့်တင်းလာသည်။ နှင်းသက်ရဲ့ လက်များက ကိုကို လက်မောင်းများကို အားနှင့်ညှစ်လာတော့သည်။
နှင်းသက်ပြီးတော့မယ် ဆိုသည့်အသိနှင့် အတူ ကိုကိုရဲ့ ဆောင့်ချက်များ ပိုမို မြန်ဆက်သွက်လက်လာသည်။ အချက်နှစ်ဆယ်ခန့် ဆောင့်ပြီးချိန်ဝယ် နှင်းသက်ရဲ့ညီမလေးမှ
ညှစ်လာသည့်ခံစားချက်နှင့်အတူ ကိုကို့လက်မောင်းများကို ဆုပ်ကိုင်ထားသော နှင်းသက်လက်များ ပြေလျော့သွားသည်။ နှင်းသက်ပြီးသွားလေပြီ…
ကိုကိုလဲထိန်းထားသမျှ သုက်ရည်ပူနွေးနွေးများကို နှင်းသက်ရဲ့ ညီမလေးအတွင်းသို့ ပက်ဖြန်းရင်း နှင်းသက်ကိုယ်ပေါ် မှောက်ချလိုက်တော့သည်။
ကိုကို စကားပင်ပြန်မပြောနိုင်…. ထိုညက ပုံစံမျိုးစုံနှင့် သုံးခါလောက်ထပ်လုပ်ဖြစ်ကြပြန်သည်။ မနက်မိုးမလင်းခင် လေးနာရီခန့်တွင်တော့ ကိုကိုတစ်ယောက် နှင်းသက်အိမ်ထဲမှ
တိတ်တိတ်ကလေး နုန်းခွေကာ ပြန်ခိုးထွက်ခဲ့လေတော့သည်။
မနက်ခင်း စောစောဖွင့်သော လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် တစ်ညလုံး သောင်းကျန်းထားသောကြောင့် နုန်းချိနေသော ကိုယ်ခန္ဓာကိုအထိုင်ချပြီး ဟာနေသော ဝမ်းကိုပြန်ဖြည့်ရသည်။
တစ်ညလုံးလဲ ဆာလိုက်သောရေ…. သောက်စရာမရှိ…လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရောက်မှပင် လက်ဖက်ရည်မမှာသေးခင် ရေသန့်တစ်ဗူးမှာပြီးသောက်ချရသည်။ ကုန်ခန်းနေသော ရေဓါတ်လဲပြန်ဖြည့်ရသေးသည်။
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှ ထလာတော့ မနက်စောစောအာရုံတက် နေခြည်နုနုအောက်မှာ လူတိုင်းက စိတ်သစ် မနက်သစ်ဝယ် တက်ကြွ လန်းဆန်းစွာ လှုပ်ရှားနေကြပြီ။
ကိုကိုကတော့ နုန်းခွေနေသော ကိုယ်ခန္ဓာကို အနိုင်နိုင်သယ်ရင်း အိမ်သို့ပြန်ခဲ့သည်။
အိမ်ထဲဝင်ဝင်ချင်းပင် ဘုရားခန်းမှ ဘုရားရှိခိုးပြီးထွက်လာသော မေမေနှင့်ဆုံသည်။ သားအမိနှစ်ယောက်မျက်နှာချင်းမဆိုင်သည်မှာ ကြာပြီ။ ကိုကိုက ရှောင်ဖယ်နေသည်လေ။
ဒီနေ့တော့ သားအမိနှစ်ဦးသား မနက်စာစားရန် မေမေခေါ်သောကြောင့် ထမင်းစားခန်းထဲလိုက်ဝင်ခဲ့သော်လည်း ကိုကို့စိတ်က အိပ်ယာကိုသာ တမ်းတနေမိသည်။ အရမ်းပင်ပန်းနေပြီလေ. အရမ်းအိပ်ချင်နေပြီ
ကိုကို အရမ်းကြိုက်သော ထမင်းကြော် ကို မေမေထည့်ကျွေးသော်လည်း ကိုကိုမစားနိုင်။ ကော်ဖီတစ်ခွက်သာသောက်သည်။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် သောက်ခဲ့ပြီးပြီးလို့သာပြောလိုက်သည်။
“သား ဘယ်ကပြန်လာတာလဲ ညကလဲ ပြန်မအိပ်ဘူး”
“ဟုတ်ကဲ့ မေမေ သားညက ဆိုင်မှာအိပ်တယ် ဒီဇိုင်းနည်းနည်းလုပ်ဖို့ရှိလို့”
“မေမေနဲ့ မနက်လဲမတွေ့ ညလဲမတွေ့အောင် အလုပ်တွေ ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတော့ ငါ့သား မိန်းမယူတော့မယ်နဲ့တူတယ်”
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အစီအစဉ်ဆွဲထားသည်က နှင်းသက်ကျောင်းပြီးလျှင် နှစ်ဦးသား အရင် ရုံးတက်လက်မှတ်ထိုးမည်။ ပြီးလျှင် ပိုက်ဆံနည်းနည်းစုပြီးတာနှင့် လူကြီးတွေကိုပြောပြမည်ဟု တွေးထားသည်။
အခုတော့ မေမေက ပြောလာသည်မို့ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်မလုံကာ ပျာပျာသလဲပင် ပြန်ငြင်းလိုက်မိသည်။
“မဟုတ်ပါဘူးမေမေ သားအခုတလော အလုပ်ကျလို့ပါ”
“အဟင်းဟင်း င့ါသားရယ် မေမေကလဲစတာပါ မေမေ့ကိုလုပ်ကျွေးဥိးမယ်ဆို မဟုတ်လား”
“ဟုတ်တာပေါ့ ဟဲဟဲ “
“ဒါနဲ့ သား ရဲ့ ကောင်မလေးရော”
“မင်းစိတ်နဲ့ မင်းကိုယ်ပါ မင်းကိုလဲ မေမေလွတ်လပ်ခွင့်အပြည့်ပေးထားပါတယ် ဒါပေမယ့် သား အိမ်ထောင်ဖက် ရွေးမမှားဖို့ မေမေ သတိပေးတာပါ”
“ဟုတ်ကဲ့ပါမေမေ သားအရမ်းပင်ပန်းနေလို့ အိပ်တော့မယ် မေမေ နော်”
ကိုကို အိမ်ခန်း အပေါ်ထပ်သို့ တက်လာရင်း နဂိုကတည်းကပင်ပန်းသောစိတ်က ပို၍ ညစ်သွားသည်။ အိပ်ယာပေါ်လှဲအိပ်ရင်း ဘာကိုမှ မစဉ်းစားပဲ အိပ်ပျော်အောင်ကြိုးစားလိုက်သည်။
ဗိုက်ဘရေးရှင်းသာ လုပ်ထားသော ဖုန်းက ခေါင်းအုံးနားတွင် တဒီးဒီး နှင့်တုန်ခါလာသောကြောင့် ကိုကို အိပ်ပျော်နေရာမှ နိုးလာသည်။ ဖုန်းနံပါတ်ကြည့်လိုက်တော့ နှင်းသက်
“ဟိတ် အိပ်နေတုန်းပဲလား ၁ နာရီတောင်ထိုးတော့မယ် ထမင်းထမစားဘူးလား”
“အင်း …. “
“တော်တော်ပင်ပန်းနေတယ်ပေါ့ ဟုတ်လား ဒီမှာ နှင်းသက်ဆို တစ်ချက်လေးတောင် ပြန်မမှေးရသေးဘူး မိုးလင်းကတည်းက အမေတို့ကို ကူနေရတယ် တောက်လျှောက်ပဲ “
“အင်း နေ့လည်ခဏပြန်မှိန်းလိုက်လေ နှင်းသက်လဲ ပင်ပန်းနေမှာပေါ့”
“ဒီမှာ တစ်ညလုံး သူ့ကိုလဲ ပြုစုရသေးတယ် အိပ်လဲ မအိပ်ရဘူး မနက်ကျတော့လဲ အိမ်အလုပ်တွေ ၀ိုင်းလုပ်နဲ့ သေတော့မယ်”
“အံမယ် နှင်းသက်ပဲ မွေးနေ့လုပ်ပြီးတော့”
“မွေးနေ့ပဲလုပ်တာလေ ဒီက သနားလို့ သူ့ကို အိမ်မှာအိပ်လို့ခေါ်တာ ကောင်းကောင်းမအိပ်ဘူး တစ်ညလုံးဘာတွေ လုပ်မှန်းမသိဘူး”
“အလဲ့လဲ့ ကောင်မလေးက ရိုးတယ် ကြည့်စမ်း ဘာလုပ်မှန်း မသိဘူးပေါ့လေ မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးတာလေ… ဟီးဟီး “
“တော်ပါ မနက်က အမေတောင်ပြောနေတယ် ညက အစောကြီးပဲ အိပ်ပျော်သွားတယ်တဲ့ နှင်းသက်ကိုလဲ ကြည့်ပြီးပြောတယ် နင့်ပုံက ဘာဖြစ်နေတာလဲတဲ့ ဟိဟိ “
“ဘာမှ မပြောဘူး ညက အိပ်မပျော်ဘူးလို့ပဲ ပြောလိုက်တယ် ထတော့ ထတော့ ငပျင်းကြီး အဲ့လိုပျင်းနေရင် နှင်းသက် ကို့ကို မယူတော့ဘူးနော်”
“မပျင်းပါဘူးကွာ.. ထပါပြီ… ထပါပြီ”
“ဘာထတာလဲ သူထရင် ဒီကကြောက်တယ်”
“လူလဲ ထပြီ ညီလေးလဲ ထပြီ ဟဲဟဲ “
“တော် တော် နားရှက်စရာတွေ နှင်းသက် ခဏ ဝင်အိပ်လိုက်ဦးမယ် တာ့တာ”
“တာ့တာ နှင်းသက် အရမ်းချစ်တယ် ညကျရင် တွေ့မယ်နော်”
ကိုကို ရေမိုးချိုးပြီး ဆိုင်သို့ထွက်ခဲ့သည်။ အလုပ်တွေ လုပ်ရဦးမည်လေ… ပိုက်ဆံရှာရမည်. မနက်ကမေမေပြောသော စကားများကို ပြန်ကြားယောင်ကာ စိတ်ထဲဝယ် မကောင်းဖြစ်မိသည်။
သို့သော်လည်း ခဏသာ…. အဆိပ်တက်ကာ မွှန်နေသည်မို့ အလုပ်သာ ဖိလုပ်နေမိသည်။
ည (၇) နာရီခန့်တွင် နှင်းသက်ဆီမှ ဖုန်းလာသည်။ နှစ်ယောက်သား ဖုန်းပြောပြီးချိန်ဝယ် ကိုကိုက နှင်းသက်ဆီဝယ် ညလာတွေ့ဖို့ ချိန်းဆိုလိုက်သည်။
ညအချိန်ဝယ် နှစ်ဦးသား အရင်ခုံတန်းလေးတွင် စကားများပြောရာမှ ညဉ့်နက်ချိန်တွင် ကိုကို အိမ်မပြန်ဖြစ်ပဲ နှင်းသက်ရဲ့ အခန်းလေးတွင်းပင် ဝင်ရောက်အိပ်စက်ဖြစ်တော့သည်။
ကျနော် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကျနော့်ရဲ့ ရေးလက်စ ဇာတ်လမ်းလေး နှစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ တိမ်လွှာကြားက ပန်းဝတ်ရည်နဲ့ ပလတ်စတစ်ပန်းကို
ရပ်ထားဖြစ်ပါတယ်။ ခုတော့ မအားတဲ့ကြားကပဲ ဒီနှစ်ပုဒ်လုံးကို ပြီးအောင်ကြိုးစားပြီးရေးသွားမှာပါ… မအားတဲ့ကြားက ရေးမှဖြစ်လို့
ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြစ်ခဲ့ရင် သည်းခံပြီးဖတ်ရှုပေးနေတဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်အားလုံးကို တောင်းပန်ပါတယ်…
ပထမဆုံးရေးသားတဲ့ လက်ရာမို့လို့ မကောင်းရင်လဲ ကြိုးစားပြီး အားပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံရင်း
ကိုကို လက်မောင်းဝယ်ခေါင်းအုံးပြီး အိပ်ပျော်နေသော နှင်းသက်ကို ကြည့်ကာ သက်ပြင်းမော တစ်ခု မသိမသာလေး ချလိုက်သည်။
အခု ကိုကိုရောက်နေသည်က နှင်းသက်အိပ်ယာ နှင်းသက်အိမ်ခန်း အတွင်းတွင်… ကိုကိုနှင့်နှင်းသက်တို့ အဆင့်တက်ကာ အရင်က ခြံဝင်း ခုံတန်းလေးမှ
အိမ်ခန်းအတွင်းဝယ် ဝင်ရောက်အိပ်စက်နေသည်မှာ အချိန်အတန်ငယ်ကြာခဲ့လေပြီ… ကိုကို အတွေးထဲဝယ် သူငယ်ချင်းများပြောသောစကား မေမေပြောတဲ့
သားကို အိမ်ထောင်ဖက် ရွေးမမှားစေချင်ဘူးဆိုသည်များက အထပ်ထပ် ပြန်လည်ကြားယောင်နေသည်။
နှင်းသက်က ချစ်စရာကောင်းသည်။ သို့ပေမယ့် ဇွတ်တရွတ်လုပ်ချင်သည်။ စိတ်က အရမ်းများသည်။ နားလည်နိုင်စွမ်းမရှိ။ ကိုကိုပြောပြသည်များကို နားလည်သောလည်း
ဘုန်းကြီးတစ္ဆေကို ဘုရားစားရွတ်နေသလိုပင်ဖြစ်နေသည်။ ပြော ဆုံးမလျှင်လည်း ပြောတုန်း ဆုံးမတုန်းခဏသာ နားထောင်ပြီး ပြီး သူလုပ်ချင်တာများကို လုပ်သည်။
ကိုကို သိသွားလျှင် မျက်ရည်လေး စမ်းစမ်းနှင့်တောင်းပန်တတ်သည်။ ကိုကိုကလဲ ချစ်သောမိန်းကလေး ရည်ရွယ်ထားသူမို့ စိတ်ဆိုးတုန်းခဏသာ ပြီးလျှင် ပြန်ပြေလည်သွားသည်သာ။
ခုတော့ ကိုကို စဉ်းစားရချေပြီ… နှစ်ဦးသားရည်မှန်းထားသည့်ကာလက မကြာခင် အချိန်မှာ ရောက်လာတော့မည်။
နှင်းသက်ကို ထိန်းချုပ်ဖို့ စဉ်းစားနေရသည်။ အချိန်တန်လျှင် ငြိမ်သက်သွားမည်လို့ ကိုကို ယုံကြည်ထားပါသည်။
“ဟင်… နှင်းသက် နိုးလာပြီလား”
“အင်း နိုးနေတာ ကြာပြီ.. ကို သက်ပြင်းတွေချပြီး ဘာတွေ စဉ်းစားနေတာလဲ”
“ဒီလိုပါပဲ နှင်းသက်ရယ် “
“မဟုတ်ပါဘူး ကို စိတ်ညစ်စရာတွေရှိတယ်နဲ့ တူတယ် နှင်းသက်ကိုပြောပြလေ နှင်းသက်လဲ ၀ိုင်းကူညီပြီး ဖြေရှင်းပေးမှာပေါ့”
ပါးပြင်ကို ဖွဖွနမ်းကာ ပြောလာသော နှင်းသက်ကို ကိုကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ်လေး ပွေ့ဖက်ထားလိုက်သည်။
“အင်း ပြောရင် နှင်းသက်စိတ်မဆိုးနဲ့နော်… ခု ကိုယ်စဉ်းစားနေတာ နှင်းသက် က ကိုယ်ရှိနေသားနဲ့ ရည်းစားထားတယ်
သူများတွေ အမြင်မှာ ရည်းစားများတဲ့ မိန်းကလေးလို့ မြင်နေတာတွေ စဉ်းစားနေတာပါ”
“ကို ရယ် နှင်းသက် လိမ္မာနေပါပြီလေ ကို့ကို နှင်းသက်ကတိပေးထားပြီးသားပါ”
“အင်း… ကိုရော နှင်းသက်ရော လိမ္မာရတော့မယ်လေ… နောက်ဆို ကိုနဲ့ နှင်းသက်က ဘဝတစ်ခုကို ထူထောင်ကြတော့မှာ”
“နှင်းသက် နားလည်ပါတယ် ကိုရယ် “
“အင်း ကိုနဲ့ နှင်းသက်က ခု အများအမြင်မှာတော့ သမီးရည်းစားပေါ့ ဒါပေမယ့် ကိုတို့ နှစ်ယောက်အတွက်ကျတော့ သမီးရည်းစားဘဝ မဟုတ်ပဲ
လင်မယားဘဝလိုမျိုး ဖြစ်နေတယ်လေ… အဲ့တော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် သစ္စာရှိကြရတော့မှာပေါ့ကွယ်”
“နားလည်ပါတယ် ကိုကို ဆရာကြီးရယ် နှင်းသက်ကို မယုံဘူးလားပြော”
“မယုံဘူး လို့ ပြောတာ မဟုတ်ဘူးလေ…. နှစ်ယောက်လုံး စောင့်ထိန်းရမှာကို ပြောတာပါ”
နှင်းသက် သည် ကိုကို လက်မောင်းဝယ် ခေါင်းအုံးအိပ်နေရာမှ ကိုကို့နှုတ်ခမ်းများကို စုပ်နမ်းလိုက်သည်။
ကိုကို အမှောင်တွင်းမှပင် နူးညံ့အိစက်သော အထိအတွေ့ကို ရရှိလိုက်သည်။ ဒါတွေက အလွတ်ရနေသော နှင်းသက်ရဲ့ အထိအတွေ့များပင်
သားကောင်နံ့ရလာသော ညီတော်မောင်သည်လည်း တင်းမာလာချေပြီ…
ကိုကို လှဲအိပ်ရင်းပင် နှင်းသက်ရဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကိုပွေ့ဖက်ပြီး မျက်နှာအနှံ့ မွတ်သိပ်စွာနမ်းလိုက်သည်။ နှစ်ဦးစလုံးမှာ တစ်ယောက်အလိုက် တစ်ယောက်သိပီးသားမို့
ထွေထွေထူးထူးပြောနေစရာ နေရာယူနေစရာ မလိုတော့… အလိုက်သင့်ပင် ရွေ့လျားရင်း အင်းဂျီ ဘောင်းဘီများ မရှိကြတော့
နှင်းသက်က အိမ်နေရင်း ညဝတ်အင်းဂျီနဲ့မို့ ပိုတောင်လွယ်ကူနေသေးသည်။ အခုအခံ မဝတ်ထားသော အင်းဂျီပါးအောက်မှ မို့မောက်သော အဝိုက်အဝန်းများမှာ
ကိုကို လက်များက အလိုအလျောက်ပင် နှင်းသက်ကိုယ်ပေါ်ဝယ် ပွတ်သပ်ပြေးလွှားနေသည်။
တစ်ဖြည်းဖြည်းနှင့် အောက်သို့ လျှောဆင်းလာသောကိုကို့ကို နှင်းသက် အသာအယာပင် နေရာယူလွယ်စေရန် ပေါင်များကို တစ်ဖြည်းဖြည်း ကားလိုက်လေသည်။
“လာပါ ဘာမှ မကြောက်နဲ့ ကို့ မေမေက သဘောကောင်းတယ် “
ဒီနေ့ နှင်းသက်ကို ကိုကို ဆွေပြမျိုးပြသဘောမျိုး မေမေနှင့်မိတ်ဆက်ပေးရန် ခေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ နှင်းသက်က လာချင်သော်လည်း မတော်ရသေးသည့်
ယောက္ခမနှင့် ဆုံတွေ့ရန် ကြောက်နေသေးလို့ မနည်းခေါ်လာရတယ်။ ကိုကို မေမေ့ကိုကြိုမပြောထား။ ကြိုပြောထားလျှင် မေမေက ဘာဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုစီစဉ်ထားတာမျိုးတွေ
လုပ်မှာစိုးလို့ ရုတ်တရက်ခေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါမှသာ မေမေက နှင်းသက်အပေါ် ဘယ်လို သဘောထားသလဲနှင့် နှင်းသက်နဲ့ မေမေရဲ့ အရှိအတိုင်းဆက်ဆံရေးကို
“လာထိုင် နှင်းသက် ကို မေမေ့ကို သွားခေါ်ဦးမယ်”
“အင်း မြန်မြန်ပြန်လာနော် ကို နှင်းသက် ကြောက်တယ်”
ကိုကို အိမ်နောက်ဖေး မီးဖိုခန်းတွင်း မေမေ့ကို ဝင်ကြည့်တော့ အဆင်သင့်ပင် မေမေ မီးဖိုခန်းရှင်းနေသည်နှင့် တွေ့သောကြောင့်
“သြော် သား ဘယ်တုန်းက ပြန်ရောက်လဲ နေ့လည်ဘက်ကြီး ဘာလာပြန်လုပ်လဲသား”
“မဟုတ်ဘူး မေမေ့ကို သားပြစရာရှိလို့ ပြန်လာတာ”
“ဘာလဲ ပြစမ်း ထူးထူးခြားခြားပါလား”
“လာ မေမေ ဧည့်ခန်းမှာ”
ကိုကို မေမေ့လက်ကို ဆွဲပြီး ဧည့်ခန်းသို့ ခေါ်လာခဲ့လေသည်။ ဧည့်ခန်းသို့အရောက် တစ်ယောက်တည်းထိုင်နေသော နှင်းသက်ကိုမြင်တော့
မေမေ့ခြေလှမ်းများ တုန့်ခနဲ့ရပ်သွားသည်။ စူးစမ်းသောအကြည့်ဖြင့် ကြည့်လာသော မေမေ့မျက်ဝန်းများကို ကိုကို နားလည်သည်။
“သားချစ်သူ နှင်းသက်တဲ့ မေမေ မေမေ့ကိုသားပြောပြတဲ့ နှင်းသက်လေ”
“နှင်းသက် ဒါ ကို့ မေမေ”
“ဟုတ်ကဲ့ အန်တီ သမီးနှင်းသက်ပါ”
“သြော်အေး ကိုကိုကတော့ အန်တီ့ကို ပြောဖူးပါတယ် ခုမှ သမီးကို မြင်ဖူးတာ သမီးက ချစ်စရာလေးပဲ”
ကိုကို စကားပြောနေကြတဲ့ သမီးယောက္ခမ နှစ်ယောက်ရဲ့ အရိပ်အကဲကို ကြည့်တော့ အေးဆေးအိုကေနေသည်မို့ နောက်ဖေးသို့ မသိမသာ ထထွက်လာခဲ့သည်။
မေမေနှင့် နှင်းသက်သောက်ရန် အအေး တစ်ခုခု စီစဉ်ပေးလိုက်ဦးမည်။ ကိုကို မီးဖိုခန်းထဲ ဟိုလှန် ဒီလှော နှင့် အလုပ်ရှုပ်နေချိန်တွင်ပင်
“သြော် မေမေ ဟိုလေ မေမေတို့ သောက်ရအောင် ဘာလုပ်ပေးရင် ကောင်းမလဲ ကြည့်နေတာ”
“အံမယ်လေး ငါ့သားရယ် တော်ပါ ထမင်းစားချိန်တောင် ရောက်တော့မယ် ဘာမှ မသောက်တော့ဘူး သားရော နှင်းသက်ရော ထမင်းစားသွားလေ”
“ဟုတ် မေမေ စားသွားမယ် “
“သားကလဲ ခေါ်လာမယ်ဆိုလဲ ကြိုပြောပေါ့ မေမေ တစ်ခုခု စီစဉ်ထားလို့ ရတာပေါ့ ခု ထမင်းကျွေးမယ်ဆိုမှ ဟင်းလဲ ဖွယ်ဖွယ်ရာရာမရှိဘူး”
“ရပါတယ် မေမေ သားကတမင် ဒီလိုဖြစ်စေချင်လို့ လုပ်လိုက်တာပါ “
“သွား ကောင်မလေး ရှေ့မှာ တစ်ယောက်တည်းကြောင်နေလိမ့်မယ်”
ကိုကို ရှေ့ခန်း ပြန်ထွက်လာပြီး နှင်းသက်နံဘေးဝယ်ထိုင်ချိန်
“ကို ကို့မေမေရော “
“အင်းပါ ဘယ်သွားလဲ နှင်းသက်ကိုတော့ ခဏထိုင်ဦး ကို့ကို သွားကြည့်မယ်ပြောတာပဲ”
“နောက်ဖေးမှာ ထမင်းစားဖို့ စီစဉ်နေမှာပေါ့”
“ကို့အိမ်ပဲ ကိုတစ်ယောက်တည်းနေပေါ့ “
ပြောပြောဆိုဆို နှင်းသက်တစ်ယောက် အိမ်နောက်ဖေးခန်းထဲသို့ ဝင်သွားတော့သည်။ ကိုကို ဧည့်ခန်းထဲတစ်ယောက်တည်း အူကြောင်ကြောင်နှင့် ကျန်ခဲ့သည်။
ယခင်က ကိုယ့်အိမ်နှင့် ကိုယ် နေချင်သလို နေခဲ့သော အိမ်က ခုတော့ ဘယ်နားနေလို့ နေရမည်မသိ ထိုင်လိုက် ထလိုက် ဟိုလျှောက်ဒီလျှောက် မီးဖိုခန်းထဲက နှစ်ယောက်
အဆင်မှပြေရဲ့လား သွားချောင်းလိုက်နှင့် ဖြစ်နေသည်။ နောက်ဆုံးတော့ တီဗွီဖွင့်ပြီး လိုင်းက လာနေသော တင်းနစ်ပွဲထိုင်ကြည့်နေလိုက်သည်။ ဝင်ဘယ်လ်ဒန် အိုးပင်း ဖိုင်နယ်
ဂျိုကိုဗစ်နှင့် နာဒယ်တို့ရဲ့ ပွဲကလဲ ကောင်းလှသည်။ ကြည့်ရင်းနှင့်ပင် အားလုံးကိုမေ့ကာ အားပေးနေမိသည်။ ဘယ်လောက်အချိန်ကြာသွားသည်မသိ။
ကိုကို နံဘေးဝင်ထိုင်ကာ ထမင်းစားရန်လာခေါ်သော နှင်းသက်ကို တွေ့မှပင် သတိပြန်ဝင်လာသည်။
“ကို လာလေ ထမင်းစားရအောင် ကို့မေမေ ခေါ်ခိုင်းတယ် “
“အား……….. မေ့တောင်မေ့သွားတယ် ဘယ်နှစ်နာရီတောင် ရှိသွားပြီလဲ”
“အင်း ခုမှ ဗိုက်တောင် ဆာလာသလိုပဲ ဘယ်လိုလဲ နှင်းသက် မေမေနဲ့ အဆင်ပြေရဲ့လား”
“ခစ်ခစ် ကို့ ကောင်မလေးအကြောင်း မသိလို့ မေးတာလား အေးဆေးပါ…”
“အင်း အဆင်ပြေရင် ပြီးတာပါပဲ နှင်းသက်ရယ် မေမေက စိတ်ကောင်းတယ် မဟုတ်လား”
နေ့လည်စာ ထမင်းဝိုင်းတွင် အဆင်ပြေနေသော နှင်းသက်နှင့် မေမေ့ကို ကြည့်ကာ ကိုကို စိတ်ချမ်းသာရပါသည။်
“သားနေ့လည်က သားကောင်မလေးကို ခေါ်လာတယ်ဆိုတော့ သားက သူ့ကို လက်ထပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီပြီပေါ့ “
“ဟုတ်ကဲ့ မေမေ သားဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားပါ…”
“အင်း ကောင်မလေးက ဆိုးတော့ မဆိုးပါဘူး လိမ္မာရေးခြား ရှိမယ့်ပုံ လူကြီးတွေကို ပေါင်းတတ်ပုံပါပဲ ဒါပေမယ့် သားရယ် သူ့မှာသာ”
“ဟင့်အင်း မေမေ သူ့ဘာသာ သူအရင်က ဘယ်လောက်ပဲ ဆိုးဆိုး ခုချိန်မှာ သူလိမ္မာနေပြီပဲ သားသူ့ကို ချစ်တယ်… “
မျက်နှာမကောင်းပဲ ထသွားသော မေမေ့ကို ကြည့်ပြီး ကိုကို စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါသည်။
သို့သော်လည်း ကိုကိုလဲ ဘာမှ မတတ်နိုင်ပါ… ဘာလို့ဆို နှင်းသက်ကို ကိုကိုချစ်သည်။ နှင်းသက်ကိုလဲ ကိုကို မှာထားပြီးသားဖြစ်လို့ နှင်းသက်လဲ နားလည်နိုင်မည်ထင်ပါသည်။
ကိုကိုနှင့်နှင်းသက် အတူတူဆုံဆည်းမည့်ရက်တွေက ဘယ်လောက်မှ မလိုတော့၊
ဒီနေ့ရက်တွေ ရောက်လာဖို့ကို ကိုကိုစောင့်နေရတာ ကြာလွန်းလှသည်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကိုကိုလဲ နှင်းသက်ရဲ့ စိတ်ကို သိပ်အစိုးရသည် မဟုတ်၊ သူ့စိတ်က ခုတစ်မျိုး တော်ကြာတစ်မျိုး ဒီနေ့ လိမ္မာနေပေမယ့် နောက်ရက်ကျရင် သောင်းကျန်းလျှင် သောင်းကျန်းတတ်သည်။
“ကိုကို နှင်းသက် ကို့ဆီက ဖုန်းမျှော်နေတာ”
“ဟုတ်လား ကိုလဲ နှင်းသက်ဆီ ဆက်မလို့ မေမေနဲ့ စကားပြောနေလို့”
“အင်း… နှင်းသက်လဲ မေးချင်လို့ ကို့ မေမေ ဘာပြောသေးလဲလို့”
“အဟဲ နှင်းသက်က ချစ်စရာကောင်းတယ်တဲ့…. လိမ္မာတယ်တဲ့”
ကိုကို လိမ်လိုက်ပြီ… မေမေ ပြောတာတွေသာ နှင်းသက်ကို ပြောလိုက်ရင် နှင်းသက်စိတ်ကောင်းမှာ မဟုတ်။မတတ်နိုင်ဘူးကွာ။ တစ်ဘက်က ကိုယ့်ရဲ့ မွေးသမိခင် ၊ တစ်ဖက်ကလဲ အသက်လောက်ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူ။ တကယ်တော့ မေမေသည် ကိုကို့ကို မပြောနိုင်လို့သာ လွှတ်ပေးထားသည့်ပုံ၊သူ့သားကိုတော့ ဒီလိုမိန်းကလေးနှင့် သဘောတူပုံ မပေါ်။
ကံကြမ္မာဇာတ်ဆရာသည် မျက်လှည့်ပြကွက်တစ်ကွက်နှင့် အတူ ကိုကိုနှင့် နှင်းသက်တို့ရဲ့ ကြားထဲ ဝင်လာခဲ့သည်။
ကိုကို အလုပ်ကိစ္စဖြင့် မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းသို့ ခရီးထွက်ရန် ပေါ်လာသည်။ ကိုကို မသွားချင်ပါ၊ ဖြစ်နိုင်ရင် နှင်းသက်အနားမှာသာ နေချင်သည်။ သူမနှင့် ဝေးဝေးကို မသွားချင်။ အမြန်ဆုံးနီးစပ်ချင်နေပြီ။
“နှင်းသက် ကိုယ် အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ခရီးထွက်ရမယ်”
“ဟုတ်လား ပျော်စရာကြီး နှင်းသက်လဲ လိုက်ချင်တယ်”
“တကယ်လား ဒါဆို ကိုယ်တို့ လက်မှတ်ထိုးလိုက်မယ်လေ. ပြီးရင် မေမေတို့ကို ပြပြီးနှင်းသက်လဲ ကိုယ်နဲ့ လိုက်ခဲ့လို့ ရတာပေါ့”
“ဟာ…. အဲ့လိုကြီးတော့ မလုပ်ချင်ပါဘူး နောက်ပြီးနှင်းသက် ခုမှ ကျောင်းပြီးထားတာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်သေးတယ်”
“ကိုယ်နဲ့ လက်ထပ်ပြီးရင်လဲ နှင်းသက် ခုနေသလို နေလို့ ရနေတာပဲ “
“အာ မသိဘူးကွာ. သေချာတာကတော့ နှင်းသက်လက်မထပ်ချင်သေးဘူး “
“နှင်းသက် ကိုယ့်ကို ပြောတော့ ကျောင်းပြီးတာနဲ့ လက်ထပ်မယ်ဆို”
“အဲ့ဒါက အရင်က ခု လက်မထပ်ချင်သေးဘူး ဘာလဲ ကိုက နှင်းသက်ကို စိတ်ဆိုးတာလား”
“စိတ်ဆိုးတာမဟုတ်ပေမယ့် နှင်းသက်က ခုပဲ မုန့်စိမ်းပေါင်း၊ ခုပဲ မုန့်ကျွဲသည်း လုပ်နေတာကိုး”
“တော်ပြီကွာ ဆက်ပြောနေရင် နှင်းသက်နဲ့ ကို စကားများတော့မယ်။ ခု ကိုပြောချင်တာက ကိုခရီးသွားမယ်မဟုတ်လား
ကိုကို ဘာမှ မတတ်နိုင်ပါ။ အလိုမတူပဲ အတင်းအဓမ္မလက်ထပ်လို့ မရတော့လဲ ကိုကို လက်လျှော့ပြီးသာ နောက်ဆံငင်လျက်နှင့် ခရီးထွက်ခဲ့ရသည်။ ဟိုရောက်မှပဲ ဖုန်းဆက်တော့မည်လေ။
ကိုကို ခရီးစဉ်အစပိုင်းတွင် အဆင်ပြေသော်လည်း နောက်ပိုင်းရက်များတွင် အဆင်မပြေမှုတွေ များလာသည်။ အဆင်မပြေသည်များမှာ ကိုယ်ဘက်က မှန်ရဲ့သားနှင့်
တစ်ဘက်သား အထင်လွဲမှုတွေ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အလွဲလွဲ အချော်ချော် ဖြစ်မှုတွေ များလာသည်။ သို့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုစိုက်နေသော်လည်း မရ။
တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုကတော့ အမြဲ ဖြစ်သည်။ အဆင်မပြေမှုတွေ များလာတော့ အလုပ်လုပ်ရတာ မပျော်တော့။ တိုင်ပင်ဖော်မရှိ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်လဲ
အဆက်အသွယ်ပြတ်နေသည်မှာ (ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားသည်မှာ) ကာလအတန်ကြာပြီမို့ သူတို့ ကိုလဲ မတိုင်ပင်ချင်။
အခက်အခဲ ကြုံမှ သူတို့ကို ဆက်သွယ်သည်ဟု ပြောလာမည်လေ။ စကားနာထိုးမည်။ နောက်ဆက်တွဲ သူတို့ မနှစ်သက်တဲ့ နှင်းသက်အကြောင်းတွေပါ
စကားနာထိုးလိမ့်မည်မို့ မဆက်ချင်။ နောက်ဆုံးတော့ နှင်းသက်ဆီသာ ဆက်ဖြစ်သည်။
လွမ်းလွန်းအားကြီးလို့သာ ဖုန်းဆက်လိုက်မိသည်။ မယ်မင်းကြီးမက ဟက်ဟက်ပက်ပက်မရှိ။ ဘာတွေများ ပြောင်းလဲနေပြန်ပြီလဲ နှင်းသက်ရယ် ငါ့ရင်တွေ မောရပါလား။
ကိုကို တစ်လခန့် မြို့ကလေးနှင့်ဝေးကွာခဲ့သည်။ ဒီမြို့ကလေးမှာ သူချစ်တဲ့ မိန်းကလေး၊ သူချစ်တဲ့ မေမေ၊ သူခင်တွယ်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ရှိသည်။ ဒီမြို့ကလေးကို သူချစ်သည်။ အခုတော့ သူချစ်တဲ့ မြို့ကလေးကို ပြန်လာခဲ့ရပြီလေ။
သူပြန်လာတာကို မေမေ့ကိုလဲ မပြော၊ နှင်းသက်ကိုလဲ မပြော အားလုံးကို အံ့သြသွားစေချင်သည်။ ကိုကို မြို့ကလေးထဲသို့
ကားကို ဖြေးဖြေးမောင်းဝင်လာခဲ့ရင်းမှ စိးကရက်ကုန်နေသည်ကို သတိရသွားသည်။ အိမ်ပြန်ရောက်လျှင် ပင်ပန်းလာသည်မို့ ရေမိုးချိုးပြီးလျှင် တစ်ခါတည်းအခန်းထဲဝင်ပြိး နားတော့မှာမို့၊ စီးကရက်သောက်ချင်လာလျှင် တစ်ခေါက်ပြန်ထွက်နေရမည်။
တစ်ခါတည်းဝယ်သွားတော့မည်။ အတော်ပင် ရှေ့နားမှာက စတိုးဆိုင်ရှိသည်မို့ ကားကို စတိုးဆိုင် ပါကင်ထိုးရန် လမ်းကြော ယူလိုက်သည်တွင် ကိုကို့ကားနံဘေးသို့ ကပ်လျက်ကျော်သွားသော ဆိုင်ကယ်တစ်စီး၊ ဆိုင်ကယ်မောင်းသွားသော ကောင်ကလေးခါးကို ဖက်သွားတာက နှင်းသက်များလား… ရုတ်တရက်မို့ ဆိုင်ကယ်ကလဲ မြန်နေသည်မို့ မသေချာလိုက်။
ဘာမှ မစဉ်းစားချင်ဘာ…. အတွေးတွေ ရှုပ်ရှက်ခတ်နေသော ခေါင်းကို ရှင်းထုတ်ရင်း အိမ်သို့သာ ပြန်ခဲ့လိုက်သည်။ ခြံထဲသို့ ကားကို ကွေ့ဝင်ရင်း မေမေ့ကို ခြံဝင်းလေးထဲ မျက်စိဝေ့ကြည့်လိုက်တော့ မေမေကတော့ ထုံးစံအတိုင်း သူ့ပန်းအိုးများနှင့်သာ သူ့ကိုတွေ့တော့
“ဟယ်….. သား ကိုကို ကြည့်စမ်း ပြန်လာမယ်လဲ မပြောပဲ ဒီမှာ အမေလုပ်တဲ့သူက မျှော်နေတာ “
“ဟားဟားဟား ခု သားပြန်လာတော့ မေမေပျော်သွားတယ်မဟုတ်လား… မေမေပျော်တဲ့မျက်နှာလေးကို မြင်ချင်လို့”
“သား ဘာမှ မပြောပဲ ပြန်လာတာ ခုတော့ သားမောလာသမျှတွေ အားလုံး မေမေပြုံးနေတဲ့ မျက်နှာမြင်ယုံနဲ့ အကုန်ပျောက်”
“ငါ့သား စကားတွေတတ်နေတယ် ဟင်… လာချွဲနေတယ် ဟုတ်လား”
“မဟုတ်ပါဘူးမေမေရယ် တကယ်ပြောတာ ဘာဟင်းချက်လဲ မေမေ သားဗိုက်ဆာပြီ”
“ငါ့သားအကြိုက်ပေါ့.. ငါးဆုပ်ရယ် သစ်တော်သီးငါးပိထောင်းရယ် တို့စရာရယ်၊ ပဲနီလေးကြာဆံဟင်းချိုလေးရယ်”
“ဟား….. မိုက်တယ် မေမေက သားအကြိုက်တွေ ဒီနေ့ကျမှ ချက်ထားတာလား”
မေမေဘာမှမပြော… ပြုံးပြီးသာ သားချစ်ရဲ့ မျက်နှာကို ကြည့်နေသည်။ သားဖြစ်သူ ခရီးထွက်သွားပြီ တစ်ပါတ်အကြာကတည်းက သားကြိုက်တတ်တဲ့ ဟင်းတွေချက်ကာ သားဖြစ်သူ ပြန်လာမဲ့ရက်တွေကို မျှော်နေတာကို ကိုကိုကတော့မသိ။ သူပြောချင်တာများ ပြောပြီး အိမ်ထဲဝင်သွားတော့သည်။
“ကို ပြန်မလာသေးဘူးလား ကြာလိုက်တာကွာ”
“ကို ခု ဘယ်က ပြောနေတယ် ထင်လို့လဲ “
“ကိုယ် ခု ပြန်ရောက်နေပြီ… “
“အင်း တစ်ကယ်ပေါ့.. ခု ကိုယ် နှင်းသက်နဲ့ တွေ့ချင်တယ်”
“အာ…. ကို ကလဲ ပြန်လာမယ်ဆို ကြိုပြောပေါ့… ဒီနေ့ နှင်းသက် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လိုက်လည်ထားတော့ ပြန်ထွက်လို့ မရတော့ဘူး…”
“ဒီလိုပဲပေါ့ လိုက်လည်တာပေါ့… “
နှင်းသက် အသံက မြူးရွှင်နေသည်။ နှင်းသက်ပျော်နေတာ သိရတော့ ကိုကို နေ့လည်က ကိစ္စမေးဖို့ရာ မမေးဖြစ်တော့။ နှင်းသက်ကိုယ်တိုင်ကလဲ သူငယ်ချင်းများနှင့် သွားလည်သည် ပြောလာသောကြောင့် နေ့လည်က တွေ့တာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်နှင့်ပင် ဖြစ်မည်ဟု တွေးထားလိုက်သည်။ သို့သော် နောက်ပိုင်းရက်များတွင်
နှင်းသက် ကိုကို ကို ဆက်ဆံသည်များက အိုဗာ ဖြစ်နေသည်။ နှင်းသက်ရဲ့ မျက်လုံးများကို ရင်ဆိုင်ကြည့်ပြီး စကားပြောလျှင် နှင်းသက်မျက်လုံးများကို လွှဲလွှဲသွားသည်မှာ
ခဏ ခဏ။ ၄င်းမှာ အပြစ်ရှိထားလို့ မျက်လုံးချင်း မဆုံရဲသော သူများရဲ့ အနေအထားဖြစ်သည်။ ကိုကို ကိုယ်တိုင်လဲ နှစ်တွေ အကြာကြီး ရင်းနှီးကာ ချစ်ခဲ့သူမို့
သူ့ချစ်သူ နှင်းသက်ရဲ့ ပျက်ယွင်းနေသော အမူအယာများကို သတိထားမိလာသည်။
ကိုကို သူမရှိသည့်ကာလတွင် နှင်းသက်ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ ဆိုတာ သိအောင် ကြိုးစားစုံစမ်းသော်လည်း မသိရ။ သူပင် အစိုးရိမ်လွန်လေသလား….
တစ်ရက်တွင် နှင်းသက် ကိုကို ရှိရာ ဆိုင်သို့ ရောက်လာသည်။
“နှင်းသက်တို့ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ရအောင်ကွာ… ရုပ်ရှင်မကြည့်ရတာ ကြာပြီ”
“အေး ဟုတ်သားပဲနော်… ကောင်းတယ် ကိုယ်လဲ အလုပ်တွေ ရှုပ်နေတာ ခေါင်းတွေနောက်နေတယ် သွားကြည့်မယ်လေ”
“ဟေး…………. လာ သွားမယ် ဒီနေ့ ရုံတင်တဲ့ကား ကောင်းတယ်”
“အာ နှင်းသက်ကလဲ ကိုယ် ခုချက်ချင်းတော့ ဘယ်သွားလို့ ရဦးမလဲကွယ်။ အားတဲ့တစ်ရက် သွားကြည့်မယ်လေနော်”
ကောင်မလေး စိတ်ကောက်သွားချေပြီ… မျက်နှာ စူပုတ်ပုတ်နှင့် ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးရှေ့သွားကာ ဂိမ်းသွားဆော့နေတော့သည်။
ကိုကိုလဲ ချော့ချင်ပေမယ့် လတ်တလော ချိန်းထားသည့် အလုပ်တွေ များနေသည်မို့ သွားမချော့အားသေး. အလုပ်ဘက်ကိုသာ အာရုံပြန်စိုက်လိုက်သည်။
နှင်းသက်သည် တစ်ခါတစ်လေ အားနေလျှင် ယခုလိုပင် ကိုကိုဓါတ်ပုံဆိုင်လေးသို့လာကာ လာလာ ကူတတ်သည်။ တစ်ခါတစ်လေ ကိုကိုနှင့်အတူ ညနေဆိုင်သိမ်းပြီး
မုန့်စားပြီးမှ ပြန်တတ်သလို၊ တစ်ခါတစ်လေကျလျှင်လဲ သူ့ဘာသာသူ ပျင်းသည်ဆိုကာ ပြန်တတ်သည်မို့ ကိုကိုလဲ ပစ်ထားလိုက်သည်။
ရုပ်ရှင်လိုက်မပြလို့ စိတ်ကောက်သတဲ့၊ ကလေးလဲ မဟုတ်၊ မနက်ဖြန်သန်ဘက်ခါပဲ ကိုကိုနှင့်လက်ထပ်တော့မည်။ တစ်ခါတစ်လေလဲ လူကြီး၊
တစ်ခါတစ်လေလဲ သူပဲ ကလေး လုပ်တတ်သည်။
ထိုအဖြစ်အပျက်များ ဖြစ်ပွါးပြီး ရက်သတ္တပါတ် တစ်ပါတ်ခန့်ကြာပြီးနောက်
ကိုကို အလုပ်လုပ်နေသော ထိုင်ခုံအနောက်သို့ လူရိပ်တစ်ရိပ်ရောက်ရှိလာသည်။ လှည့်မကြည့်ပဲ သိလိုက်သည်က နှင်းသက်… ချစ်သူရဲ့ အငွေ့အသက်မို့ သိသည်ပင်။
လုပ်နေသော အလုပ်ကို ခေတ္တရပ်ကာ ခုံကိုလှည့်လိုက်တော့။ အိုး ခေတ်ဆန်ဆန် ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်သည်။ တီရှပ်ခပ်ပွပွကို ခါးတွင် သားရေပင်ဖြင့်စည်းထားသည်။ ဂျင်းပန် ခပ်ကျပ်ကျပ်က လှပသော ကိုယ်လုံးလေးရဲ့ ကောက်ကြောင်းကို အတိအကျဖော်ပြထားသည်။ လွယ်ကြိုးရှည်ရှည်နဲ့ အိတ်သေးသေးလေး စလွယ်သိုင်းလွယ်ကာ ဆံနွယ်တို့ကို ဘေးတစ်ခြမ်းစည်းထားသော ဒီဇိုင်းလေးနှင့်က သူချစ်ရတဲ့ နှင်းသက်တဲ့လား။
“ဟ လန်းလှချည်လား ဒီဇိုင်းက “
“အင်း…. လန်းရမယ်လေ… ကို့ ချစ်ပဲဟာ ဟဲဟဲ”
“ဘာလဲ လန်းတာ မကြိုက်ဘူးပေါ့ ဒါဆို ပုံတုံးတုံးပဲ နေလိုက်မယ်လေ”
“မဟုတ်ပါဘူး ဒီလောက်လန်းနေတာ ဘယ်သွားမလို့လဲ”
“ကို့ဆိုင်ကိုပဲ လာတာပါ လန်းထားတာက ကို့ဆိုင် ပိုလှသွားအောင်လေ မလှဘူးလား….”
“ဟ ဒီနေ့တော့ ကိုယ့်ဆိုင်က ပိုက်ဆံပုံး လျှံမယ်နဲ့ တူတယ်”
“ဟုတ်ပါ့ ဟုတ်ပါ့ ကို မအားသေးဘူးလား ရုပ်ရှင်သွားကျိမယ်လေ… ကားတောင်ချိန်းတော့မယ်”
“လုပ်ပြီ နှင်းသက်ကလဲ ဒီနေ့တော့ မသွားတော့ဘူး နက်ဖြန်ကျရင် တစ်နေကုန် လိုက်လည်မယ်ကွာ ဆိုင်ပိတ်ပြီး နော်”
ပြောပြောဆိုဆို ဆိုင်ထဲ ခုန်ပေါက်ကကာ ကိုကိုပါးကို ရွှတ်ခနဲလာနမ်းသည်။ ဓါတ်ပုံများကို အယ်လ်ဘမ်ထဲ ထည့်နေသော တပည့်ကျော်ကတော့ မထူးဆန်းသော မြင်ကွင်းပြုံးပြီးသာ ကြည့်နေသည်။
နေ့လည်ထမင်းစားပြီးချိန် နှင်းသက် ပန်းကန်များကို နောက်သို့ သွားပို့ချိန် ကိုကို ဘာရယ်မဟုတ်
အိတ်ကလေးကို ဖွင့်ကြည့်မိတော့ အိတ်ကလေးအတွင်းဝယ်၊ ပိုက်ဆံအချို့ရယ် ဖုန်းရယ်၊ တစ်ရှူးထုပ်သေးသေးလေးရယ်၊ မှန်သေးသေးလေးရယ်၊ နှုတ်ခမ်းနီရယ်။ ကိုကိုဆိုင်လာတာ နှုတ်ခမ်းနီက ဘာလုပ်ဖို့လဲ။
နောက်ဖေးမှ ပြန်လာသော နှင်းသက်က
“ဟိတ် ဘာတွေ မွှေနေလဲ”
“ဟဲ ကြည့်ကြည့်တာ ဘာရှိလဲလို့”
“နှုတ်ခမ်းနီက ဘာလို့လဲ “
“ဘာလုပ်ရမလဲ ပျက်သွားရင် ပြန်ဆိုးဖို့ပေါ့ ဒါများ”
ထိုစဉ် နှင်းသက်ဖုန်းလာသောကြောင့် ဟိုလျှောက်ဒီလျှောက်နှင့် စကားပြောအပြီးတွင်
“ကို နှင်းသက်သူငယ်ချင်းတွေ ခေါ်လို့ ခဏသွားချင်တယ်”
“ဟမ် လုပ်ပြီ ဘယ်သွားမလို့လဲ “
“မသိဘူး လိုက်လည်မလို့ ဖြစ်မှာပေါ့”
“အေးလေ.. သွားလေ သွားပေါ့”
“ကို မပေးသွားရင် နှင်းသက် မသွားပါဘူး”
ကိုကိုစိတ်ကိုသိနေသည့် နှင်းသက်က ပေးမသွားလျှင် မသွားဘူးဆိုကာ နွဲ့ပါသည်။
ကိုကို မရယ်ချင် ရယ်ချင်နှင့် ရယ်ပြကာ နှင်းသက်ကို သူ့သူငယ်ချင်းများနှင့် ချိန်းထားသော နေရာသို့ လိုက်ပို့ကာ ဆိုင်သို့ ပြန်လာခဲ့လိုက်သည်။
ဆိုင်ပြန်ရောက်သော်လည်း အလုပ်လုပ်ရသည်မှာ စိတ်မဖြောင့်။ အတွေးထဲမှာ ချာချာလည်နေသည်။ အလုပ်လုပ်နေရင်း နာရီကြည့်လိုက်တော့ ၄ နာရီပင် ကျော်လာလေပြီ။
ဘယ်တွေရောက်နေသည်မသိ။ ဖုန်းခေါ်ကြည့်လိုက်မယ် ပြန်မယ်ဆိုရင် တစ်ခါတည်းခေါ်ပြီး ပြန်ရအောင်။
ဖုန်းဝင်သော်လည်း မကိုင်၊ ကိုကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်နှင့် ဆက်တိုက်ခေါ်သော်လည်း မကိုင်၊
ကိုကိုစိတ်ထဲဝယ်သံသယဝင်လာသည်။ ဘာကြောင့် ဖုန်းမကိုင်တာလဲ၊ အရင်ကဆို ဘယ်သူငယ်ချင်းများနှင့် ဘယ်ပဲရောက်နေနေ ဖုန်းခေါ်လျှင်ကိုင်သည်။
အဖြစ်အပျက်များကို ဆက်စပ်တွေးတောကြည့်ကာ ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခု ချလိုက်သည်။
ရုပ်ရှင်ရုံအတွင်းမှ လူများ တစ်ဖွဲဖွဲ ပြန်ထွက်လာကြနေပြီ။ ကိုကို ရုပ်ရှင်ရုံပေါက်မှ ထွက်လာသူများကို မလွတ်တမ်းလိုက်ကြည့်နေသည်။ လူများ တစ်ဖြည်းဖြည်း ထွက်လာကြသည်မှာ
တစ်ဝက်ခန့်အရောက်တွင် သူ မှတ်မိနေသော ပုံရိပ်လေး တစ်ခု ကိုကို မြင်ကွင်းထဲ ဝင်ရောက်လာသည်။ ဒီတစ်ခါတော့ သူ လူမမှားနိုင်ပါ။ ဘာလို့ဆို နေ့လည်ကမှ မြင်ထားသော
ဒီဇိုင်း၊ ဝတ်ထားသော အဝတ်အစားများဖြစ်နေသည်ကြောင့်ပင်။ သို့သော် ကွာခြားသည်က ထိုပုံရိပ်ကလေးသည် နံဘေးမှ အရပ်မြင့်မြင့်နှင့် ကောင်လေး တစ်ယောက်ရဲ့
လက်မောင်းကို တွဲခိုထားသည်။ မျက်နှာမှာ ပြုံးရွှင်နေသည်။ သူတို့ နှစ်ယောက်ကို ကြည့်ကာ ကိုကို ရင်တွေ ပွင့်ထွက်မတတ် နှလုံးခုန်မြန်လာသည်။ အသားတွေ တစ်ဆတ်ဆတ်တုန်ကာ ဒူးများ မခိုင်ချင်ပင် ဖြစ်လာသည်။ သေချာအောင် အထပ်ထပ် အခါခါ ကြည့်သည်။ သေချာသည်။ သူငယ်ချင်းတွေ ပါလေသလား ဘေးနားကြည့်လိုက်တော့
မည်သူမှ မပါ၊ တစ်လောကလုံးတွင် သူတို့ နှစ်ဦးတည်းသာ ရှိသည့်အထင် ။ ကိုကို တစ်ဖြည်းဖြည်း သူတို့ နှစ်ယောက်ရှေ့သို့ လူများကို တိုးဝှေ့ရင်း တိုးကပ်လာလိုက်သည်။
စိတ်ထဲတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုမှာ ခိုင်မာနေပြီးသား …
ကိုကို အတွေးထဲတွင် သူ့ကို သနားစရာ သတ္တဝါတစ်ကောင်လို ကြည့်သော သူငယ်ချင်းများရဲ့ အကြည့်
သားဖြစ်သူကို မပြောနိုင်လို့ လွှတ်ထားရတဲ့ မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ ဝမ်းနည်းတဲ့ အကြည့်
သူ့ကို လှည့်ချင်သလို လှည့်ခဲ့တဲ့ နှင်းသက်ရဲက အကြည့်များ
ကိုကို လက်မှ ပါတ်ထားတဲ့ နှင်းသက်မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးထားသော နာရီကို ချွတ်လိုက်သည်။
“ဟုတ်တယ် ကိုယ်ပါ “
“ဘာမှ မပြောပါနဲ့တော့ “
နှင်းသက်ရဲ့ လက်ထဲသို့ သူမ မွေးနေ့လက်ဆောင် ပေးထားခဲ့သော နာရီလေးကို ထည့်ပေးခဲ့ကာ လှည့်ထွက်ခဲ့လိုက်တော့သည်။
လူတွေအမြင်မှာတော့ နာရီလေးတစ်လုံးပင်။ သို့သော် ထိုနာရီလေးနှင့်အတူ. ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရား၊ ယုံကြည်မှု၊ ဘဝတစ်ခု၊ နှလုံးသားတစ်စုံ
မုန်းတီးမှု အားလုံး အာားလုံးပါသွားသည်ကိုတော့……
အဟတ် ခုတော့ ငါလွတ်လပ်သွားပီပေါ့
မင်းနဲ့ ချစ်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်တောင်ပြည့်တော့မယ်နော်….. အဲ့ဒီအချိန်ကာလအတွင်းမှာ ငါဒဏ်ရာတွေအများကြီးရခဲ့တယ်
ပျော်ခဲ့ရသလို ငိုခဲ့ရတဲ့ ညတွေလဲ ရှိခဲ့တယ်…. ဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေ အားလုံးကို မင်းကိုချစ်တဲ့အချစ်စိတ်တွေနဲ့ ငါ အမှောင်ချပေးခဲ့တယ်
ဒါတွေကို မင်းသိရဲ့နဲ့ မင်းမပြင်ခဲ့ဘူး….. မင်းကို ပြင်ဆင်ဖို့အချိန်တွေ ငါ နှစ်ပေါက်အောင် ပေးခဲ့တယ်…. မဲပြာပုဆိုးဇာတ်လမ်းကို မင်းက ခုံမင်နေတုန်းပဲကိုး
ဒါပေမယ့် ချစ်သူရပီးဖြစ်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက် မလျှောက်သင့်တဲ့လမ်းကို မလျှောက်ရအောင် တွဲခေါ်တဲ့လက်ကို
မင်းပုတ်ထုတ်ခဲ့တယ်….. အဟား ဟား….. ငါက နွားတစ်ကောင်နီးနီး ဖြစ်လုနေပြီဆိုတာ သိရက်နဲ့ ငါ့သူငယ်ချင်း ငါ့မိဘ မောင်နှမ တွေအားလုံးနဲ့ဆန့်ကျင်ပီး
ပုတ်ထုတ်နေတဲ့မင်းရဲ့ လက်ကို ငါ အတင်းအမိအရဖမ်းပီး ဆွဲတင်နေတယ် ….. အချိန်နည်းနည်းကြာ မင်းရင့်ကျက်ချင်သလိုလိုဖြစ်လာတော့
ငါ့ကို ကတိတွေ အထပ်ထပ်ပေးခဲ့တယ် မှားခဲ့ပါပြီဆိုပြီ…. ငါမင်းကို ပြုံးပြနေပေမယ့် ငါ့စိတ်ထဲမှာ သံသယဆိုတဲ့ မွှားကောင်တစ်ကောင် ခိုဝင်သွားပြီ
ခွေးမြီးကောက်ကျည်တောက်စွပ်ဆိုတာ ခုတော့ငါနားလည်သွားပါပြီ…. လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ ပါစင်နယ်ကို ငါ မဝင်စွက်ဖက်တတ်ဘူး
ပရိုက်ဗိတ်စီ ထားသင့်တယ်ဆိုတာကို ငါသိတယ်…. ဒါပေမယ့် မင်းရဲ့ဖုန်းထဲက မက်ဆေ့ခ်ျတွေ ဖုန်းရီကော့တွေ ကြည့်ပီးချိန်မှာ…..
အဟတ် ဟတ် ….. ငါမနေ့ကပဲ လွတ်လပ်သွားခဲ့တယ်…….